MODA | Article Detail | ခံစားမှုတွေကသာ အနုပညာဆိုတဲ့ Gabriel Phway
ခံစားမှုတွေကသာ အနုပညာဆိုတဲ့ Gabriel Phway
ဂီတကြောင့် အသက်ရှင်ရတာ သက်သောင့်သက်သာ ရှိတဲ့ကောင်မလေး။ ဖန်တီးမှုတွေကိုသာ အနုပညာလို့ အဓိပ္ပါယ်ဖွင့်တတ်သူ။ ဖြစ်ပေါ်လာတဲ့ စိတ်ခံစားချက်တိုင်းကို ပြန်လည်ခံစားပြီး သီချင်းတွေကို ဖန်တီးတတ်တဲ့သူမရဲ့ ဂီတအပေါ်ခံယူချက်။
ဂီတကြောင့် အသက်ရှင်ရတာ သက်သောင့်သက်သာ ရှိတဲ့ကောင်မလေး။ ဖန်တီးမှုတွေကိုသာ အနုပညာလို့ အဓိပ္ပါယ်ဖွင့်တတ်သူ။ ဖြစ်ပေါ်လာတဲ့ စိတ်ခံစားချက်တိုင်းကို ပြန်လည်ခံစားပြီး သီချင်းတွေကို ဖန်တီးတတ်တဲ့သူမရဲ့ ဂီတအပေါ်ခံယူချက်။ Underground လောကကနေ ဂီတလောကထဲကို ကြိုးစားတက်လှမ်းလာခဲ့တဲ့ သူမဆိုတဲ့ Gabriel Phway ရဲ့ ခံယူချက်၊ ယုံကြည်ချက်နဲ့ ခံစားမှုတွေအကြောင်းကို ယခုလအတွက် MODA Art ကဏ္ဍမှာ ဖော်ပြပေးလိုက်ပါတယ်။
ဖွေးခုနကပြောခဲ့သလိုပါပဲ။ Neo Soul တို့ jazz တို့လို music တွေကို Base လုပ်ထားတဲ့ Music တွေကိုပဲလုပ်သွားဖြစ်မှာပါ။ ဒါမယ့်အဲ့အပေါ်မှာတော့ experiment လုပ်တဲ့ဟာတွေကို လုပ်ဖြစ်မယ်။
ဘာကြောင့် ဒီ Music ပုံစံကို ရွေးချယ်ဖြစ်တာလဲ။
အဲ့ဒါလည်း ကိုယ်ရင်ခုန်လို့ပေါ့။ ဒီMusic ပုံစံကို နားထောင်ရင် အကြာကြီးနားထောင်ဆိုလည်း နားထောင်နိုင်တယ်။ ကြားလိုက်တာနဲ့ စိတ်ထဲမှာ feeling တစ်ခုရတယ်။ ကိုယ်သဘောကျတဲ့ ကိုယ့်ရဲ့ Crush ကို တွေ့သလို ကိုယ့်ချစ်သူကို တွေ့သလိုအဲ့လိုမျိုး feeling ပေါ့။ မရိုးသွားတဲ့ feeling မျိုးဖြစ်တယ်။ အဲ့ဒါကြောင့် ဒီ music ကို ရွေးဖြစ်တာပါ။
သိတတ်စအရွယ်မှာ စတင်လေ့လာခဲ့တဲ့ instrument ကဘာလဲ။ Instrument ဘယ်နှမျိုးလောက်တီးတတ်လဲ။
စလေ့လာဖြစ်တာက Piano ပါ။ Guitar လည်း နည်းနည်းပါးပါးတီးတတ်တယ်။ အဓိကကတော့ သီချင်းရေးရင် Piano နဲ့ ရေးပါတယ်။
ဖွေး အနုပညာကို define တော့ မလုပ်ချင်ဘူး။ လုပ်စရာလည်းမလိုဘူးလို့ထင်တယ်။ ဖွေးဖန်တီးစရာရှိတာကို ဖန်တီးတယ်။ ဖွေးခံစားလို့ရတယ်ဆိုရင် ဒါဖွေးအတွက် Art ပဲ။ Definition တစ်ခုအနေနဲ့တော့ ပြောလို့မရဘူး။ စိတ်ထဲမှာဖြစ်လာတဲ့ feeling ပဲပေါ့။ “Maybe this is art for me” အဲ့လိုမျိုးပေါ့။ တစ်ယောက်နဲ့တစ်ယောက်လည်း art ကို ခံစားတဲ့ပုံစံချင်းတော့ တူမှာမဟုတ်ဘူးထင်တယ်။
စောခူဆဲသမီးဖြစ်နေလို့ ဒီဂီတလမ်းကြောင်းပေါ်လျှောက်ရတာ လွယ်ကူခဲ့လား။
ပါပါးရဲ့ သမီးဖြစ်နေလို့တော့ လူတွေပိုချစ်ကြတာလည်း ကြုံရပါတယ်။ အခွင့်အရေးတွေပိုရတာလည်း ရှိပါတယ်။ ဒါပေမယ့် တကယ်တမ်းဖွေး Music စလုပ်တဲ့အချိန်မှာ ဖွေးက mainstream ကနေသွားတာမဟုတ်ဘူး။ underground ကနေသွားတာဆိုတော့ underground လောကမှာလည်း ဖွေးကို စောခူဆဲသမီးမှန်း သိကြတာမဟုတ်ဘူးဆိုတော့ ဖွေးလည်း တခြား artists တွေနဲ့ နည်းတူ struggle လုပ်ခဲ့ရတာပါပဲ။ ဒီသီချင်းတွေဖန်တီးတယ်ဆိုတာလည်း ကိုယ့်ရဲ့ ကိုယ်ပိုင်ဖန်တီးမှုတွေပါပဲ။
Music နဲ့ ပတ်သက်ပြီးအဖေ့ရဲ့ ပံ့ပိုးမှုကရော ဘယ်လိုရှိလဲ။
အဖေကတော့ အမြဲရှိနေပေးတယ်။ ဒါမယ့် ဖွေးယုံကြည်တဲ့လမ်းကိုသွား လွှမ်းမိုးမှုတွေမလုပ်ဘူး။ ဖွေးယုံကြည်ရာကိုလုပ် သူ့ကို တိုင်ပင်လို့ရတယ်။ ဆွေးနွေးလို့ရတယ်။
လူငယ်တစ်ယောက်ရဲ့ Music အပေါ်ခံယူချက်။
ဖွေးအမြဲပြောနေသလိုပဲ Music ရှိနေလို့ ဖွေးအသက်ရှင်ရတာ သက်သောင့်သက်သာရှိတာပေါ့။
ဖွေးနဲ့အတူကြီးပြင်းခဲ့တဲ့ သီချင်းတစ်ပုဒ်ကို ပြောပါဆိုရင် ဘယ်သီချင်းဖြစ်မလဲ။
ဖွေးစင်ပေါ်မှာအမြဲတမ်းဆိုဖြစ်တဲ့ သီချင်း L O V E ကို ဖွေးပြောချင်တယ်။ ဘာလို့လဲဆိုတော့ အဲ့သီချင်းက ငယ်ငယ်လေးကတည်းက အမေက သူကြည့်တဲ့ ကိုရီးယားကားထဲမှာ မင်းသမီးက အဲ့သီချင်းကို ဆိုတာ သူကြားတော့ သမီးနဲ့လိုက်မှာပဲဆိုပြီး ဆိုခိုင်းတယ်။ အဲ့ဒါနဲ့ အဖေ၊ အမေ၊ သူငယ်ချင်းတွေရဲ့ မွေးနေ့ပွဲတွေရှိရင် အဲ့သီချင်းကို အမြဲဆိုဖြစ်တယ်။ နောက်ကျတော့ မင်္ဂလာဆောင်တွေမှာလည်း ဆိုတယ်။ ကြီးလာတဲ့အခါကျတော့ တောက်လျှောက်ဆိုဖြစ်နေတာပေါ့နော်။
သီချင်းတွေကို ဘယ်လိုအချိန်မျိုးမှာ ရေးတတ်လဲ။
အဲ့ဒါလည်း ပုံသေမရှိဘူး။ ဖွေးခေါင်းထဲကို တစ်ခါတစ်လေကျရင် သံစဉ်တွေရောက်လာတယ်။ တစ်ခါတစ်လေကျရင် စာသားတွေရောက်လာတယ်။ အဲ့လိုရောက်လာတဲ့အချိန်တွေကလည်း ကားမောင်းနေတဲ့အချိန်လည်းဖြစ်နိုင်တယ်။ စာမေးပွဲခန်းထဲမှာ စာမေးပွဲဖြေပြီးထိုင်နေတဲ့အချိန်လည်း ဖြစ်နိုင်တယ်။ အဲ့လိုအချိန်တွေမှာ စိတ်ထဲကို ရောက်လာရင် စာရွက်အပိုင်းအစလေးတွေပေါ်မှာ ရေးထားတယ်။ မှတ်ထားတယ်။ သံစဉ်တွေရောက်လာရင်လည်း ဖုန်းနဲ့ ပြန်ပြီး record လုပ်ထားတယ်။ အဲ့ဒါလေးတွေကိုမှ ကိုယ်အချိန်ပေးနိုင်တဲ့အခါကျရင် Piano ရှေ့မှာ ထိုင်ပြီးတော့ Chorus တွေဘာတွေ သေချာရှာပြီးတော့ ဆက်ရေးတာပေါ့။
ဘယ်လိုစိတ်ခံစားမှုတွေကို အခြေခံပြီး အနုပညာတွေပေါက်ဖွားလာရတာလဲ။
စိတ်ခံစားမှုတွေက အမျိုးမျိုးပဲ။ ပျော်တာကနေလည်း ဖန်တီးဖြစ်တယ်။ ဝမ်းနည်းရာကနေလည်း ဖန်တီးဖြစ်တယ်။ အဲ့ဒါအပြင် ကြားလိုက်တဲ့အသံ၊ မြင်လိုက်တဲ့မြင်ကွင်း၊ တိုက်တဲ့လေတွေကအစ ပြန်ခံစားပြီးတော့ ဖန်တီးဖြစ်တယ်။ စိတ်ခံစားမှုအစုံပါပဲ။
ရေးထားတဲ့ကဗျာတွေမှာ ဘဝအကြောင်းတွေကိုတွေ့ရတယ်။ ကဗျာတွေက ဘာကိုပြောချင်တာလဲ။
ကဗျာတွေအများကြီးတော့ မရေးဖူးဘူး။ ကိုယ့်စာအုပ်တွေထဲမှာ ကိုယ်တစ်ယောက်တည်းရေးပြီး ကိုယ်တစ်ယောက်တည်းဖတ်တဲ့ ကဗျာတွေတော့ရှိတယ်။ ဒါပေမယ့် MDMfs ကဗျာရဲ့ နိဒါန်းအနေနဲ့ ထည့်ခဲ့တဲ့ကဗျာလေးကတော့ သူများနဲ့ share လုပ်ဖြစ်တယ်။ ဖွေးက ကိုယ့်ရဲ့ဖြစ်တည်မှုကို အမြဲတမ်းပြန်ပြီးတော့ မေးခွန်းထုတ်တတ်တယ်။ နောက် ဘဝဆိုတာလည်း Madanma sis လိုပဲ မဆုံးနိုင်တဲ့အသွင်ပြောင်းမှုတွေအများကြီး ဆက်ပြီးတော့ ဖြစ်နေတယ်လို့ ယုံကြည်တယ်။ အဲ့ဒါကိုအခြေခံပြီးတော့ သေခြင်းတရားနဲ့ ပတ်သက်တဲ့အကြောင်းအရာတွေ ပြီးတော့ ဘယ်အရာမဆိုအရာရာတိုင်းက သိပ်ပြီးတော့ ကြီးကျယ်ခမ်းနားနေတာမဟုတ်ဘူး။ အနက်အဓိပ္ပါယ်ရယ်လို့လည်း ဘာမှ နက်နက်နဲနဲမရှိနေဘူး။ Everything is Nothing ပေါ့နော်။ ဖွေးက အဲ့လိုမျိုးခံစားရတော့ အဲ့လိုအကြောင်းအရာလေးတွေကို ရေးဖြစ်တာ။
Q : ရေးခဲ့တဲ့ သီချင်းတွေထဲမှာ ဖွေးရဲ့အကြောင်းကို ပြောပြခဲ့တာရှိလား။
A : သီချင်းတွေကတော့ များသောအားဖြင့် ဖွေးအကြောင်းတွေပဲ ဖွေးရေးတာများတယ်။ ဖွေးအကြောင်းတွေ ဆိုပေမယ့် ဖွေးမှာဖြစ်ပျက်ခဲ့တဲ့အကြောင်းအရာတွေလည်း ဖြစ်ချင်မှဖြစ်မယ်။ ဖွေးရဲ့ စိတ်ကူး၊ ဖွေးရဲ့ တစ်စိတ်တစ်ပိုင်းလေးတွေ ရေးဖြစ်တာများပါတယ်။
Q : ဘယ်အရာတွေကို လုပ်ရတာကြိုက်လဲ။ ဘာတွေကို မကြိုက်ဘူးလဲ။
A : ဖွေးလုပ်ရတာကြိုက်တာတွေက ပုံသေပြောလို့မရဘူး။ ဖွေးကအမြဲတမ်းပြောင်းလဲနေတာ ကိုယ့်ရဲ့ mood ပေါ်မှာပဲ မူတည်တယ်။ အခုလုပ်ချင်တဲ့ကိစ္စတစ်ခုကို နည်းနည်းကြာရင် မလုပ်ချင်တော့တာမျိုးလည်း ရှိရင်ရှိနိုင်တယ်။ ဟန်ဆောင်နေရတာကိုတော့ ဖွေးမကြိုက်ဘူး။
Q : ဖွေးကိုယ်ဖွေး ဘယ်လိုလူမျိုးလို့ ထင်လဲ။
A : ဖွေးကနည်းနည်းခံစားချက် extreme ဖြစ်တယ်လို့ ထင်တယ်။ စိုးရိမ်လွန်တတ်တယ်။ Concentrate မလုပ်နိုင်ဘူး။ တစ်ချို့နေရာတွေထဲမှာ ဖွေးရောက်သွားပြီးတော့ ဖွေးမနေတတ်တာတွေ ကြုံတတ်တယ်။ လူတွေနဲ့စကားမပြောတတ်တာတွေရှိတယ်။ ဖွေးက အရမ်းငြိမ်းချမ်းချင်တယ်။ အရမ်းတည်ငြိမ်ချင်တယ်။ နောက်ပိုင်းကိုတော့ ဘယ်လိုနေရင်ငြိမ်းချမ်းမလဲ။ ဘယ်လိုနေရင် ပိုပြီးတော့ တည်ငြိမ်လာမလဲဆိုတာကို ရှာပြီးတော့ နေနေတဲ့ လူတစ်ယောက်ပါ။
သစ်ပင်လေးတွေကိုချစ်ပါ၊ ပန်းလေးတွေကို ချစ်ပါ။ ငှက်ကလေးတွေကို အစာကျွေးပါ။ ဖြူဖြူကျော်သိန်း
နောက်ထပ် ပိုအရေးကြီးတဲ့ ဟာတစ်ခုက အမှိုက်ပစ်တဲ့နေရာမှာ ဆင်ခြင်ပါ။
သူမဟာ ယုံကြည်ထားတဲ့ အရာတစ်ခုအပေါ်မှာ သစ္စာရှိတယ်။ သူမရင်ထဲက ယုံကြည်ထားတဲ့ အရာတစ်ခုအတွက် ဘေးဘီဝဲယာက ဘယ်လိုအသံမျိူးကိုမှ ရင်ထဲအရောက်ခံမှာ မဟုတ်တဲ့သူမျိူးထဲမှာ ပါတယ်။ အဲဒီယုံကြည်ရာအပေါ်မှာ မြဲမြံနေတတ်တဲ့ သူမရဲ့ သစ္စာတရားကြောင့်လည်း ဒီနေ့ဒီအချိန်မှာ ဖြူဖြူကျော်သိန်းရယ်လို့ ဖြစ်လာတယ်။
ဖြူဖြူကျော်သိန်းက သစ္စာရှိတယ်။ သူမကိုယ်သူမ သစ္စာရှိတယ်။ သူမရင်ထဲက အရာတွေအပေါ်မှာ သစ္စာရှိတယ်။
မင်္ဂလာပါ ဖြူဖြူရေ... ဒီနေ့က ဖြူဖြူနဲ့ MODA တို့ရဲ့ ဘယ်နှကြိမ်မြောက် တွေ့ဆုံမှုဖြစ်မလဲ။
မင်္ဂလာပါရှင်... ဘယ်နှကြိမ်မြောက် တွေ့ဆုံမှုလဲဆိုတော့ Cover အနေနဲ့ကတော့ ဒါက ပထမဉီးဆုံးပဲ။ Covid ကာလတုန်းကတော့ Instagram Live မှာ တစ်ခါတစ်ခါ MODA နဲ့ ဆုံခဲ့ကြသေးတယ်။ နောက်ပြီးတော့ Covid 19 Awareness အတွက်လည်း ဖြူဖြူတို့တစ်ခါ ဆုံခဲ့ကြတယ်။ အဲဒီ့မတိုင်ခင် လွန်ခဲ့တဲ့ ၄၊ ၅ နှစ်လောက်တုန်းကလည်း Fashion ကဏ္ဍအတွက် နှစ်ခေါက်လောက် ဆုံခဲ့ဖူးတယ်။ ဆိုတော့ ဒါက ငါးကြိမ်မြောက်ပေါ့။
MODA ရဲ့ September Issue အတွက် Cover Star အနေနဲ့ ပါဝင်ဖြစ်ခဲ့ပုံလေးကိုလည်း ပြောပေးပါဉီး။
MODA ကနေ ကမ်းလှမ်းလာတဲ့အခါမှာ ဖြူဖြူကလည်း ဝမ်းမြောက်ဝမ်းသာ လက်ခံဖြစ်ခဲ့ပါတယ်။ ဘာလို့လည်းဆိုတော့ ဒါက ပထမဉီးဆုံး MODA ရဲ့ Cover Star အနေနဲ့ လက်တွဲမှုလည်း ဖြစ်တယ်။ ဒီနေ့မှာဆိုရင် ဖြူဖြူရယ်၊ Designer Shar Tra၊ မိတ်ကပ်ကကျတော့ လင်းလင်း artist၊ ဓါတ်ပုံက အောင်ဇော် (love space) ပေါ့နော်။
Theme လေးဆိုရင်လည်း ဖြူဖြူအရမ်းပဲ စိတ်ဝင်စားတဲ့ Theme လေး ဖြစ်တယ်ပေါ့နော်။ Sustainability အတွက်ကို သဘာဝပတ်ဝန်းကျင်အတွက်ရော၊ နောက် Look ကလည်း သုံးခုနဲ့သွားတယ်ဆိုတော့ Very Challenging ပေါ့။ များသောအားဖြင့် Cover ရိုက်ကျတယ်ဆိုရင် Interview၊ Fashion တွေ၊ ဓါတ်ပုံတွေပဲ ဖြစ်တတ်ကြပေမယ့် ဒီမှာကျတော့ Game လေးတွေ၊ Challenge လေးတွေ ပါတယ်ဆိုတော့ ကြည့်တဲ့ ပရိတ်သတ်တွေအတွက်လည်း ပျော်ဖို့ကောင်းမယ်လို့ ထင်ပါတယ်။
ဟုတ်ကဲ့ပါ။ နောက်ပြီးတော့ လတ်တလော ဖြူဖြူ့ရဲ့ အနုပညာနဲ့ပတ်သက်တဲ့ လှုပ်ရှားမှုလေးတွေကိုရော တစ်ချက်လောက် မျှဝေပေးပါဉီး။
တိုက်ဆိုင်မှုတွေက အရမ်းများတယ် ပြောရမယ်။ MODA ရဲ့ September အတွက် Cover ရိုက်တဲ့နေ့ အခု မနက် ၈ နာရီမှာပဲ ဖြူဖြူ့ရဲ့ သဝန်တိုတာ အရမ်းချစ်လို့ ဆိုတဲ့ သီချင်းလေးရဲ့ Official Music Video လေး ထွက်ပါတယ်။ Facebook မှာတင်ပါတယ်။ မနေ့က ညကတော့ Youtube ပေါ့။ ဒီသီချင်းလေးက သဝန်တိုတာ အရမ်းချစ်လို့ဆိုတာက ဖြူဖြူနဲ့ Cobra တို့ရဲ့ စုံတွဲအခွေရဲ့ Title Song လည်း ဖြစ်တယ်။ တစ်ခွေလုံးကိုတော့ Cobra ကရေးထားပြီးတော့ Ugly Band က တီးထားတယ်။ Music Video ကတော့ ဖြူဖြူရယ်၊ Cobra ရယ်၊ ကျော်ထက်အောင်ရယ် ပါဝင်သရုပ်ဆောင်ထားပါတယ်။ ဒီနေ့လည်း ဓါတ်ပုံရိုက်ရင်းနဲ့ View ဘယ်လောက် ရှိသွားပြီလဲ၊ ပရိတ်သတ်တွေ Comment ဘာတွေရေးထားလဲ စောင့်ဖတ်ရင်း အရမ်းကို ရင်ခုန်စိတ်လှုပ်ရှားရပါတယ်။ အားပေးကြတဲ့အတွက်လည်း အရမ်းကို ကျေးဇူးတင်ပါတယ်လို့။
ဒီသီချင်းလေးကတော့ ဖြူဖြူနောက်ဆုံးထွက်ထားတဲ့ သီချင်းလေးပေါ့နော်။ ဖြတ်သန်းခဲ့တဲ့ အနုပညာသက်တမ်းတစ်လျှောက် အမှတ်အရဆုံး ဖြစ်ရတဲ့ သီချင်းဆိုရင်ကော ဘယ်သီချင်းဖြစ်မလဲ။
ပြန်ပြောဖို့အတွက်တော့ တော်တော်ခက်လိမ့်မယ်။ (ရယ်လျက်) ဘာလို့လဲဆိုတော့ ဖြူဖြူက သီချင်းတစ်ပုဒ်ကို ဆိုဖို့ ရွေးချယ်တော့မယ်ဆိုရင် ကိုယ့်အတွက် ပုံစံတစ်ခုမဟုတ် တစ်ခုနဲ့ ဆွဲဆောင်နိုင်မှ၊ စွဲစွဲထင်ထင်ဖြစ်နေမှ ဆိုလေ့ရှိတာဆိုတော့လေ။ အဲ့လိုပြောတဲ့နေရာမှာလည်း ပေါက်တာ၊ မပေါက်တာ၊ လူသိတာ၊ မသိတာနဲ့လည်း မဆိုင်ဘူး။ ဖြူဖြူ့အတွက်က သီချင်းတွေတိုင်း သက်ရှိသား၊သမီးတွေလိုပဲ။ သက်ရှိတွေလို ခံစားရတာ။ အဲဒီ့တော့ ဖြူဖြူ့အတွက် တစ်ပုဒ်ကို ရွေးထုတ်ပြရတာတော့ အတော်ခက်တယ်။ မထူးပါဘူး။ လက်ရှိအချိန်မှာ အမှတ်အရဆုံးဖြစ်နေတဲ့ သဝန်တိုတာ အရမ်းချစ်လို့ ဆိုတဲ့ သီချင်းလေးကိုပဲ ရွေးချယ်ပေးလိုက်ပါမယ်နော်။ ကြော်ငြာပြီးသားလည်း ဖြစ်သွားတာပေါ့။ (ရယ်လျက်)
သီချင်းလေးတွေဟာ ကိုယ့်အတွက် သား၊သမီးလေးတွေလို ခံစားရတယ်ဆိုရင်၊ ဂီတတစ်ခုလုံးဆိုရင်ရော ဖြူဖြူ့အတွက် ဘယ်လိုအရာမျိုး ဖြစ်မလဲ။
Music is my Life Partner ။ ဖြူဖြူ့ရဲ့ ဘဝလက်တွဲဖော်ပဲ။
လူတွေက ဖြူဖြူ့ကို ဆရာဝန်တစ်ယောက်ဖြစ်တယ်ဆိုတာကို သိကြတယ်ပေါ့။ ဒါပေမယ့် ဂီတသမားတစ်ယောက်၊ အဆိုတော်တစ်ယောက်အနေနဲ့ ဘဝရဲ့အချိန်တော်တော်များများကို ကုန်ဆုံးစေဖို့ ဘယ်လိုဆုံးဖြတ်ချက်တွေချခဲ့လဲ။
အဓိကကတော့ Passion ဖြစ်မယ်။ ဆရာဝန်တစ်ယောက် ဖြစ်လာဖို့ဆိုတာကလည်း ၇ နှစ်တည်းဖြစ်လာတာမဟုတ်ဘူးလေ။ မူလတန်းတွေ၊ မူကြိုတွေလောက်ကတည်းက ဒီလိုဖြစ်လာဖို့ ပြုစုပျိုးထောင်ခံထားရတာပေါ့။ Academic ကို စိတ်ဝင်စားတဲ့သူ၊ တစ်ခုခုကို စာကို ဉီစားပေးတဲ့သူတွေအနေနဲ့ ဖြစ်လာခဲ့ကြတယ်။ ဆယ်တန်းအောင်ပြီးတော့လည်း ဆရာဝန်တစ်ယောက်ဖြစ်ဖို့က ၇ နှစ်လောက် ထပ်ပြီး ကြိုးစားခဲ့ရတယ်ပေါ့။ ဒါပေမယ့်လည်း တစ်ဖက်မှာက ကိုယ့်ရဲ့ဗီဇကလည်း ရှိနေတယ်။ ပြောရရင် 3rd MB လောက် ရောက်တဲ့အခါမှာ ဖြူဖြူက IC ရဲ့ ပထမဆုံး စင်တင် အမျိုးသမီး မျိုးဆက်သစ် တေးသံရှင်အနေနဲ့ ဂီတလောကထဲကို စရောက်ခဲ့တယ်။ နောက်ပိုင်းမှာလည်း တစ်စတစ်စနဲ့ ပရိတ်သတ်ရဲ့ အားပေးတာလေးတွေ ရလာတယ်။ ဒီလိုနဲ့ ဖြူဖြူ ဘွဲ့ရတဲ့အခါမှာတော့ ဘဝကို ရွေးချယ်တဲ့အခါမှာ အဓိကကတော့ Passion။ ဘာလုပ်လုပ်ပေါ့နော်။ Passion အများဆုံးအရာကို လုပ်ရတာတော့ အကောင်းဆုံးလို့ ဖြူဖြူမြင်တယ်။
နောက်တစ်ခုက ဖြူဖြူ ဒါကိုမရွေးချယ်ခင်မှာဆိုရင်လည်း မေမေတို့၊ ဖေဖေတို့က ပညာရေးအသိုင်းအဝိုင်းကလာတယ်၊ တစ်သက်လုံး ပညာတွေသင်ပေးထားတယ်ဆိုတော့ သူတို့လည်း ဆရာဝန်လုပ်စေချင်မှာပဲ။ ဒါပေမယ့် သူတို့က မပြောရှာဘူး။ သမီးကို ဉာဏ်ရှိတဲ့ ဆင်ခြင်ဆုံးဖြတ်နိုင်တဲ့ သူတစ်ယောက်ဖြစ်အောင် ပြုစုပျိုးထောင်ထားပြီးပြီ။ သမီး ဘယ်အရာကိုပဲ ရွေးရွေး၊ သမီးလုပ်တဲ့အလုပ်ကို အပတ်တကုပ်နဲ့ ဂုဏ်သိက္ခာရှိရှိ ကြိုးစားနိုင်မယ်လို့ ယုံကြည်တယ်။ ဒီတော့ ကြိုက်တာရွေး။ ဆရာဝန်ပဲလုပ်လုပ်၊ အဆိုတော်ပဲလုပ်လုပ်၊ စျေးပဲရောင်းရောင်း၊ ဘာပဲလုပ်လုပ် ရိုးရိုးသားသား၊ ဖြောင့်ဖြောင့်မှန်မှန်။ ယုံကြည်မှုရှိရှိနဲ့ အပတ်တကုပ် ကြိုးစားဖို့ပဲ ပြောတယ်။ အဲဒီ့မှာတင် ကိုယ်ကလည်း မိုတီတွေ အရမ်းရသွားတဲ့အခါမှာ အဆိုတော်ဘဝကို ခြေစုန်ပစ်ဝင်လိုက်တယ်ပေါ့ (ရယ်လျက်)။ နောက်တစ်ခု တိုက်ဆိုင်တာက အခုလာမယ့် August 16 နေ့ဆိုရင် ဖြူဖြူရဲ့ အနုပညာသက်တမ်း ၁၇ နှစ်ပြည့်ပါပြီ။
Congratulations ပါ ဖြူဖြူရေ။ အခုလို ရှည်လျားတဲ့ ဂီတသက်တမ်း ၁၇ နှစ်ကို အောင်အောင်မြင်မြင် ဖြတ်သန်းနိုင်ခဲ့တဲ့ အခြေခံအကျဆုံးအချက်ဟာ ဘာကြောင့်လို့ထင်လဲ။
ဖြူဖြူ့အတွက်တော့ ဒါကို ကျေးဇူးတော်လို့ပဲ ပြောချင်တယ်။ ကိုယ် Passion ရှိတဲ့အရာကို ဘဝမှာ လက်တွေ့ကျကျ ရွေးချယ်ပြီး လျှောက်လှမ်းဖို့၊ အသက်မွေးဝမ်းကြောင်းအနေနဲ့ ဒီနေ့ထိ ရပ်တည်ဖို့ဆိုတာ လူတစ်ယောက်အနေနဲ့ လုပ်ရမယ့်အရာတွေလုပ်ဖို့၊ ကြိုးစားဖို့လိုတယ်ဆိုတာ မှန်ပေမယ့် ကိုယ်ကတော့ ယုံကြည်သူ ခရစ်ယာန်တစ်ယောက် ဖြစ်နေတော့ ဘုရားရဲ့ကျေးဇူးတော်ကို တစ်သက်လုံး အမြဲတမ်း၊ မနက်တိုင်း၊ နိုးလာတိုင်း ချီးမွမ်းဖြစ်တယ်။ နောက်ပြီးကျတော့ ရဲရဲဝံ့ဝံ့ ရွေးချယ်ခွင့်ပေးခဲ့တဲ့ မိသားစု။ အဖေနဲ့ အမေ၊ အစ်မ။ နောက်ပြီး ဉာဏ်ရှိတဲ့၊ ကိုယ့်အပေါ် မေတ္တာကြီးတဲ့ မိတ်ဆွေ၊ သူငယ်ချင်း၊ လုပ်ဖော်ကိုင်ဖက်။ နောက် ကိုယ့်ကို အားပေးတဲ့ ပရိတ်သတ်။ ကိုယ်ဘာလုပ်လုပ် နောက်ကနေ ကိုယ့်ကို အားပေးတဲ့ ပရိတ်သတ်ပေါ့။ ဒါဟာ အရမ်းကို အရေးကြီးတယ်လို့ မြင်တယ်။
ရုတ်တရက် ကြည့်လိုက်တော့တာ ဖြူဖြူ ဖြတ်သန်းခဲ့တဲ့ ၁၇ နှစ်က များတယ်လို့ ထင်တာပေါ့။ တကယ်တော့ ဖြူဖြူရဲ့ ရှေ့မှာ နှစ်ပေါင်းများစွာ ဖြတ်သန်းခဲ့ကြတဲ့၊ ပရိတ်သတ်ရင်ထဲမှာလည်း နေရာယူနိုင်တဲ့ Artists တွေ၊ နောက် Currently လည်း အလုပ်လုပ်နေကြတဲ့သူတွေ အများကြီးရှိတာပဲ။ သူတို့တွေကိုကြည့်ပြီးတော့ တစ်နေ့တစ်နေ့ ကြိုးစားရပ်တည်သွားတယ်။ ဘယ်အရာတွေက အားကျအတုယူစရာဖြစ်တယ်။ ဘယ်အရာတွေက သင်ခန်းစာယူစရာ ဖြစ်တယ်ပေါ့။
နောက်ထပ်ကျတော့ ငါနဲ့လိုက်ဖက်တဲ့ ပုံစံ၊ ငါရပ်တည်ရမယ့်ပုံစံ၊ ကိုယ့်ရဲ့ Personality၊ ကိုယ့်ရဲ့ Attitude တွေနဲ့ လိုက်ဖက်ညီတဲ့အရာကို ဘယ်လိုရှာဖွေပြီးတော့ ဘယ် Image နဲ့သွားချင်လဲဆိုတာကျတော့ ရုတ်တရက်ကြီး ဖြစ်လာတာမဟုတ်ဘူး။ ကိုယ်လုပ်သမျှ အရာတိုင်းမှာ ရွေးချယ်ရတယ်ပေါ့။ အဲ့လိုနည်းအားဖြင့် ဖြူဖြူ ဒီနေရာမှာ ရှိနေခွင့်ရတယ်ပေါ့။
တစ်ခွန်းတည်းပြောရရင်တော့ ကျေးဇူးတင်တယ်။ ဘာကို ကျေးဇူးတင်လဲဆိုတော့ ဘုရားကို ကျေးဇူးတင်တယ်။ ပရိတ်သတ်ကို ကျေးဇူးတင်တယ်။ ဖန်လာသော အကြောင်းအကုန်လုံးကိုလည်း ကျေးဇူးတင်တယ်။
ဖြတ်သန်းခဲ့တဲ့ ကာလတစ်လျှောက်မှာ ကြုံခဲ့ရတဲ့ လက်ခုပ်သံတွေ၊ ဝေဖန်တိုက်ခိုက်သံတွေက ဖြူဖြူ့အတွက် ဘယ်လိုသက်ရောက်မှုတွေ ဖြစ်စေခဲ့လဲ။
အားပေးသံတွေ၊ ထောက်ခံတွေဆိုတာက အနုပညာရှင်တွေအတွက်မှမဟုတ် လူတိုင်းအတွက် အင်အားဖြစ်စေတယ်။ Moti ဖြစ်စေတယ်။ Confidence တွေ တက်စေတယ်။ နောက်တစ်ခုကကျတော့ ခုနကပြောတဲ့ ဝေဖန်တယ်ဆိုတာကျတော့ ဖြူဖြူလည်း အမြဲတမ်း ဖြေလေ့တော့ ရှိပါတယ်။ ဝေဖန်အကြံပြုတယ်၊ ယဉ်ယဉ်ကျေးကျေးပြောတယ်ဆိုရင် လက်ခံထားလိုက်တယ်။ လိုက်လုပ်တယ် မလုပ်ဘူးဆိုတာကျတော့ ကိုယ်သွားချင်တဲ့လမ်းကြောင်းကို ကိုယ့်ကိုကိုယ်ကလွဲရင် ဘယ်သူမှမသိနိုင်ဘူးလေ။ ကိုယ်ရယ်၊ ဘုရားရယ်ပဲ သိနိုင်မယ်။ ကိုယ်သွားမယ့်လမ်းကြောင်းအတွက်ကို အထောက်အပံ့ဖြစ်စေမယ့် ဝေဖန်အကြံပေးတာမျိုးဆိုရင် လက်ခံလိုက်တယ်။ မဟုတ်လို့ရှိရင် ကိုယ့်ကို ယဉ်ယဉ်ကျေးကျေးပဲ ပြောလာခဲ့တယ်ဆိုရင်တော့ ကိုယ့်ကို ချစ်လို့၊ခင်လို့ ပြောတာဖြစ်တဲ့အတွက်ကြောင့် ဪ ကျေးဇူးတင်တယ်။ ဒါပေမယ့် ဖြူဖြူသွားနေတဲ့ လမ်းကြောင်းနဲ့ မကိုက်တဲ့အတွက်ကြောင့် ဒါကိုတော့ ယူသုံးမှာ မဟုတ်ဘူးနော်လို့ တစ်ခါတည်းပဲ အဲ့လိုပဲ ပြောလိုက်တယ်။
နောက်တစ်ခုကကျတော့ တိုက်ခိုက်တာပေါ့။ တိုက်ခိုက်တာဆိုရင် ဖြူဖြူက အဖက်ကိုမလုပ်တာ။ အဲ့ဒါကို ချစ်တဲ့သူတွေက မလုပ်ဘူးကွာ။ အဲ့ဒါတွေက ဂရုစိုက်စရာမလိုဘူးပေါ့။
ဂီတလမ်းကြောင်းကို စတင်လျှောက်လှမ်းနေတဲ့သူတွေနဲ့ လျှောက်လှမ်းဖို့ ကြိုးစားနေတဲ့သူတွေကိုရော ဖြူဖြူ့အနေနဲ့ ဘာတွေအကြံပေးချင်လဲ။
အနုပညာကတော့ အရေးအကြီးဆုံးပဲ။ အနုပညာဝမ်းစာကို ဖြည့်ဖို့ အရေးကြီးတယ်။ ပြီးတော့ကျတော့ အရေးကြီးတာ Wisdom ပေါ့။ ဒါကလေ အတန်းပညာဘွဲ့ ဒါတွေကို ဆိုလိုတာမဟုတ်ဘူး။ ဝမ်းစာပညာတင်မကဘဲ ကိုယ့်ဆီမှာရှိတဲ့ Talent ကို ထိန်းကြောင်းသွားနိုင်မယ့် ချွန်းလိုမျိုး ပညာပေါ့။ အဲ့ဒါ အရေးကြီးတယ်။ တစ်ခါတစ်လေကျတော့ ဉာဏ်အရမ်းကောင်းလွန်းလို့ရှိရင် အနုပညာ ရှိချင်ယောင်ဆောင်လို့ ရတယ်။ Marketing Strategy တွေကို သိ၍သော်လည်းကောင်း၊ ပေါက်ပေါက်ရောက်ရောက် တစ်ယောက်ယောက်နဲ့သိလို့ နာမည်ကြီးအောင် လုပ်နိုင်၍သော်လည်းကောင်း အလွယ်တကူလုပ်ပြလို့ရတယ်လေ။ တစ်ခုခု စိတ်ဝင်စားအောင် ဗြုန်းခနဲလုပ်ပြလိုက်ပြီးတော့ နာမည်ကြီးအောင်လုပ်ဖို့ဆိုတာ လွယ်လွယ်လေး။ ဘာကမလွယ်လဲဆိုတော့ အဲ့ဒါကို Sustain လုပ်ဖို့က မလွယ်တာ။ ဉာဏ်ကောင်းလို့ရှိရင် အနုပညာရှိချင်ယောင်ဆောင်လို့ရတယ်။ အဲ့ဒါက အနုပညာသမားအစစ်မဟုတ်ဘူး။ အဲ့လိုပြောလို့ရှိရင် ဖြူဖြူကလည်း တစ်ချို့တွေ အနုပညာပဲရှိပြီး ဉာဏ်မကောင်းလို့ ဘိန်းစားဖြစ်နေတာတစ်ပုံကြီးပဲ။ ဘဝတွေပျက်ပြီး ဖြစ်ချင်တိုင်းဖြစ်နေတာတွေပေါ့။ ဖြူဖြူက ဘာကိုအားပေးချင်လဲဆိုတော့ အနုပညာအကြီးကြီး ရှိဖို့လိုတယ်။ ပြီးတော့ ဉာဏ်ပညာက ဘေးကသော်လည်းကောင်း၊ အနောက်ကသော်လည်းကောင်း လိုက်ဖို့လိုတယ်။ ဒါပေမယ့် အဲဉာဏ်ပညာက အနုပညာရဲ့အရှေ့ကိုရောက်သွားရင် ဖြူဖြူသိပ် သဘောမကျတော့ဘူး။ အဲ့ခါကျ ဉာဏ်သိပ်များပြီးတော့ အနုပညာမစစ်မှန်တော့ဘူးပေါ့။ အဲ့တော့ဖြူက ကလေးတွေက ဘာတွေဖြစ်စေချင်လဲဆိုတော့ အနုပညာအကြီးကြီးနဲ့ အနောက်ကနေ ဉာဏ်ပညာက ထပ်ကြပ်မကွာ လိုက်တဲ့ အနုပညာသမားအမျိုးအစားတွေ အများကြီး ဖြစ်လာစေချင်တယ်။
ဒီလရဲ့ Magazine Theme က သဘာဝပတ်ဝန်းကျင် ထိန်းသိမ်းရေးနဲ့ ပတ်သက်တာဆိုတော့ အဲဒီ့ဘက်ကို တစ်ချက်လောက် သွားလိုက်ရအောင်။ သဘာဝပတ်ဝန်းကျင် ထိန်းသိမ်းရေးနဲ့ပတ်သက်ပြီး ဖြူဖြူရဲ့အမြင်တွေ၊ ခံစားမှုလေးတွေကို ပြောပြပေးပါဉီး။
တကယ်တမ်းပြောရရင် ဖြူဖြူ သဘာဝပတ်ဝန်းကျင် ထိန်းသိမ်းရေးနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့ သေသေချာချာကြီး ထဲထဲဝင်ဝင် လုပ်ကိုင်ဆောင်ရွက်ဖူးတယ်ဆိုတာတော့ သိပ်မရှိဘူး။ ဒါ အမှန်အတိုင်း ဝန်ခံတာ။ ဒါပေမယ့် ဒီ Covid 19 ဖြစ်လိုက်တဲ့အချိန်မှာမှ ကိုယ့်ရဲ့အတွေးတွေကို စေ့ဆော်လိုက်သလိုဖြစ်တဲ့အရာလေးတွေ တွေ့လိုက်တယ်။ အဲ့ဒါ ဘာလဲဆိုတော့ လူတွေခရီးမသွားတော့တဲ့အခါမှာ လေထုညစ်ညမ်းမှုတွေ လျော့လာတယ်။ တစ်ချို့နိုင်ငံတွေမှာဆို သစ်တောနဲ့ဆက်စပ်တဲ့ နေရာတွေမှာဆိုရင် တောကောင်လေးတွေ မြို့ပေါ်တက်လာကြတယ်။ ငှက်ကလေးတွေက မြို့ထဲထိ အုပ်လိုက်ပျံသန်းကြတယ်။ မိုးလင်းရင် မကြားရတဲ့ ငှက်သံလေးတွေ ကြားရတယ်ပေါ့။ ဖတ်လိုက်လို့ရှိရင် ဘာမှမဟုတ်ဘူးဆိုပေမယ့်လို့ တွေးကြည့်လိုက်ရင် ကမ္ဘာကြီးကို လူတွေလက်ထဲအရမ်းကြီးထည့်ထားတဲ့အခါမှာလေ အကောင်းတွေ ဖြစ်တာတော့ ဖြစ်တာပေါ့နော်။ ဒါပေမယ့် စက်မှုထွန်းကားတိုးတက်မှုနဲ့အတူ ဆုတ်ယုတ်မှုတွေလည်း ရှိလာတယ်ပေါ့။
လူတွေရဲ့ လုပ်ရပ်တွေကြောင့် ပတ်ဝန်းကျင်ထိခိုက်မှုတွေအပေါ်မှာရော ဖြူဖြူ ဘာပြောချင်လဲ။
သဘာဝပတ်ဝန်းကျင်လို့ ပြောတဲ့အခါမှာ လေထုက ညစ်ညမ်းရင်ကို အမြင်တွေကအစဝေဝါးလာတတ်တာပေါ့။ အဲ့ဒါကို Covid ကာလ Home Stay လေးတွေကို Lockdown စဖြည်တဲ့အချိန်မှာပေါ့။ ဖြူဖြူရဲ့ Music Video လေးတစ်ခုကို ရိုက်ဖို့ ငါးယောက်လောက်သွားရိုက်ဖို့ သွားတယ်ပေါ့။ အဲဒီ့မှာ ဘာသွားတွေ့ရလဲဆိုတော့ ဒီလမ်းခရီးက ခါတိုင်းသွားနေကျ။ ဒါပေမယ့် တစ်ခါမှ ကောင်းကင်ကြီးက ဒီလောက်မပြာဖူးဘူး။ တိမ်တွေကလည်း ဒီလောက်တစ်ခါမှ မဖြူဖူးဘူး။ ပြီးတော့ လယ်ကွင်းတွေ၊ စပါးတွေကလည်း ဒီလောက်ထိ ရွှေရောင်တွေ၊ အစိမ်းရောင်တွေ ဖြစ်မနေဖူးဘူး။ အဲ့မှာ ဖြူဖြူထပ်တွေးမိတာပေါ့။ ဒီလို တစ်နေရာလေးမဟုတ်ဘဲနဲ့ပေါ့ တစ်နိုင်ငံလုံးအနေအထား၊ တစ်ကမ္ဘာလုံးအနေအထားနဲ့ လူတွေက ဆင်ခြင်လိုက်တဲ့အခါ။ ဒါကတော့ ရောဂါကြောင့် မတတ်သာလို့ ဆင်ခြင်လိုက်ရတယ်ပေါ့နော်။ လူတွေ အပြင်မထွက်တဲ့အခါ သဘာဝတရားကြီး ပြန်ပြီး ကျန်းမာလာဖို့၊ နိုးကြားလာဖို့ အခွင့်အရေးအခြေအနေ ရလာတာကို သွားတွေ့ရတယ်ပေါ့နော်။
နောက်တစ်ခုက ဘာရှိလဲဆိုတော့။ ဖြူဖြူ ၂၀၁၀ လောက်တုန်းက ဖြူဖြူ့ Apartment ကို ဝယ်ဖြစ်တဲ့အချိန်တုန်းကပေါ့။ အဲ့တုန်းက မြို့လယ်မှာ ဆိုပေမယ့် ဘေးနားမှာ၊ အဲဒီ့ RC3 နားမှာဆိုတော့ သစ်ပင်တွေနဲ့ စိမ်းစိုနေတဲ့ ကွက်လပ်ကြီးတစ်ခုရှိတယ်။ အဲ့မှာလေ ဗျိုင်းတွေလည်းလာတယ်၊ ခိုတွေလည်းလာတယ်၊ ကျီးကန်းတွေလည်း လာတယ်။ အောက်ထဲမှာဆိုလည်း ခွေးလေးတွေရောရှိတယ်။ ဘယ်လိုခေါ်မလဲ။ တောအုပ်ကြီးတစ်ခုလို ဖြတ်သန်းကြတယ်ပေါ့။ ရှဉ့်လေးတွေရော။ သစ်ပင်တွေဆိုလည်း ဖြူဖြူ့အခန်းကနေ လှမ်းကြည့်လိုက်ရင် ငှက်အသိုက်လေးတွေကအစ တွေ့ရတယ်ကွာ။ ဇရက်တွေ၊ စာကလေးတွေရော အစုံပဲ။ အဲ့ဒါကို သဘောကျပြီး အိမ်ကိုဝယ်လိုက်တာ။ ပြီးလည်းပြီးရော အဲ့ဒါကြီးက လုံးဝ ပြောင်သလင်းခါသွားပြီးတော့ တခြားစီးပွားရေးလုပ်ငန်းတစ်ခု ဖြစ်သွားတယ်။ အဲ့ဒါကို ကိုယ်ကမသိလိုက်ဘူး။ ခရီးခဏ ပြင်သစ်ကိုသွားတဲ့အချိန်မှာ ဖြစ်တာ။ ပြန်လည်း ပြန်လာရော ရင်ထဲမှာ အရမ်းဟာသွားတာ။ ဒါတောင်မှ မြို့လယ်မှာရှိတဲ့ ကွက်လပ်လေးတစ်ခုပဲနော်။ တကယ့်သစ်တောကြီး မဟုတ်သေးဘူးပေါ့။ အဲ့မှာ တော်တော်ဟာသွားတာ။ ငှက်သံတွေလည်း မကြားရတော့ဘူး။ ခွေးလေးတွေ၊ ရှဉ့်လေးတွေလည်း မပြေးတော့ဘူး။ ကွန်ကရစ်ကြီးတွေ ခင်းချလိုက်ပြီးတော့ လူတွေ၊ စက်သံတွေပဲ ကြားရတော့တယ်။ ကိုယ့်ရဲ့ တစ်နေ့ Attitude ခံစားမှု၊ Feeling တွေကအစ ပြောင်းသွားစေတာကွာ။ အဲ့မှာလည်းတစ်ခေါက် သဘောပေါက်သွားတယ်။ စိမ်းလန်းစိုပြေမှုဆိုတာ လူ့ရဲ့ တစ်နေ့တာရဲ့အပေါ်မှာ သက်ရောက်မှုရှိတယ်ဆိုတာပေါ့။
Covid 19 ကာလတုန်းကတော့ လူတွေမှာ ရွေးချယ်ခွင့်မရှိဘဲ အိမ်ထဲနေလိုက်ရတယ်။ ဒါက ပတ်ဝန်းကျင်အတွက် ကောင်းကျိုးလေးတွေရှိခဲ့တယ်။ နောက်ပိုင်း ရေရှည်အတွက်ဆိုရင်ကော လူတွေကြောင့် ပတ်ဝန်းကျင်ထိခိုက်မှုတွေ မဖြစ်အောင် ဘယ်လိုမျိုးလေးတွေ လုပ်သင့်တယ်လို့ ဖြူဖြူမြင်လဲ။
နံပါတ် ၁ ကတော့ အခုလိုမျိုး Awareness လုပ်တာတွေက အရမ်းအရေးကြီးတယ်လို့ မြင်တယ်။ ဒါက သဘာဝပတ်ဝန်းကျင် ထိန်းသိမ်းရေးနဲ့ပတ်သက်တဲ့ ပညာရှင်တွေ၊ အဖွဲ့အစည်းတွေဆိုရင်လည်း လုပ်ကြမှာပဲ။ ဒါပေမယ့် အခုလိုမျိုး။ ဖြူဖြူတို့ဆို အနုပညာပေါ့။ MODA တို့ကလည်း အဲ့ဘက်ကို ဇောင်းပေးပြီး လုပ်တဲ့အပေါ်မှာ ဖြူဖြူအရမ်းကြိုဆိုတယ်။ ဝမ်းသာတယ်။ အနုပညာဆိုတာလည်း အဲ့ဒါနဲ့ပေါင်းရင် Propaganda လုပ်တယ်ဆိုပြီး လူတွေက စိတ်မဝင်စားကြဘူး။ ဒါပေမယ့် တကယ်တမ်းတော့ Art သည် အကောင်းဆုံး Channel ပဲ။ သတင်းကောင်းကို ဖြန့်ဖို့အတွက်ရော၊ သတင်းဆိုးကို ဖြန့်ဖို့အတွက်ရောပေါ့နော် (ရယ်လျက်)
ဘာလို့ဆို အနုပညာဟာပေါ့နော်။ သီချင်းနဲ့ဖြစ်ဖြစ်၊ ရုပ်ရှင်နဲ့ဖြစ်ဖြစ်၊ ဓါတ်ပုံနဲ့ဖြစ်ဖြစ်၊ စာအုပ်နဲ့ဖြစ်ဖြစ်။ လူတွေရဲ့စိတ်ထဲကို လွယ်လွယ်ကူကူနဲ့ မြန်မြန်ဆန်ဆန် Message တစ်ခု၊ Awareness တစ်ခုကို တန်းပြီး ပစ်ပြီး ပေးလိုက်နိုင်တယ်။ ဒီလိုမျိုး အနုပညာဘက်ကလူတွေကလည်း ဒါကို စိတ်ဝင်တစားလုပ်လာတယ်ဆိုတာက အကျိုးရှိတယ်လို့ ဖြူဖြူက အကြွင်းမဲ့ ယုံကြည်တယ်။
နောက်ပြီးတော့ အခုဆိုလို့ရှိရင် Plastic ကို မသုံးဖို့ဆိုပြီးတော့ အကြီးအကျယ် Campaign လုပ်ကြတယ်။ ကိုယ်ကိုယ်တိုင်လည်း ဒါကိုရှောင်နိုင်လားဆိုရင် အပြည့်အဝရှောင်နိုင်တဲ့ထဲ မပါသေးဘူး။ ဒါပေမယ့် အတတ်နိုင်ဆုံး ကြိုးစားပြီးတော့ လုပ်ဆောင်သင့်တယ်။ ဒါကိုလုပ်ရမယ်ဆိုတဲ့အရာကို စိတ်ထဲထည့်ဖြစ်တယ်။ ကိုယ်က စျေးသွားတဲ့အခါမှာ စက္ကူအိတ်တို့ဘာတို့ ယူသွားတာမျိုး ဖြစ်ဖြစ်ပေါ့။
တစ်ချို့ဆိုရင် Shopping Mall တွေမှာ ရှိတယ်လေ။ တစ်ပတ်ကို တစ်ရက်ဖြစ်ဖြစ်၊ တစ်လကို တစ်ရက်ဖြစ်ဖြစ် No Plastic Day ဆိုပြီးတော့ လုပ်ပေးတာမျိုးပေါ့။ ဒီလို Awareness မျိုးလုပ်ဖို့ လိုအပ်တယ်လို့ ဖြူဖြူမြင်တယ်။
လူတွေကြောင့် ပတ်ဝန်းကျင်ထိခိုက်တာနဲ့ပတ်သက်ပြီး ဖြူဖြူကြုံခဲ့တာမျိုးကော ရှိခဲ့လား။
အမှိုက်ပစ်တာနဲ့ပတ်သက်ပြီး ဖြူဖြူအရမ်းခံစားရတယ်။ အဲ့လိုပြောရင် ဖြူဖြူကျော်သိန်းက အရမ်းအပိုပြောတယ်လို့ ပြောကြဉီးမယ်။ ပြီးခဲ့တဲ့လက သွားခဲ့တဲ့ Trip ပေါ့။ ဖားအံ့ပြီးတော့ ဇင်းကျိုက်ဘက်သွားတယ်။ နေရာဒေသရဲ့နာမည်တွေကို ထည့်ပြောရတာတော့ ဖြူဖြူစိတ်မကောင်းဘူး။ ဒါပေမယ့် ပြောမှရမှာမို့ ဖြူဖြူထည့်ပြောရတာ။ ဇင်းကျိုက်ဆိုတာ အင်မတန်လှတဲ့ ရေတံခွန်။ ဖြူဖြူတို့ မြန်မာတွေ၊ မွန်တွေ၊ အကုန်လုံးပေါ့။ လူမျိုးတိုင်းရဲ့ နေရာလေးတစ်ခုပေါ့။ အရမ်းလှတယ်။ မိုးတွေရွာတဲ့အချိန်ဆို ပိုတောင်လှသေးတယ်။ အဲ့ဒါနဲ့ ကိုယ်လည်း ကိုယ့်ရဲ့ Music Video လေးရိုက်မယ်ပေါ့။ လူတွေလည်း ပါးတဲ့အချိန်ဆိုတော့ ကိုယ့်လူလေးတွေနဲ့ စည်းကမ်းတကျလိုက်နာပြီး သွားတယ်။ သွားတဲ့အခါကျတော့ တကယ်လည်း ရိုက်တော့မယ်ဆိုတော့ ကိုယ်လည်း အမြီးတွေ၊ အတောင်တွေနဲ့ ထုံးစံအတိုင်း Dress ကြီးနဲ့ပေါ့ (ရယ်လျက်)။ ရောက်လည်းရောက်ရော ကြည့်လိုက်တဲ့အခါမှာကျတော့ အမှိုက်တွေ၊ အမှိုက်တွေ၊ အမှိုက်တွေ၊ အမှိုက်တွေ၊ အခုပြောတာ နည်းတောင်နည်းသေးတယ်။ ဇီးထုပ်တွေ၊ တစ်သျှူးတွေ၊ ပလတ်စတစ်ပိုက်တွေ၊ အအေးဗူးအခွံ့တွေ၊ ခေါက်ဆွဲခြောက်ထုပ်တွေ၊ တကယ်အများကြီးတွေ့တယ်။ အဲ့တော့ အဲ့အမှိုက်တွေကို ဘာလို့အဲ့လောက်ထိ ပစ်ရက်ကြတာလဲပေါ့နော်။ မစဉ်းစားတာလား။ အရေးမကြီးတာလား။ ကိုယ့်လက်ထဲကလွတ် ပြီးရောဆိုပြီး ပစ်လိုက်ကြတာလား။ အရမ်းဝမ်းနည်းဖို့ကောင်းတယ်။ အရမ်းရှက်ရွံ့၊ စိုးရွံ့ဖို့ကောင်းတာ။
ဒီလိုမျိူးတွေ လျော့နည်းသွားအောင် ဘယ်လိုတွေ လုပ်သင့်တယ်လို့ ဖြူဖြူမြင်လဲ။
အဲ့ဒါကတော့ လူတိုင်းလုပ်ရမယ့်အရာတစ်ခုပေါ့နော်။ ငယ်ငယ်လေးကတည်းက ပြုစုပျိုးထောင်ပေးရမှာမျိုး ဖြစ်သလို၊ ငယ်ငယ်က ပြုစုပျိုးထောင်တာမျိုး မခံလိုက်ရတဲ့သူဆိုရင်လည်း သက်ဆိုင်ရာအဖွဲ့အစည်းတွေ၊ နောက်ပြီး ပညာရှင်တွေက ချမှတ်ပေးတဲ့ စည်းကမ်းတွေကို လိုက်နာစေချင်တယ်။ ကိုယ်လုပ်နေကျမဟုတ်ရင်တော့ အကျင့်တွေ မွေးယူရတာ ခက်တာ နားလည်ပါတယ်။ တစ်ခါတစ်လေ ကားနဲ့သွားရင်သိသာတယ်။ ဖြူဖြူတို့ဆီမှာ လူရှိတဲ့နေရာမှာရော၊ လူမရှိတဲ့နေရာမှာပါ အမှိုက်ရှိတယ်။ လူရှိတဲ့နေရာမှာ အမှိုက်ရှိတာ မဆန်းဘူးလေ။ လူမရှိတဲ့နေရာမှာ အမှိုက်ရှိတာကျ တော်တော်အံ့သြဖို့ကောင်းတယ်။ လူမရှိတဲ့နေရာမှာ အမှိုက်တွေဘာလို့ ပစ်ချနိုင်တာလဲပေါ့။ လမ်းသွားလမ်းလာတွေ ပစ်ချတာပေါ့။
ကိုယ့်အိမ်ရှေ့မှာ အမှိုက်တွေရှိနေရင် ကိုယ်ကြိုက်မှာမဟုတ်ဘူး။ ကိုယ့်အိမ်ထဲမှာ အမှိုက်တွေရှိတာကို မကြိုက်လို့ နေ့စဉ်အမှိုက်တွေ သွန်ကြတယ်လေ။ ကိုယ့်ဆီမှာ အမှိုက်မရှိတော့ရင် ပြီးရောဆိုပြီး တွေ့ကရာနေရာမှာ အမှိုက်တွေ ပစ်နေတာလားပေါ့နော်။ ဆိုတော့ SuchaBig Issue။ ကိုယ့်လက်ထဲက ထွက်သွားမယ့် အမှိုက်လေးတစ်စက ကိုယ့်ဆီမှာ ကိုယ်နဲ့အတူ မရှိတော့ပေမယ့် ကိုယ့်ပတ်ဝန်းကျင်၊ ကိုယ့်လမ်း၊ ကိုယ့်ရပ်ကွက် ကိုယ်ချစ်တဲ့နိုင်ငံမှာရှိနေမယ်ဆိုတာကျတော့ မကောင်းဘူးပေါ့။ ဒါ ငယ်ငယ်လေးထဲက ကျောင်းတွေမှာ ပြုစုပျိုးထောင်ပေးနိုင်မယ်ဆိုရင် ရပါတယ်။ စကားတော့ရှိတာပေါ့နော်။ ဘယ်လောက်ပဲ သင်ပေးသင်ပေး လူဆိုတာ လိုက်နာချင်တဲ့ စိတ်နှလုံးသား၊ ခံယူတတ်တဲ့နှလုံးသားရှိဖို့ လိုတယ်ဆိုတာပေါ့။ လူတွေကိုလည်း အချိန်ပေးပြီး သင်ပေးလို့ရမယ်လို့ ထင်ပါတယ်။ လက်မလျော့ချင်သေးဘူး။ မျှော်လင့်ချက်ရှိချင်သေးတယ်ကွယ်။
ဒီလိုမျိုး မျှော်လင့်ချက်တွေ ဆက်နိုင်အောင်လို့ သက်ဆိုင်ရာ အဖွဲ့အစည်းတွေကလည်း Campaign တွေလုပ်ကြတယ်ပေါ့။ တစ်နိုင်ငံလုံးအတိုင်းအတာနဲ့ ထိရောက်တဲ့ Campaign တွေလုပ်ဖို့ဆိုရင် ဘယ်လိုမျိုးလုပ်သင့်တယ်လို့ ဖြူဖြူမြင်သလဲ။
အခုလည်း အရမ်းတော့ လုပ်ကြပါတယ်။ ဒီလောက်လုပ်လို့ ဒီလောက်ဖြစ်လာတာပေါ့။ မဟုတ်လို့ရှိရင် အဲဒီ့ရေတံခွန်ကြီးက အမှိုက်ပုံကြီးတောင် ဖြစ်သွားမလားတောင် မသိဘူးရယ် (ရယ်လျက်)။ အဲ့လိုရယ်ပြီးသာပြောနေတာ ရင်ထဲမှာ မချိဘူး သိလား။ ပြောပြန်လည်း ဖြူဖြူကျော်သိန်းက အရမ်းကြီးကျယ်တာပဲ ဖြစ်ဉီးမယ်။ ဒါပေမယ့် အဲ့လိုလေ။ မျိုးချစ်စိတ်တို့ဘာတို့ဆိုတာ အကြီးအကျယ်ကြီးတွေ ပြောနေစရာ မလိုပါဘူး။ ကိုယ်ချလိုက်တဲ့ အမှိုက်လေးတစ်စကို အမှိုက်တောင်းထဲ စနစ်တကျထည့်လိုက်တာကအစ ကိုယ့်မှာ မျိုးချစ်စိတ် အကြီးကြီးရှိတယ်ဆိုတာကို သက်သေပြပြီးသား ဖြစ်တယ်။
တိုးတက်မှုရဲ့ Side Effect ကြောင့် ပတ်ဝန်းကျင်ထိခိုက်မှုတွေအပေါ်မှာ ဖြူဖြူ ဘယ်လိုမြင်လဲ။ ဒါတွေကိုရော ဘယ်လိုလျော့ချသင့်တယ်လို့ အကြံပေးချင်လဲ။
ဖြူဖြူပညာရှင်တစ်ယောက်လိုတော့ အများကြီးတွေ မပြောတတ်ပါဘူး။ ဒါပေမယ့် နေ့စဉ်လူသားတွေထဲက လူသားတစ်ယောက်အနေနဲ့ပဲ ပြောရမယ်ဆိုရင်တော့ စည်းကမ်းက အရေးကြီးတယ်လို့ထင်တယ်။ ဘယ်အရာမဆို လောကကြီးမှာ အကောင်း၊အဆိုး ဒွန့်တွဲနေတာချည်းပဲ။ အဲ့မှာ ကောင်းတဲ့အကျိုးပိုများပြီးတော့ ဆိုးတဲ့အပြစ်နည်းဖို့ဆိုတာက ဉာဏ်ပညာလိုတာ၊ ပြီးတော့ စည်းကမ်းလိုတာ၊ ပြီးတော့ စိတ်ဓါတ်ပေါ့။ အဲ့ဒါအရေးကြီးတာလို့ ထင်ပါတယ်။ ဒါကိုသေချာသင်ထားပေးနိုင်ရင်၊ အဲဒီ့စိတ်ဓါတ်ကို ထည့်ထားပေးနိုင်ရင်ပေါ့။ လူဆိုတာ ကမ္ဘာပေါ်မှာ အင်အားအကြီးဆုံး သတ္တဝါပဲလေ။ သူ့လက်ထဲမှာပဲရှိတာ။ တခြားသော သတ္တဝါလေးတွေရဲ့ ဖြစ်တည်မှုကလည်း သူ့လက်ထဲမှာပဲရှိတာ။ သူ့ရဲ့ဖြစ်တည်မှုကိုယ်တိုင်ကလည်း သူ့လက်ထဲမှာပဲရှိတာ။ ဒီတော့ အရေးကြီးတာ စည်းကမ်းနဲ့ ဉာဏ်ပညာလိုတယ်လို့ပဲ ပြောချင်ပါတယ်။ စဉ်းစားကြည့်တော့လည်း တိုးတက်မှုတွေကလည်း လိုအပ်တာပေါ့။ လေယာဉ်ပျံကြီးတွေလည်း လိုအပ်တာပေါ့။ သဘာဝပတ်ဝန်းကျင်ကောင်းဖို့အတွက် ဒါနဲ့မသွားတော့ဘူးရယ်လို့တော့ မဟုတ်ဘူးလေ။ ဒါပေမယ့် ဒီကနေ ထွက်လာတဲ့ ဆိုးကျိုးတွေကို ဘယ်လိုမျိုး လျော့နိုင်သမျှလျော့အောင် လုပ်မယ်ဆိုတာကို စဉ်းစားရမှာပေါ့။
နောက်ဆုံးအနေနဲ့ ဖြူဖြူရဲ့ ပရိတ်သတ်တွေအတွက် သဘာဝပတ်ဝန်းကျင် ထိန်းသိမ်းရေးနဲ့ ပတ်သတ်တဲ့ Message လေးတစ်ခုလောက်ပြောပေးပါဦး။
ပန်းလေးတွေကိုချစ်ပါ။ အပင်လေးတွေကိုချစ်ပါ။ သစ်ပင်လေးတွေ စိုက်ပါ။ ငှက်ကလေးတွေကို အစာကျွေးပါ။ အဲ့ဒါ လွယ်လွယ်လေးတွေပါလို့။ ဒါပေမယ့် တစ်ခါတစ်လေကျလို့ရှိရင် လုပ်ဖို့ မေ့နေတတ်ကြတယ်။ ဖြူဖြူလည်း အခုဆိုလို့ရှိရင် အပင်လေးတွေကို စိုက်နေတယ်။ ပန်းတော့ ခူးရတာ့ပေါ့နော် (ရယ်လျက်)။ နောက်ထပ် ပိုအရေးကြီးတဲ့ ဟာတစ်ခုက အမှိုက်ပစ်တဲ့နေရာမှာ ဆင်ခြင်ပါ။ အမှိုက်တောင်းထဲကို အမှိုက်ကို ထည့်ပါ။ အပြင်သွားနေရင်းနဲ့ ဖတ်ကနဲ မပစ်ချပါနဲ့။ ကိုယ့်နား အမှိုက်မရှိရင် ပြီးရော သူများနား အမှိုက်ပွသွားလည်း ပြီးရောဆိုတဲ့ ဟာမျိူးလည်း ကျေးဇူးပြု၍မလုပ်ကြပါနဲ့လို့။ နောက်ပြီးတော့ Plastic သုံးတာကိုလည်း ကျေးဇူးပြု၍ လျော့ချပေးပါလို့။ ကျေးဇူးအများကြီးတင်ပါတယ်။
#Phyu Phyu Kyaw Thein
အစိမ်းရောင်ရပ်ဝန်းသို့ ခြေလှမ်းများအကြောင်း | ရွှေယမင်းဉီး
သူမက ကမ္ဘာကြီးရဲ့အနာဂတ်အကြောင်းကို စိတ်ဝင်စားတယ်။ စိတ်ဝင်စားရုံပဲလားဆိုတော့ မဟုတ်သေးဘူး။ စိတ်ကူးအိမ်မက်တွေနဲ့ ပြင်းပြတဲ့ ဆန္ဒတစ်ချို့ရှိတယ်။
ရန်ကုန်တစ်မြို့တည်းအနေနဲ့ ကြည့်မယ်ဆိုရင်တောင် အမှိုက်တွေဟာ တစ်ရက်ကို တန် (၂၅၀၀) လောက် ထွက်တယ်။ ဒီပမာဏကို မြင်သာအောင် ပြောမယ်ဆိုရင် ဆင်ကောင်ရေ (၆၄၀) ကောင်နီးပါးလောက် ရှိတယ်လို့ ပြောလို့ရတယ်။ ဒီလောက်များပြားလှတဲ့ ပမာဏတွေဟာ တစ်နေ့တစ်နေ့ Landfill ထဲကို ဖောချင်းသောချင်းကို ရောက်နေတယ်။ ဒါဟာ ရန်ကုန်တစ်မြို့တည်းရဲ့ အမှိုက်ထွက်နှုန်းတွေပါ။
ဒါဖြင့် မြန်မာတစ်နိုင်ငံလုံး ဆိုရင်ကော?
မျက်နှာလွှဲပြီးနေရင်တောင် မျက်စိရှေ့ရောက်လာတော့မယ့် ကမ္ဘာကြီးရဲ့ အနာဂတ်အတွက် သင့်မှာလည်း တာဝန်ရှိသလို၊ ကျွန်တော့်မှာလည်း တာဝန်မကင်းဘူး။ တိတိကျကျပြောရရင် လူသားအယောက်စီတိုင်းမှာ တာဝန်ရှိနေတယ်။
ကမ္ဘာကြီးရဲ့ အနာဂတ်ဟာ သင့်လက်ထဲမှာရှိနေပါပြီလို့ ဆိုလိုက်ရင် အလွန်အကြူးတင်စားရာ ကျလိမ့်မယ်။ ဒါပေမယ့် တကယ်ကြီးကိုပဲ ကျွန်တော်တို့ရဲ့ နေ့စဉ်လုပ်ရပ်တွေက အနာဂတ်ကမ္ဘာကြီးရဲ့ ပုံရိပ်တွေကို ပုံဖော်နေတယ်ဆိုတာကိုတော့ လက်ခံရပါမယ်။
ဒီနေ့တော့ ပိုကောင်းတဲ့ ကမ္ဘာကြီးရဲ့ပုံရိပ်တွေအတွက် အုတ်တစ်ချပ်၊ သဲတစ်ပွင့်အနေနဲ့ ပုံဖော်နေတဲ့ အမျိုးသမီးတစ်ယောက်အကြောင်းကို ပြောပြမယ်။ ပြီးတော့ သူမရဲ့ ရဲဘော်ရဲဘက်တွေအကြောင်းပေါ့။
သူမဆီမှာ အကြောက်တရားရှိတယ်။ ဒါပေမယ့် အကြောက်တရားဆိုတာ ရင်ဆိုင်ကျော်လွှားရမယ့် အရာတစ်ခုမှန်း ကောင်းကောင်းနားလည်ထားတယ်။
သူမဆီမှာ ရှုံးနိမ့်မှုတွေရှိတယ်။ ရှုံးနိမ့်မှုတိုင်းဟာလည်း နောက်ထပ်အခွင့်အရေးတစ်ခုလို့ စွဲစွဲမြဲမြဲခံယူထားတတ်တယ်။
ပင်ပန်းမှုတွေ ကြုံရတိုင်း “Never Give Up” လို့ရေရွတ်တယ်။ ခဏနားတယ်။ ပြန်စတယ်။ ထပ်ပင်ပန်းတဲ့အခါ ခဏနားတယ်။ ပြီးရင် ပြန်စတယ်။ ရပ်တန့်လိုက်ဖို့ထက်စာရင် အနားယူပြီး ပြန်စဖို့ကို ရွေးချယ်လေ့ရှိတယ်။
ပြီးတော့ သူမက ကမ္ဘာကြီးရဲ့အနာဂတ်အကြောင်းကို စိတ်ဝင်စားတယ်။ စိတ်ဝင်စားရုံပဲလားဆိုတော့ မဟုတ်သေးဘူး။ စိတ်ကူးအိမ်မက်တွေနဲ့ ပြင်းပြတဲ့ ဆန္ဒတစ်ချို့ရှိတယ်။ ဆန္ဒရှိရုံလေးပဲလား ဆိုတော့လည်း အဲဒီ့စိတ်ကူးတွေတိုင်းကို ရင်ဘတ်ချင်းတူတဲ့ ရဲဘော်ရဲဘက်တွေနဲ့ တည်ဆောက်နေတယ်။
သေချာတာကတော့ သူမကို ထမ်းပိုးထားတဲ့ ကမ္ဘာမြေကြီးရဲ့ အနာဂတ်အတွက် သူမရဲ့အနာဂတ်တွေကို ရင်းနှီးမြှပ်နှံ့ပစ်ဖို့ စိတ်အားထက်သန်တဲ့သူတစ်ယောက် ဖြစ်တယ်။
မိုင်ထောင်ချီတဲ့ ခရီးတစ်ခုကို ခြေတစ်လှမ်းက စတင်ရတယ်ဆိုခဲ့ရင် အဲဒီ့ခြေလှမ်းဟာ ဖန်တီးရာရဲ့ Startup Challenge 2017 ကနေ စတင်ခဲ့တယ်။ ပိုကောင်းတဲ့ ကမ္ဘာကြီးတစ်ခုအဖြစ် လှပနိုင်ဖို့ဆိုတဲ့ အတွေးစိတ်ကူးတွေရဲ့ စတင်ရာပေါ့။
နောက်ပြီး ကြားဖူးဉီးမှာပေါ့။ မြန်မြန်သွားချင်ရင် တစ်ယောက်တည်းသွား၊ ဝေးဝေးသွားချင်ရင် အတူတူသွားတဲ့။ အဲဒီ့အတွေးစိတ်ကူးတွေနဲ့ အဝေးဆုံးရွက်လွှင့်ဖို့ ရဲဘော်ရဲဘက်တွေကိုလည်း အဲဒီ့ Program ကနေတစ်ဆင့် ဆုံစည်းခွင့်ရခဲ့တယ်။
အမှိုက်တွေကို စနစ်တကျ စုစည်းမယ်၊ ပြန်ပြီး Recycle လုပ်လို့ရတဲ့ အရာတွေကို Recycle လုပ်မယ်။ ကမ္ဘာကြီးရဲ့ ပုခုံးပေါ်က လေးလံနေတဲ့ အမှိုက်ဝန်တွေကို လျော့ချမယ်။ ဒီအတွေးတွေက စီးပွားရေးတစ်ခုအနေနဲ့ ဆိုရင် စိတ်ကူးယဉ်ရာကျသလားလို့..။
ဒါပေမယ့် အဲဒီ့ စိတ်ကူးလှလှလေးတွေကို အကောင်အထည်ဖော်ဖို့ Investor တွေ၊ ပံ့ပိုးပေးမယ့် Organization တွေကိုနဲ့လည်း Program ကနေတစ်ဆင့် ထိတွေ့ခွင့်ရခဲ့တယ်။
မတည်ရင်းနှီးငွေ $25,000 နဲ့စတင်ခဲ့တယ်။ စိတ်ကူးတွေကို ထုတ်ပိုးရင်းပေါ့။
ဒီကနေ့ကနေ စပြီးရေတွက်ရင် (၃) နှစ်တိုင်ခဲ့ပြီ။ Customer “0” ကနေ စတင်ခဲ့တဲ့ RecyGlo ဟာ အခုတော့ အဖွဲ့အစည်းပေါင်း “100” ကျော်နဲ့ တွဲဖက်ပြီး အလုပ်တွေလုပ်နေကြပြီ။ ခြေလှမ်း ၁၀၀ တော့ တိုင်ခဲ့ပြီ ပြောရမလားပဲ။
အဲဒီ့ သုံးနှစ်တာကာလအတွင်းမှာလည်း ကိုယ်တွေနဲ့ ရည်မှန်းချက်တူတဲ့ အဖွဲ့အစည်းတွေ၊ ကမ္ဘာကြီးရဲ့ အနာဂတ်ကို ကိုယ်တွေလို ဂရုစိုက်တဲ့သူတွေကိုလည်း တွေ့လာရတယ်။ ဒီလိုပဲ ကိုယ့်အကျိုးစီးပွားရေးကိုပဲ ဉီးစားပေးတတ်တဲ့သူတွေကိုလည်း တွေ့ရသေးတာပါပဲ။ အနည်းဆုံးတော့ သဘာဝပတ်ဝန်းကျင်ကို ဂရုစိုက်တဲ့သူတွေ၊ အဖွဲ့အစည်းတွေကို မြင်ရတိုင်း စိတ်ထဲကြည်နူးမှုတွေတော့ ခံစားရမြဲပေါ့။
နောက်ပြီး မေးကြတယ်။ RecyGlo ရဲ့ ခြေလှမ်းတွေ ဘယ်လောက်ခရီးတွင်ခဲ့သလဲတဲ့။
ရန်ကုန်ကနေတစ်ဆင့် Singapore နဲ့ Malaysia မှာ ခြေလှမ်းခွဲတွေ ဆက်လှမ်းတယ်။ ဒါနဲ့တင်မရပ်သေးဘဲ ၂၀၂၀ သြဂုတ်ကနေစပြီးတော့ နေပြည်တော်နဲ့ မန္တလေးမှာပါ RecyGlo ရဲ့ ခြေလှမ်းတွေကို ချဲ့ထွင်ရင်း စိတ်ကူးတွေကို အကောင်အထည် ဆက်ဖော်တယ်။
နာမည်ကို စပေးဖြစ်ကတည်းက Recycling Globally ဆိုတဲ့ အဓိပ္ပာယ်ပဲမလား။ ခြေလှမ်းတွေကို ဆက်လှမ်းရင်း ဆက်လှမ်းရင်း မိုင်တွေထောင်ချီတဲ့ထိပေါ့။
မှန်းချက်တွေ၊ ပြီးတော့ နှမ်းထွက်တွေ
တစ်ချို့အခြေအနေတွေမှာ မှန်းချက်နဲ့နှမ်းထွက်မကိုက်ဘူးဆိုတာမျိုး ရှိတတ်တယ်မလား။ ပြိုင်ပွဲမှာ စပြိုင်တုန်းက အတွေးတွေက အမှိုက်ကိုရောင်းချင်တဲ့သူနဲ့ ပြန်ဝယ်ချင်တဲ့သူတွေကို ချိတ်ဆက်ပေးမယ် ဆိုတာလောက်ပဲ။ ဒါပေမယ့် တကယ်တမ်း Business ကို စတဲ့အချိန်မှာ ကိုယ်မျှော်လင့်မထားတဲ့ အခြေအနေတွေ၊ ကိုယ်တွေးထားသလောက် မလွယ်တဲ့အရာတွေကို စပြီး ထိတွေ့လာရတယ်။
ဒီတော့ အပြောင်းအလဲတွေနဲ့အတူ စီးပွားရေး ပင်လယ်ပြင်မှာ ဆက်ကူးနိုင်ဖို့ ကြိုးစားရပြီ။ စောင့်ကြည့်နေကြတဲ့ မျက်လုံးတွေ၊ ယုံကြည်ခဲ့ကြတဲ့ မျက်လုံးတွေအတွက် ရှင်သန်နိုင်ကြောင်း၊ ကြီးထွားနိုင်ကြောင်း သက်သေပြရတော့မယ်။
အဲ့ဒါနဲ့ပဲ နှမ်းထွက်မကိုက်နိုင်တဲ့ အရာတွေကို ခဏနား။ Customer တွေရဲ့အသံတွေကို ပြန်နားစွန့်။ တကယ်တမ်း သူတို့လိုအပ်တာ ဘာလဲ? ကိုယ်က ဘာတွေ ပံ့ပိုးပေးနိုင်မှာလဲဆိုတဲ့အရာတွေကို တွေ။ ဒီလိုနဲ့ Waste Management နဲ့ပတ်သက်တဲ့ Training တွေစပေးတယ်။ Bin တွေကို စနစ်တကျ ခွဲပေးတယ်။ Service Package တွေကို ဆွဲတယ်။ အမှိုက်တွေကို ပစ်တုန်းက ခွဲပစ်ပေမယ့် နောက်ပိုင်းကျရင် ပြန်ရောသွားရင် ထူးမှာမဟုတ်ဘူးဆိုတဲ့ Customer တွေရဲ့ အမြင်တွေအတွက် Collection လုပ်ပြီး Recycle လုပ်တဲ့ စက်ရုံတွေထိ ချိတ်ဆက်ပြီး ဝန်ဆောင်မှုတွေ ပေးတယ်။ အမှိုက်စထွက်တာကနေစပြီး အဆုံးအထိ Supply Chain တစ်လျှောက်လုံး တာဝန်ယူပေးခဲ့တယ်။ နောက်ဆုံး Organization အလိုက် တစ်လကို အမှိုက်တွေ ဘယ်လောက်ထွက်လဲဆိုတဲ့ Report တွေ၊ ပတ်ဝန်းကျင်မထိခိုက်အောင် ဘာတွေလုပ်ဆောင်သင့်တယ်ဆိုတဲ့ Consultation တွေထိပေါ့။
ဘယ်လိုမှန်းချက်တွေက ဘယ်လောက်နှမ်းထွက် မကိုက်ခဲ့တယ် ထားဉီးတော့။ လူးလွန့်နေတဲ့ လှေတစ်စင်းကိုဉီးဆောင်ရင်း ရှေ့ကိုဆက်လှမ်းနိုင်ခဲ့တာတွေကို တွေးရင်း သူမ ပြုံးမိတယ်။ ဘေးနားမှာလည်း ရင်ဘတ်ချင်းနီးတဲ့ ရဲဘော်တွေတစ်သိုက်ရှိတယ်လေ။
“အမှိုက်တွေ လိုချင်ရင်တော့ ယူသွားပါ၊ ဒါပေမယ့် Service Fees ပေးဖို့ကျတော့ အဆင်မပြေလောက်ဘူး”
“အလုပ်တွေက ရှုပ်နေတာ၊ အမှိုက်တွေခွဲဖို့ မအားဘူး ဖြစ်နေတာ”
“အမှိုက်တွေခွဲပေးဖို့လောက်ထိတော့ ဖြစ်နိုင်ပါတယ်။ ဒါပေမယ့် Service Charges တော့ ပေးလို့ အဆင်မပြေလောက်ဘူး။ အမှိုက်တွေလည်း ခွဲပေးရမယ်ဆိုတော့လည်းလေ”
တစ်ချို့သော အဖွဲ့အစည်းတွေဆီကနေ အသံတွေကြားရတယ်။ အဲဒီ့လိုပဲ တစ်ဖက်မှာကျတော့ ပတ်ဝန်းကျင်ကို အထောက်အပံ့ဖြစ်စေမယ့် Waste Management နဲ့ပတ်သက်တဲ့ ဝန်ဆောင်မှုတွေရှိလာတဲ့အပေါ် ဝမ်းပန်းတသာ ကြိုဆိုကြတဲ့ အဖွဲ့အစည်းတွေလည်း တွေ့လာရတယ်။ ဒီလိုမျိုး ဝန်ဆောင်မှုတွေက ရှိသင့်တယ်ဆိုတဲ့ မှတ်ချက်စကားမျိုးတွေနဲ့ပေါ့။
“RecyGlo ရဲ့ CEO ပါ” လို့ မိတ်ဆက်လိုက်ရင်လည်း ထွက်လာတတ်တဲ့ “ဪ” ဆိုတဲ့ ရေရွတ်သံတွေလည်း ကြားခဲ့ရတာ အကြိမ်ပေါင်းမနည်းဘူးပေါ့။
အဲဒီ့ “ဪ” ဆိုတဲ့ အသံလေးရဲ့အနောက်မှာ လူငယ်အမျိုးသမီးတစ်ယောက်က ဒီအဖွဲ့အစည်းကို ဉီးဆောင်နေတာလား၊ ဖြစ်ပါ့မလား၊ ဟုတ်ပါ့မလား ဆိုတဲ့ သံသယမေးခွန်းတွေက ထုတ်မမေးဖြစ်လည်း မေးနေသယောင်ယောင်။
ဒီအသံတွေကို တုံ့ပြန်နိုင်မယ့် အကောင်းဆုံးနည်းလမ်းကတော့ ရင်ကိုကော့၊ ခေါင်းကိုမော့။ ပြီးတော့ ရှေ့ကိုတစ်လှမ်းချင်း လှမ်းလိုက်ရုံပဲလေ။ ကိုယ်လုပ်နေတာကလည်း အဓိပ္ပာယ်ရှိတဲ့ အလုပ်တွေပဲမဟုတ်လား။ တစ်နေ့ကျရင်တော့ ကမ္ဘာကြီး ပြန်လည်စိမ်းလန်းလာရမယ်လေ။
လက်ကိုင်တုတ်.... (ဝါ) လက်နက်.....
သူမအတွက် အရေးကြုံတိုင်းမှာ သုံးလေ့ရှိတဲ့ လက်နက် (ဒါမှမဟုတ်) သွားတဲ့လမ်းတစ်လျှောက် အားကိုးရာ လက်ကိုင်တုတ်ကတော့ သတ္တိပဲ။
လူတွေက ပြောကြတယ်။ အမျိုးသားဆိုတာ ရဲရင့်ရမယ်။ သတ္တိရှိရမယ်။ အမျိုးသမီးဆိုရင် သိမ်မွေ့ရမယ်၊ နူးညံ့ရမယ်။ အဲဒီ့လိုမျိုး ယူဆချက်တွေပေါ့။
ဒါပေမယ့် ခရီးကြမ်းတစ်လျှောက် ခြေလှမ်းတွေတိုင်းအတွက် သတ္တိဆိုတာ ယောက်ျားမရွေး၊ မိန်းမမရွေး လိုအပ်တဲ့ အားအင်တစ်ခုဆိုတာ သဘောပေါက်လာခဲ့တယ်။ သတ္တိဟာ အခက်အခဲတွေ၊ ကြောက်ရွှံခြင်းတွေကို ဖြေရှင်းပေးမယ့် တစ်ခုတည်းသော အရာပါပဲ။
တကယ်ပဲ သတ္တိဆိုတဲ့အရာမျိုးက ကိုယ်စိတ်ထဲ မလုံခြုံတာတွေ၊ ကြောက်နေတာတွေ၊ စိုးရိမ်နေတာမျိုးတွေကို တည့်တည့်ကြည့်ပြီး ရင်ဆိုင်ပစ်တာမျိုး။ Overcome လုပ်ပစ်တာမျိုးပေါ့။ အဲ့လက်နက်က အစွမ်းထက်လွန်းလှတယ်လေ။
သူမနားလည်လိုက်တယ်။ သတ္တိဆိုတာက အကြောက်တရားတွေကို တွန်းလှန်ပစ်ဖို့ တစ်ခုတည်းသော လွတ်မြောက်ရာလမ်းပဲ။
ကျောင်းနေအရွယ်မှာ ကြားခဲ့ဖူးတယ်။ အမှိုက်တွေကို အမှိုက်ပုံးအတွင်းသို့ ပစ်ပါ တဲ့။ ဘယ်လိုပစ်ရမလဲဆိုတာ မပြောခဲ့ဘူး။ ဘာ့ကြောင့် ပစ်ရမှာလဲဆိုတာ မသိခဲ့ရဘူး။ မပစ်ရင် ဘယ်လိုနောက်ဆက်တွဲတွေ ဖြစ်လာနိုင်မလဲဆိုတာ မကြားခဲ့ရဘူး။
လူသားအယောက်စီတိုင်းဟာ အမှိုက်တွေကို ထုတ်နေကြတယ်။ သူတို့စွန့်ပစ်လိုက်တဲ့ အမှိုက်တွေ ဘယ်ရောက်သွားကြလဲဆိုတာ မသိကြဘူး။ စိတ်မဝင်စားကြဘူး။ Organization တွေဟာ အမှိုက်တွေ၊ စက္ကူတွေကို နေ့စဉ်စွန့်ထုတ်နေတယ်။ ဒီများပြားလှတဲ့ပမာဏရှိတဲ့ အမှိုက်တွေက ဘယ်တွေရောက်သွားမှာလဲ။ အများစုကတော့ လေးလေးနက်နက် မေးမိကြမယ်၊ တွေးမိကြမယ် မထင်။
လူတွေ တွေးကြမှာက အမှိုက်တွေကို စည်ပင်ကလာသိမ်းသွားတယ်။ ကိုယ့်ပတ်ဝန်းကျင်မှာ ရှင်းလင်းသွားတယ် ဆိုတာလောက်ပေါ့။ အဲဒီ့အမှိုက်တွေက စည်ပင်ကလာသိမ်းပြီးတဲ့နောက် ကမ္ဘာကြီးရဲ့ တစ်ထောင့်တစ်နေရာမှာ သွားစုနေတယ်ဆိုတဲ့အကြောင်း သိကြမယ်မထင်။ သိဖြစ်ရင်တောင် အရေးတယူ စိတ်ဝင်စားမိမှာတော့ မဟုတ်။
အဲဒီ့အကြောင်းတွေကို သူမ ပြောပြချင်မိတယ်။ ကိုယ်ပစ်လိုက်တဲ့ အမှိုက်တစ်ခုဟာ ကိုယ့်သား၊သမီး မြေး၊မြစ်တွေ ကြုံတွေ့ရမယ့် အနာဂတ်ကမ္ဘာပေါ်မှာ ဘယ်လောက်ထိ သက်ရောက်မှုတွေရှိမလဲဆိုတဲ့ အကြောင်းတွေ။ ညစ်ညမ်းမှုတွေအပြည့်နဲ့ ကမ္ဘာပေါ်ကနေ့ရက်တွေ အကြောင်းတွေ။ ဒီလိုမဖြစ်အောင် ဘယ်လိုလျော့ချလို့ရမလဲ၊ တားဆီးလို့ဖြစ်နိုင်မလဲဆိုတဲ့ အကြောင်းတွေ။
ရင်ထဲမှာတော့ စကားလုံးတွေ ပြည့်နေတယ်။ ပြည့်နေတဲ့ စကားလုံးတိုင်းကိုလည်း ကိုယ်စွမ်းဉာဏ်စွမ်းရှိသလောက် သွန်ထုတ်နေတယ်။ တစ်နေ့ အားလုံးကြားနိုင်မှာပါ။ ကြားတဲ့အတိုင်းလည်း သိနိုင်မှာပါ။ သိတဲ့အတိုင်းလည်း လုပ်ဆောင်နိုင်မှာပါ။
ကျွန်တော်တို့ရဲ့ စကားဝိုင်းလေး အဆုံးသတ်ခဲ့တယ်။ နှုတ်ဆက်ပြီး အပြန်လမ်းမှာ ရင်ထဲမှာ အမှိုက်တွေပဲ ပြည့်နေသလိုလို တင်းကြပ်ကြပ်နဲ့။ တစ်ခါမှာ ခေါင်းထဲမရောက်ဖူးတဲ့ ကမ္ဘာကြီးရဲ့ အနာဂတ်နဲ့ အမှိုက်တွေအကြောင်းကို ခေါင်းထဲစီရင်း ပေါ့ပါးလို ပေါ့ပါးငြား စီးကရက် တစ်လိပ်လောက် ဖွာလိုက်တယ်။
အဲဒီ့ စီးကရက်ဖင်စီခံလေးတွေကို တစ်သျှူးလေးနဲ့ပတ်ပြီး အိတ်ထဲပဲထည့်လိုက်မိတယ်။ ပြီးတော့ အလိုလိုပြုံးလိုက်မိတယ်။ အနည်းဆုံးတော့ ကျွန်တော့်ကို ထမ်းပိုးထားတဲ့ ဟောဒီ့ကမ္ဘာကြီးအတွက် အဆိပ်အတောက်တစ်ခုတော့ မဖြစ်ချင်ဘူးလေ။ ကိုယ့်လူရော?
#Shwe Yamin Oo
ပရိတ်သတ်ရင်ထဲက တစ်စုံတစ်ယောက်ဖြစ်ချင်တယ် Phway Phway
ခံစားချက်ပြင်းတဲ့ လူတစ်ယောက်အဖို့ ခံစားချက်တွေကို အရင်းတည်ပြီး အလုပ်တွေလုပ်ခွင့်ရတာ၊ ပရိသတ်ရဲ့ မေတ္တာတွေကို ခံယူခွင့်ရတာ ကံကောင်းခြင်းတစ်ခုပါပဲ။
မင်္ဂလာပါ ဖွေးရေ....။ ဒီနေ့ တွေ့ဆုံမှုက MODA နဲ့ ဘယ်နှကြိမ်မြောက် တွေ့ဆုံမှုဖြစ်မလဲ။
ဒီနေ့ MODA ရဲ့ Cover Star အနေနဲ့ ရိုက်ဖြစ်ခဲ့တဲ့အကြောင်းလေးလည်း ပြောပြပေးပါဦး။
တစ်ကမ္ဘာလုံး Covid 19 ကပ်ရောဂါလည်း ဖြစ်နေတယ်ဆိုတော့ ဖွေးတို့ အလုပ်တွေလည်း နားထားတာ လေးလလောက် ရှိပြီ။ ဒါပထမဆုံး ပြန်ရိုက်တဲ့ Photo shoot ပေါ့နော်။ ပြီးတော့ August က ဖွေးရဲ့ Birthday Month လည်း ဖြစ်နေတော့ အမှတ်တရလည်း ဖြစ်အောင် လက်ခံဖြစ်လိုက်တာပါ။
အဲ့ဒီလိုမျိုး ကပ်ရောဂါတွေဖြစ်လို့ နားလိုက်ရတဲ့ကာလမှာ ဖွေး ဘာတွေလုပ်ဖြစ်လဲ။
အဲ့လို နားလိုက်ရတဲ့အချိန်မှာကျတော့ ကိုယ့်ရဲ့အတွင်းထဲက စိတ်လေးကို အနားပေးရသလိုဖြစ်တော့ ကိုယ့်စိတ်ထဲမှာ ဖြစ်နေတဲ့ Emotional Burden တွေကို ကိုယ့်ဟာကိုယ် ရှင်းပြီးတော့ ကိုယ့်ကိုလည်း ရှာဖွေတွေ့ရှိသွားတယ်ပဲ ပြောရမှာပေါ့နော်။
လူတွေက အလုပ်တွေဆက်တိုက်လုပ်ရင် တွေးဖို့ အချိန်မရှိတတ်ဘူးပေါ့။ အခုလို ကိုယ့်အတွက် အချိန်ပေးရင်း တွေးဖြစ်ရင်းနဲ့ ကိုယ့်ကိုယ်ကိုလည်း တွေ့ရှိသွားတယ်ဆိုတော့ ဘာတွေများ တွေ့ရှိခဲ့သလဲ။
ကိုယ်ဘယ်လို ဖြစ်ချင်တာလဲတို့၊ ငယ်ငယ်က ကိုယ်လိုချင်လို့ ထင်ပြီး လုပ်ခဲ့တဲ့အလုပ်တွေက စဉ်းစားချိန်မရှိဘဲ ဆက်တိုက်လုပ်နေတယ်ပေါ့နော်။ နောက်တော့မှ ကိုယ်ဘယ်လမ်းကို သွားချင်လဲဆိုတာကို Rediscover ဖြစ်သွားတယ်ပေါ့နော်။ ပြီးတော့ မအားလို့ မလုပ်ဖြစ်တဲ့အရာလေးတွေ လုပ်ဖြစ်တယ်။ ဥပမာ အပင်စိုက်တာတို့၊ နောက်ပြီးတော့ အိမ်က ဝရံတာမှာ Garden သေးသေးလေး ရချင်တာ။ အဲ့လိုအချိန်မှာတော့လုပ်ဖြစ်ခဲ့တယ်ပေါ့။
အားလုံးက သိထားကြတာတော့ ဖွေးဖွေးက သရုပ်ဆောင်တယ်။ သရုပ်ဆောင်တဲ့ဘက်မှာ ပါရမီပါတယ်၊ ထူးချွန်တယ်ပေါ့။ လူတွေမသိသေးတဲ့ ဖွေးဖွေးရဲ့ Hidden Talent ဆိုရင် ဘာဖြစ်မလဲ။
Hidden Talent ဆိုတာထက် ဖွေးက ဟိုစပ်စပ် ဒီစပ်စပ်ပိုလုပ်ဖြစ်တယ်။ ကျွမ်းဘားဆိုလည်း ကျွမ်းထိုးလိုက်တာပဲ၊ အခုလည်း ပြန်လုပ်ဖို့တော့ ကျင့်တော့ ကျင့်နေတယ်။ မနှစ်ကလည်း ကား Accident ကြောင့် လက်ကျိုးထားတာဆိုတော့လေ။ အခုတော့ ပြန်ပြီးသန်အောင် လေ့ကျင့်နေပြီ။ အလေးတွေ ဘာတွေလည်း ပြန်မနေပြီ။ Handstand တွေတော့ မရသေးဘူးပေါ့နော်။ ကိုယ်ကာယနဲ့ ပတ်သက်ပြီးတော့ လုပ်ရတာမျိုးတွေတော့ ကြိုက်တယ်။
ဖွေးဖွေးရယ်ဆိုပြီး ဖြစ်လာစေခဲ့တဲ့ အချက်တွေထဲမှာ အခြေခံအကျဆုံး၊ အရေးကြီးဆုံးအချက်ဆိုရင် ဘာဖြစ်မလဲ။ ဥပမာပြောရရင် အဲဒီအရသာ မရှိဘူးဆိုရင် ဖွေးဖွေးဆိုတာ ဖြစ်လာချင်မှ ဖြစ်လာလိမ့်မယ် ဆိုတဲ့အရာမျိုးပေါ့။
ဖွေးက မင်းသမီးမဖြစ်ချင်ဘူး။ သရုပ်ဆောင် ဖြစ်ချင်တာ။ကိုယ်က ရင်ထဲမှာ ခံစားရတာတွေ အရမ်းများတယ်။ ဒါတွေကို ပြန်အသုံးချချင်တယ်။ အားကစားကို ပြင်းပြင်းထန်ထန် လုပ်တာတို့၊ ဒါမှမဟုတ်ရင် ရုပ်ရှင်ထဲမှာ Character ကို စီးမြောလိုက်တာတို့ပေါ့။ အဲ့လို ခံစားချက်တွေ ပြည့်လျှံနေတယ်။ ပြောရရင် ဖွေးရဲ့ ခံစားချက်တွေက အရေးကြီးတယ်၊ အခြေခံကျတယ်ပေါ့။
ဖွေးဖြေသွားတဲ့ထဲမှာ မင်းသမီးမဖြစ်ချင်ဘူး၊ သရုပ်ဆောင် ဖြစ်ချင်တယ်လို့ ပြောခဲ့တယ်နော်။ အဲဒီ့ဖြစ်တည်မှု နှစ်ခုကြားမှာ ဘာတွေကွာခြားချက်ရှိတယ်လို့ မြင်လဲ။
သရုပ်ဆောင်ကျတော့ ဖွေးရဲ့ ရင်ထဲမှာရှိတဲ့အရာတွေကို ထုတ်ဖော်အသုံးချခွင့်ရှိမယ်။ ဒဏ်ရာတွေပဲ ဖြစ်ဖြစ်ပေါ့။ အပြင်က Reality က ဖွေးဖွေးတို့ ရွှေရည်ကိုဦးတို့က ခံစားချက်ကို ထုတ်ဖော်ရတာမကြိုက်ဘူး။ အဲဒီ့တော့ သရုပ်ဆောင်အနေနဲ့ပဲ ခံစားချက်တွေကို ပေါက်ကွဲ အသုံးချချင်တယ်။ ကိုယ့်ကိုယ်ကို သရုပ်ဆောင်တစ်ယောက်လိုပဲ မြင်ချင်တယ်။ မင်းသမီးလိုမျိုး အခြွေအရံတွေအများကြီးနဲ့ Glamour ဖြစ်တဲ့ ပုံစံမျိုးကို သိပ်ပြီး မပျော်မွေ့ဘူး။
ပုံမှန်အားဖြင့်ဆိုရင်တော့ ကိုယ်က သရုပ်ဆောင်တစ်ယောက်အနေနဲ့ လူတွေရဲ့ သတိထားမှုကို ခံရတယ်လေ။ ကိုယ်က စပြီး သတိထားမိတယ်ဆိုတဲ့ လူမျိုးတွေဆို ဘယ်လိုလူမျိုးတွေ ဖြစ်လေ့ရှိလဲ။
ကိုယ့်ကိုယ်ကို Self Respect ရှိတဲ့သူမျိုးတွေ။ နောက် မာနရှိတယ်။ Humble ဖြစ်တယ်ဆိုတဲ့သူမျိုးတွေ။ မာနရှိတာနဲ့ ချေတာနဲ့လည်း မတူပြန်ဘူးကို။ အဲ့လိုလူမျိုးတွေဆို သတိထားမိတယ်။ ပြီးရင် နောက်ထပ် ဖွေးသဘောကျတဲ့သူမျိုးက ပေါ့ပေါ့ပါးပါးပဲ နေတတ်တဲ့သူတွေပေါ့။ ကိုယ့်ကိုယ်ကိုလည်း သူများနဲ့ ယှဉ်မတွေးဘူး။ သူတို့ Vibe ကိုက ပေါ့ပါးနေတဲ့သူတွေကို သဘောကျတယ်။
ဖွေးသာ အနုပညာရှင်တစ်ယောက် ဖြစ်မလာဘူး။ မဖြစ်ခဲ့ဘူးဆိုရင် အခုအချိန် ဘဝကို ဘယ်လိုဖြတ်သန်းနေမလဲ။
အင်း.. အားကစားသမားတစ်ယောက်တော့ ဖြစ်နေမယ်ထင်တယ်။ ကျွမ်းဘားတို့၊ ဘတ်စကတ်ဘောတို့ လိုမျိုး ကိုယ်ကာယနဲ့ပတ်သက်ပြီးStrong ဖြစ်တဲ့သူတွေကို အရမ်းသဘောကျတယ်။ အဲ့ဒါတွေ မဖြစ်ခဲ့ရင်လည်း ဖွေး ဟိုမှာပဲ အခြေချနေပြီး Art School တွေတက်ပြီး နေဖြစ်လောက်တယ်။ ဒါတွေပဲ ဝါသနာပါတာဆိုတော့။
အနုပညာရှင်တစ်ယောက်အနေနဲ့ ဖွေးဟာ တခြားသူတွေထက်စာရင် ဘယ်လိုအခွင့်အရေးမျိုးတွေ ပိုရတယ်လို့ ခံစားရလဲ။ ဘယ်လိုအခွင့်အရေးမျိုးတွေ ဆုံးရှုံးတယ်လို့ကော ခံစားရလဲ။
အခုအချိန်မှာတော့ ဖွေးက အဲ့ဒါတွေကို Overcome ဖြစ်သွားပြီ ပြောလို့ရတယ်။ အဲ့လိုမျိုးတွေ သိပ်မတွေးဖြစ်တော့ဘူး။ လက်ခံလိုက်တယ်ပေါ့။ အရင်တုန်းကတော့ ငါဘာတွေရတာလဲ၊ ငါဘာတွေ ဆုံးရှုံးတာလဲဆိုတာကို တွေးတဲ့အချိန်တွေ ရှိတယ်လေ။ ၂၀ဝ၇ ခုနှစ်လောက်ကတည်းက ဒီအလုပ်စလုပ်တာဆိုတော့ အခုဆို ၁၃ နှစ်ကျော်ပြီလေ။ လူငယ်တုန်းကတော့ တွေးဖြစ်တယ်ပေါ့။ သက်တောင့်သက်သာ မဖြစ်ခဲ့တာတွေ ရှိတယ်။ ငယ်ငယ်ကဆို သူများက ကိုယ့်ကို ကြည့်တာမကြိုက်တဲ့သူထဲမှာ ပါတယ်ဆိုတော့လည်းလေ။
အရင်ကဆို Rock Show တွေဘာတွေသွားတယ်။ ကိုယ်က ခုန်ပေါက်မူးရူးနေတယ်။ အဲ့ဒါကို ကိုယ့်ကို ဓါတ်ပုံတွေ ဘာတွေ ရိုက်တာတို့။ အဲ့လိုမျိုး ကိုယ့်ရဲ့ Personalအချိန်မှာပေါ့ Selfie တွေလာရိုက်တာတို့ဆို နည်းနည်းတော့ စိတ်အနှောင့်အယှက်ဖြစ်တယ်။ ငယ်ငယ်ကပေါ့။ ဘာအခွင့်အရေးမျိုးတွေ ရလဲဆိုတော့ စားသောက်ဆိုင်တွေ ဘာတွေသွားရင် ကိုယ့်ကို မုန့်အလကားကျွေးလိုက်တာတို့။ လက်ဆောင်တွေ အများကြီးရတာတို့ပေါ့။ နောက်ပြီးတော့ ကိုယ်က ကိုယ့်နာမည်ကို တန်ဖိုးထားတဲ့အတွက် ကိုယ့်ရဲ့အဖေ၊ အမေတို့လည်း မျက်နှာမငယ်ရဘူးပေါ့။ ဖွေးရဲ့အဖေ၊ ဖွေးရဲ့အမေလို့ ပြောလိုက်တာနဲ့ အားလုံးကလည်း ချစ်ကြတယ်ပေါ့။
ပရိတ်သတ်တွေက သိကြတဲ့ ဖွေးဖွေးရဲ့ Life နဲ့ မိသားစုတွေ၊ သူငယ်ချင်းတွေပဲသိတဲ့ ရွှေရည်ကိုဦးရဲ့ Life နဲ့ ဘာတွေကွာခြားချက်ရှိလဲ။
ဖွေးက Personal Lifeကို Public ချပြလေ့မရှိဘူး။ အဲဒါကို တစ်ချို့က လျှို့ဝှက်တယ် ထင်ကြတယ်ပေါ့။ ဒါပေမယ့် တကယ်က အဲ့လိုမဟုတ်ဘူး။ အိမ်က မိသားစုကိုလည်း သိပ်ပြောလေ့မရှိဘူး။ ကိုယ့်ရဲ့ ကိစ္စတွေပေါ့၊ အချစ်ရေးတို့၊ လူမှုရေးတို့ အဲ့ဒါတွေကိုလည်း တစ်ယောက်တည်းပဲ ကြိတ်ပြီး ဖြေရှင်းလေ့ရှိတယ်။ ကိုယ့်အကြောင်းကို ကိုယ်ပဲ သိလေ့ရှိတယ်ပေါ့။
နောက်ပြီးကျတော့ ဖွေးပဲဖြစ်နေတာလားတော့ မသိဘူး။ ဖွေးရဲ့စိတ်ထဲမှာ Introvert က တစ်မျိုး၊ Extrovert ကတစ်မျိုး။ တစ်ခုစီရှိနေသလို အမြဲခံစားရတယ်။ ရှက်တဲ့ဟာတွေဆိုလည်း အရမ်းရှက်တတ်တယ်။ မရှက်တော့ဘူးဆိုရင်လည်း ကင်မရာရှေ့ရောက်ရင် Character ဝင်ဖို့ပဲ တွေးပြီး မရှက်တတ်တော့ဘူး။ နောက်ပြီး အပြင်က Life မှာကျတော့ နည်းနည်း ဇီဇာကြောင်တတ်တယ်ပေါ့။ ဒါဆို ငါမလုပ်နိုင်ဘူး။ ဟိုဟာဆို ငါမကြိုက်ဘူးဆိုတာ ရှိတယ်။ လုပ်ငန်းခွင်ထဲက Life မှာတော့ ဘာပဲလာလာ လုပ်မယ်ဆိုတာမျိုး ရှိတယ်ပေါ့။
ဘယ် Life မှာနေရတာ ပိုသဘောကျမိလဲ။
တစ်လှည့်စီနေရတာ သဘောကျတယ်။ ဖွေးက ဘဝတစ်ခုမှာ အကြာကြီး နေရတာမကြိုက်ဘူး။ ဥပမာ သူငယ်ချင်းမှာ နေမယ်ဆိုလည်း ခဏပဲ။ အိမ်မှာ ဆိုလည်း အဲ့လိုပဲ။ အပြောင်းအလဲလေး ဖြစ်နေရတာကို သဘောကျတယ်။
အပြောင်းအလဲဆိုမှ ပြောရဦးမယ်။ အခု Covid ကာလ နားချိန်ရောက်မှပဲ ကိုယ့်ကိုယ်ကို ပြောင်းလဲလာတာလေးတွေ ရှိတယ်။ Healthy Choices လေးတွေကို ပိုပြီး အလေးပေးလာမိတယ်။ အရင်တုန်းကဆိုရင် Healthy Choices တွေကို တစ်ဝက်လောက်ပဲ အလေးပေးဖြစ်တယ်။ အကောင်းနဲ့ အဆိုးနဲ့ မျှတရမယ် ဆိုတာလောက်ပဲ တွေးတယ်။ အရက်သောက်တဲ့နေ့ သောက်မယ်၊ ကျန်းမာရေး ဂရုစိုက်တဲ့နေ့က စိုက်မယ်၊ ဘုရားတရားလုပ်တဲ့နေ့ကျ လုပ်မယ် အဲ့လိုမျိုးပေါ့။ အခုကျတော့ အသက်အရွယ်လည်း ရလာပြီဆိုတော့ ကိုယ်ကျန်းမာရေးကို ဂရုစိုက်မယ်။ Fit ဖြစ်တဲ့သူမျိုး ဖြစ်ရမယ်ဆိုပြီး ပြောင်းလဲတွေးလာတာမျိုး ရှိတယ်ပေါ့နော်။
အဲဒီအတွေးကရော Covid ဖြစ်ရပ်ကြီးကြောင့် ရလာတာလား၊ နားချိန်ရလာလို့ ကိုယ့်ကိုယ်ကို သုံးသပ်ရင်း တွေးဖြစ်လာတာလား။
နားချိန်ရလို့ တွေးဖြစ်လာတာတွေပေါ့။ အစကတော့ အဲ့လို နားနားချင်း ပထမတစ်လလုံး အရမ်းစားပစ်တာ။ တစ်နေ့ကို ခုနစ်နပ်လောက်ကို စားတာ။ နောက်တစ်လကိုကျတော့ အသောက်ချည်းပဲ။ Alcohol တွေ Review တွေလုပ်ပြီးတော့ စမ်းပစ်တယ်။ တစ်မျိုးစီ တံဆိပ်ပေါင်းစုံ သောက်တာပေါ့။ အဲ့လို နှစ်လလောက် လုပ်ပြီးတော့ ဒါကြီးကို မကြိုက်တော့ဘူးဆိုပြီး အပင်တွေဘက် လှည့်သွားတယ်။ အပင်မျိုးစုံ ဝယ်ပြီးတော့ စိုက်တယ်။ ဖွေးဖြစ်ချင်သလို Balcony လေးကို ဆင်တယ်။ အရင်ကဆို ကားရိုက်တွေသွားတယ်။ ပြန်လာရင် ပင်ပန်းပြီး ဘာမှမလုပ်နိုင်တော့ဘူးပေါ့။ အခုဆို ဖွေးအခန်းလေးကိုလည်း စိတ်ကြိုက်လေး ဆင်တယ်။ ပြောရရင် ကိုယ့်ကိုယ်ကို အချိန်ပေးဖြစ်တယ်ပေါ့။ ကိုယ့်ရဲ့ Inner Child လေးကို Feed လုပ်ဖြစ်တယ်ပေါ့။
ဟုတ်ကဲ့ပါ။ ဒါဖြင့် ရုပ်ရှင်နဲ့ပတ်သက်တာလေးတွေ တစ်ချက်လောက် ပြောရအောင်..။ ဖွေးအနေနဲ့ ရုပ်ရှင်ကားတစ်ကားကို လက်ခံမယ်ဆိုရင် ဘယ်အချက်တွေကို အဓိကကြည့်ပြီး လက်ခံလေ့ရှိလဲ။
ပထမဦးဆုံးကတော့ Production ကိုကြည့်တယ်။ ဘဝရဲ့ အတွေ့အကြုံတွေအရ တစ်ချို့ Production တွေက အပြောကောင်းတယ်။ ဒါပေမယ့် အလုပ်ကျတော့ မကောင်းဘူးပေါ့။ တစ်ချို့ကျတော့ လေရော၊ အလုပ်ရော မျှမျှတတရှိတယ်။ ဒါကတော့ အဆင်ပြေတယ်ပေါ့။ Production က တကယ် အနုပညာသမားတွေကို တကယ် တန်ဖိုးထားလား၊ မထားဘူးလားဆိုတာ ရှေ့က အလုပ်တွေပေါ်မှာ ကြည့်တယ်။ နောက်ပြီးကျတော့ Director ကိုကြည့်တယ်။ Director က Kind of the Scene ဆိုတော့ အရေးကြီးတယ်။ Director ကောင်းပြီဆိုမှတော့ သူ့ရဲ့ Direction အောက်မှာ အကုန်လုံး ဆက်ပြီးကောင်းသွားပြီ။ အရေးကြီးဆုံးကတော့ Director ပါပဲ။ ပြီးတော့ Script ကတော့ ကြိုတောင်းတယ်ပေါ့။
ဖွေး ပထမဦးဆုံး ရိုက်ခဲ့တဲ့ ရုပ်ရှင်ကားရယ်၊ နောက်ဆုံးရိုက်ခဲ့တဲ့ ရုပ်ရှင်ကားရယ် အကြောင်း ပြောပြပေးပါဦး။
ပထမဦးဆုံး ရိုက်ခဲ့တဲ့ကားကတော့ သမုဒယ ဆိုတဲ့ကား။ အဲ့ကားက မထွက်တော့ဘူး ထင်ပါတယ်။ အဲဒီကားမှာ ဖွေးက ဒုတိယနေရာက သရုပ်ဆောင်ရတယ်။ နောက်ပြီးတော့ လက်ပံပေါ့။ လက်ပံကတော့ ဖွေးပထမဦးဆုံး ခေါင်းဆောင်နေရာက သရုပ်ဆောင်ခဲ့တဲ့ ကားပေါ့။ နောက်ဆုံး ရိုက်ခဲ့တဲ့ကားကတော့ ရွှေဖူးစာဆိုတဲ့ ကားပါ။
ပထမဦးဆုံး ရိုက်ခဲ့တဲ့ကားတုန်းက ဖွေးဖွေးရယ်၊ နောက်ဆုံး ရိုက်ခဲ့တဲ့ကားက ဖွေးဖွေးရယ် ဘာတွေ ပြောင်းလဲသွားပြီလဲ။
အရင်တုန်းက ဖွေးဖွေးက Over Dramatic ဖြစ်တယ်။ တစ်ခုခုဆို အရမ်းခံစားလွယ်တယ်။ နာကျင်စရာ ရှိရင် နာလိုက်တယ်။ ရယ်စရာရှိရင် ရယ်လိုက်တယ်။ အဲဒီလို ဖွေးဖွေးပေါ့။ နောက်ပြီး ဖွေးက ဖွေးရိုက်ရတဲ့ ကားထဲက ဇာတ်ကောင်နဲ့ အမြဲကိုက်ညီနေလေ့ရှိတယ်။ စိတ်နာစရာကားတွေ ရိုက်ရမယ်ဆိုရင်လည်း ခံစားမှု ဓါတ်ခံတွေက ရှိနေတယ်။ နောက်ပြီးကျတော့ အခုအချိန်ဟာ ဖွေးဘဝရဲ့ စိတ်အချမ်းသာရဆုံး အချိန်လို့ ပြောလို့ရတယ်ပေါ့။ ဒဏ်ရာတွေလည်း အကုန်ပျောက်သွားတယ်။ ဖွေး ဘာလုပ်ချင်တာလဲ၊ ဘယ်လိုနေချင်တာလဲဆိုတဲ့ Life Path ကလည်း ရှင်းရှင်းလင်းလင်း မြင်လာရပြီပေါ့။ ဒီအချိန်မှာ ရိုက်ရတဲ့ကားတွေကလည်း အံကိုက် ဖြစ်နေတယ်ပေါ့။
ငယ်ငယ်တုန်းကထက် ပိုပြီးတော့ ကြိုးစားချင်စိတ် ဖြစ်လာတယ်။ စိတ်ကခုထိ မလျော့သေးဘူးပေါ့။ (ရယ်လျက်) ဖွေးက ရုပ်ရှင်ရိုက်လို့ရှိရင် ကိုယ့်စိတ်ကို ပန်းချီကားအဖြူလို့ သဘောထားလိုက်တယ်ပေါ့။ ဆေးရောင်ခြယ်ရင် အဖြူမှာ ခြယ်ရင် ပိုထင်တယ်လေ။ အဲ့လို ရှင်းနေတဲ့စိတ်မှာ ဆို ပိုကောင်းတယ်လေ။ ငယ်ငယ်တုန်းကတော့ စိတ်ရှုပ်စရာတွေ၊ စိတ်္လဏ်ရာတွေကို မနည်းရှင်းပြီးတော့မှ သရုပ်ဆောင်ရတာပေါ့။ အခုကျတော့ စိတ်က အရမ်းရှင်းတတ်သွားပြီ။ သရုပ်ဆောင်တဲ့အချိန်မှ မဟုတ်ဘူး Personal Life မှာလည်း အဲဒီလို အကြည်ဓါတ်လေးနဲ့ နေတတ်သွားပြီပေါ့။
အဓိကကတော့ စာဖတ်တာပေါ့။ ဆရာတော် ဦးဇောတိကတို့စာတွေ၊ မင်္ဂလာတရားတော်တွေ ဖတ်တယ်။ ဖွေးက ရသစာအုပ်တွေထက် စိတ်ခွန်အားဖြစ်စေတဲ့ စာတွေ၊ သုတစာတွေကို ဖတ်ရတာ ပိုကြိုက်တယ်။ စိတ်ပညာနဲ့ ပတ်သက်တဲ့စာတွေ၊ ဆန်းကြယ်တဲ့ဟာတွေ၊ အဲ့လိုမျိုးတွေကို ကြိုက်တယ်။ ရသစာအုပ်တွေကိုတော့ ရုပ်ရှင်ရိုက်ရမှ ဖတ်တာများတယ်။
ဖွေးအတွက်ဆိုရင် အနုပညာအောင်မြင်မှုကို ဘယ်အရာတွေနဲ့ တိုင်းတာလဲ။
တစ်ယောက်နဲ့တစ်ယောက် အောင်မြင်မှုကို သဘောထားတဲ့ ခံယူချက်ချင်းတော့ မတူဘူးပေါ့။ ဖွေးအတွက်ဆိုရင်တော့ အောင်မြင်မှုဆိုတာ ဆုတွေမဟုတ်ဘူး။ ပရိတ်သတ်တွေရဲ့ ရင်ထဲမှာ နေရာလေးတွေရှိတယ်။ လူဆယ်ယောက်မှာ ရှစ်ယောက်လောက်ကတော့ အကြိုက်ဆုံး အနုပညာရှင်ဆိုတာ ရှိတယ်။ ဖွေးတို့ဆိုရင်လည်း ဦးကျော်ဟိန်းတို့ကို ကြည့်ပြီး အရမ်းကြိုက်ပြီး ကြီးလာရတာ။ ဆိုတော့ လူတော်တော်များများရဲ့ ရင်ထဲမှာ အနုပညာရှင်တစ်ယောက် ရှိတတ်တယ်။ ဖွေးက အဲ့တစ်ယောက် ဖြစ်ချင်တယ်။
ကိုယ် သရုပ်ဆောင်ခဲ့တဲ့ ဇာတ်ကောင်တွေထဲမှာ ကိုယ့်အပေါ်လွှမ်းမိုးမှုအရှိဆုံး ဇာတ်ကောင်ဆိုရင် ဘယ်သူဖြစ်မလဲ။
ဇာတ်ကောင်တွေ အားလုံးကတော့ ဖွေးအပေါ် လွှမ်းမိုးတာပါပဲ။ နောက်မှ သိရတာတွေရှိတယ်။ ရုပ်ရှင်ကားရိုက်ပြီဆိုရင် ဖွေးရဲ့ပုံစံက အဲ့ဇာတ်ကောင်အတိုင်း ဖြစ်သွားလေ့ရှိတယ်ပေါ့။ အရင်တုန်းကဆိုလည်း ရည်းစားတွေဘာတွေ ထားဖူးတယ်ဆိုတော့ ကိုယ့်ဒဏ်ကို အနားကလူတွေ ခံရတာပေါ့။ ထားသခင်တို့ ရိုက်တုန်းကဆိုလည်း အပြင်မှာပါ ကိုယ်က မောက်မာသလို ဖြစ်တာပေါ့။ ဟာသကားရိုက်တဲ့အချိန်ဆိုလည်း ဘေးက သူငယ်ချင်းတွေပါ လိုက်ပျော်နေရတယ်။ Drama ကားရိုက်တယ်ဆိုရင်လည်း ဘေးကလူတွေပါ လိုက်ပြီး မှိုင်းကုန်တာ ကိုယ်နဲ့နေပြီးတော့။ (ရယ်လျက်)
အနုပညာနဲ့ပတ်သက်ပြီး စိတ်ခွန်အား အဖြစ်ခဲ့ရဆုံးကာလရယ်၊ စိတ်ဖိစီးခဲ့ရဆုံး ကာလရယ်ဆိုရင် ဘယ်အချိန်တွေ ဖြစ်မလဲ။
ဖွေးက တစ်ခုတည်းကြောင့်တော့ စိတ်ဓါတ်ကျလေ့မရှိဘူး။ ဘက်ပေါင်းစုံက ပေါင်းလာပြီဆိုတော့မှ စိတ်ဓါတ်ကျတတ်တာ။ စိတ်ဓါတ်ကျတယ်၊ စိတ်ညစ်တယ်ဆိုပြီးတော့လည်း ညည်းမနေချင်ဘူး။ ဒါပေမယ့် မှတ်မှတ်ရရက ဘယ်မှာ စိတ်ဓါတ်ကျလည်းဆိုတော့ နောက်ဆုံး အကယ်ဒမီရတုန်းကပေါ့။ အဲ့တုန်းက ဖွေးက Nominee ခြောက်ကားပါတယ်။ ဆုတွေရပါစေတော့ဆိုပြီး သရုပ်ဆောင်ခဲ့တာတော့ မရှိဘူး။ Character အပေါ်မှာ သစ္စာရှိဖို့ပဲ အမြဲကြိုးစားတယ်။ ဒါပေမယ့် အဲ့နှစ်တုန်းကတော့ ရွှေကြာက Copy ပါဆိုပြီး ဝေဖန်တိုက်ခိုက်ကြတယ်ပေါ့။ အဲ့တုန်းက ဖွေးက လက်ကကျိုးထားတာ (၁၀) ရက်ပဲ ရှိသေးလို့ လက်ကလည်း လှုပ်မရလို့ စိတ်ညစ်နေတာက တစ်ပိုင်း၊ ကိုယ်လက်ခံထားတဲ့ အလုပ်တွေကလည်း ရွှေ့ရတော့ စိတ်ညစ်တာက တစ်ပိုင်း။ ဆရာဝန်ကလည်း (၆)လ သို့မဟုတ် (၈) လလောက် နားရမယ်ပြောထားတာကို။ လက်ခံထားတဲ့ အလုပ်တွေကလည်း အကြမ်းပတမ်း ရိုက်ရမယ့် ကားတွေချည်းပဲ ဆိုတော့။ အကယ်ဒမီရတော့လည်း ကိုယ့်ကို အားပေးတဲ့ ပရိတ်သတ်တွေကို တကယ်ကို ကျေးဇူးတင်ပါတယ်။ ဒါပေမယ့် ဝေဖန်တိုက်ခိုက်ကြတာတွေကလည်း တစ်ပိုင်းရှိတယ်ပေါ့။ ဟုတ်လို့ ပြောတယ်ဆိုရင်တော့ ကိုယ့်အပြစ်နဲ့ကိုယ်ဆိုတော့ ခံနိုင်တယ်။ Copy ကားလည်း မဟုတ်ဘဲနဲ့ Copy ကားလို့ အပြောခံရတယ်။ ပြီးတော့ ဝေဖန်တာမျိုးမဟုတ်ဘဲ တိုက်ခိုက်တဲ့ပုံစံတွေပါ ဖြစ်လာတာပေါ့။ အလုပ်တွေလည်း ရွှေ့ရတာတွေနဲ့ ပေါင်းပြီး ဘုန်းဘုန်းလဲပြီး အရမ်းစိတ်ညစ်သွားတယ်ပေါ့။
စိတ်ခွန်အား အဖြစ်ဆုံးကာလဆိုရင်ကော ဘယ်အချိန်ဖြစ်မလဲ။
ပြောရရင် ဖွေးက အတိုက်အခိုက်တွေ အရမ်းများတယ်။ ဘယ်လောက်ပဲ အတိုက်အခိုက်တွေ များများ၊ ဘယ်လောက်ပဲ ခြောက်တွန်းခံရ ခံရ။ ဖွေးပရိတ်သတ်တွေက ဖွေးကို အမြဲတမ်း ပြန်ထမ်းတင်လိုက်သလို ခံစားရတယ်။ ဖွေး အရှက်ကွဲတဲ့အချိန်တွေမှာဆိုလည်း ပရိတ်သတ်တွေက လက်တွဲထားတဲ့ပုံတွေနဲ့ ဖွေးကို ဝန်းရံတယ်ဆိုတဲ့ ပုံမျိုးပေါ့။ ဒီပရိတ်သတ်တွေကြောင့်ပဲ စိတ်ဓါတ်တွေက ပြန်ပြီး ခွန်အားဖြစ်တာပေါ့။ ဒီအချိန်မှာတော့ အရာတိုင်းကို ရင်ဆိုင်နိုင်သွားပြီဆိုပေမယ့် ငယ်သေးတဲ့အချိန်တုန်းက ရင်ဆိုင်ရတဲ့ဟာတွေကျတော့ ပရိတ်သတ်တွေရှိလို့ပဲ စိတ်ဓါတ်က ခွန်အားဖြစ်တာပေါ့။
ပရိတ်သတ်က ကိုယ်နဲ့အတူရှိတယ်လို့ ပထမဦးဆုံး သတိထားမိတဲ့အချိန်က ဘယ်တုန်းကလဲ။
အမြဲတမ်းပဲ အဲ့လိုခံစားရတယ်။ နောက်ကျတော့ ကျွန်မက နှင်းဆီပါမောင် နဲ့ အကယ်ဒမီရတုန်းကလည်း ပရိတ်သတ်တွေကပဲ Organize လုပ်ပြီးတော့ ကြိုးကြာအကောင်တစ်သောင်းကို ခေါက်ပြီး ပုံကြီးအကြီးကြီးနဲ့ အိမ်ကို ပို့လိုက်တာ။ တစ်ကောင်မှာ ခေါက်ပေးတဲ့သူရဲ့ နာမည် ရေးထားတယ်။ အဲ့အကောင်တစ်သောင်းကို စုပြီး ပို့ပေးတာပေါ့။ အကယ်ဒမီရတုန်းက မငိုဘူး၊ အဲ့ဒါရလည်း ရကော ငိုသွားတယ်။ (ရယ်လျက်)
သီချင်းဆိုတာနဲ့ ပတ်သက်လို့ကော ဘာတွေထပ်လုပ်ဖို့တွေ ရှိမလဲ။
ဖွေးက Professional လိုမျိုး လုပ်ဖို့တော့ မရှိပါဘူး။ ငယ်ငယ်လေးတည်းက ဝါသနာအရမ်းပါတာဆိုတော့ တစ်နှစ်ကို တစ်ပုဒ်လောက်ပဲ ဆိုမယ်ဆိုတာလောက်ပဲရှိပါတယ်။
သီချင်းဆိုတဲ့ အနုပညာဖန်တီးမှုနဲ့ သရုပ်ဆောင်တဲ့ အနုပညာဖန်တီးမှုကြားမှာ ဖွေးအတွက် ဘယ်လိုကွာခြားမှုတွေရှိမလဲ။
သီချင်းဆိုတာကတော့ Freedom ပေါ့။ အဆိုတော်တွေကတော့ ပိုလွတ်လပ်ကြတယ်လေ။ အဝတ်အစားတောင်မှ အဆိုတော်တွေဆို တစ်ယောက်ကို Style တစ်မျိုးစီလေ။ သရုပ်ဆောင်တွေကျတော့ ဝင်ကစွပ်လိုပေါ့။ ဟိုထဲမှာ ဝင်စွပ်လိုက်၊ ဒီထဲမှာ ဝင်စွပ်လိုက်နဲ့ပေါ့။ သူငယ်ချင်းတော်တော်များများကလည်း အဆိုတော်တွေပဲလေ။ သူတို့ရဲ့ Lifestyle ကို သဘောကျတယ်။ မင်းသား၊ မင်းသမီးတွေကျတော့ သိုသိုသိပ်သိပ်ရှိကြတာများတယ်။ ဖွေးကကျတော့ သရုပ်ဆောင်ဆိုပေမယ့် အဆိုတော် Personality နဲ့ပေါ့။ ငယ်ငယ်တုန်းကလည်း ကျောင်းမှာ Band တွေလျှောက်လုပ်ပြီး ပျော်ခဲ့တာဆိုတော့။
နောက်ဆုံးအနေနဲ့ ပရိတ်သတ်ကို ဘာများပြောချင်ပါလဲ။
ဖွေးဆိုရင် Social Media မှာ Live တွေလည်း မလွှင့်တတ်တဲ့ ဖွေးဖွေးပေါ့နော်။ ဒွပေမယ့်လည်း ဒီကာလမှာ ဘာလေးပဲ တင်လိုက်၊ တင်လိုက် ဂရုစိုက်ပေးကြတယ်၊ ချစ်ပေးကြတဲ့အတွက် ကျေးဇူးတင်ပါတယ်။ နောက်ပြီး New Normal မှာလည်း ပရိတ်သတ်တွေရဲ့ အချစ်ကို ဆက်ပြီးတော့ ရချင်ပါတယ်။
Fashion ခေတ်မှာ Own Fashion Sense ဖန်တီးချင်တဲ့ သန့်သူရိန်
အရည်အသွေးကောင်းမွန်ပြီး Hair Wigs တွေကို ဝန်ဆောင်မှုကောင်းကောင်းနဲ့ မှာယူရောင်းချပေးနေတဲ့ WeShop DivaWigs ရဲ့ CEO ကိုသန့်သူရိန်ကို MODA Man အဖြစ်ရွေးချယ်ဖြစ်ခဲ့ပါတယ်။
Fashion နဲ့ ပတ်သက်ရင် ယောက်ျားလေး ၊ မိန်းကလေးမခွဲခြားဘဲ အားလုံးဟာ စမတ်ကျကျနဲ့ ကိုယ်ပိုင်ပုံစံတစ်ခုကို ဖန်တီးယူပြီး Fashion ကျကျ နေထိုင်တတ်လာတတ်ကြပါတယ်။ ဒီလို ခေတ်နဲ့အညီ Fashion ကို ဦးစားပေးလာကြတာနဲ့အမျှ အဝတ်အစားပိုင်းသာမက ဆံပင်နဲ့ပတ်သက်ရင်လည်း နောက်ကျမကျန်ရလေအောင် ဆန်းသစ်လာကြပါတယ်။ ဆံပင်ဟာ လူတစ်ယောက်ရဲ့ ဒုတိယမျက်နှာဖြစ်ပြီး Fashion ကို စိတ်ဝင်စားသူတွေဟာ ဆံပင်နဲ့ပတ်သတ်ပြီး အသစ်အသစ်တွေကို ဖန်တီးလာတတ်ကြပါတယ်။ အခုနောက်ပိုင်းမှာတော့ မိမိတို့ကိုယ်ပိုင် ဆံပင်ကို မကြာခဏပုံစံပြောင်းလဲပြီး ဖန်တီးကြတဲ့အစား Hair Wig တွေကို အသုံးပြုပြီး ကိုယ်လိုချင်တဲ့ အရောင်၊ဒီဇိုင်းကို ခေတ်နဲ့အညီ ဖန်တီးလာကြပါတယ်။
Hair Wig တွေ ကို အသုံးပြုတဲ့အခါမှာ မိမိတို့ရဲ့ ကိုယ်ပိုင်ဆံပင် ပျက်စီးမှုတွေကို ကာကွယ်နိုင်သလို မိမိတို့ စိတ်တိုင်းကျ ဆံပင်ပုံစံကို သွားမယ့်နေရာနဲ့ လိုက်ဖက်အောင် အလွယ်တကူ အသုံးပြုနိုင်ခြင်းကလည်း Hair Wig ရဲ့ အားသာချက်တစ်ခုပါပဲ။ ဒီလို Hair Wig တွေကို အသုံးပြုလာကြတဲ့အခါ အရည်အသွေးကာင်းတဲ့ Hair Wig ကို အသုံးပြုခြင်းက ရေရှည်အသုံးပြုနိုင်ပြီး မိမိတို့ စိတ်တိုင်းကျလည်း ပုံသွင်းနိုင်မှာဖြစ်ပါတယ်။ ဒါကြောင့် ဒီလို အရည်အသွေးကောင်းမွန်ပြီး Hair Wigs တွေကို ဝန်ဆောင်မှုကောင်းကောင်းနဲ့ မှာယူရောင်းချပေးနေတဲ့ WeShop DivaWigs ရဲ့ CEO ကိုသန့်သူရိန်ကို MODA Man အဖြစ်ရွေးချယ်ဖြစ်ခဲ့ပါတယ်။
WeShop DivaWigs မှာ ရရှိနိုင်တဲ့ Hair Wig တွေဟာ လူဆံပင်အစစ်ကို ၁၀၀ ရာခိုင်နှုန်း အသုံးပြုပြီး ထုတ်လုပ်ထားတာဖြစ်တဲ့အတွက် အရည်အသွေးကောင်းကောင်းကိုမှ ကြိုက်နှစ်သက်သူတွေအနေနဲ့ နှစ်သက်မှာအသေအချာပါပဲ။ အမျိုးသားလုပ်ငန်းရှင်တစ်ယောက်အနေနဲ့ Hair Wig လုပ်ငန်းကို စတင်လုပ်ဖြစ်ခဲ့ပုံကို လည်း ကိုသန့်သူရိန်က အခုလို ပြောပြထားပါတယ်။
"ကျွန်တော့်အနေနဲ့ လွန်ခဲ့တဲ့ တစ်နှစ်ခွဲလောက်တုန်းက အမျိုးသမီးအသုံးအဆောင်တွေနဲ့ပတ်သတ်တဲ့ Online Shop တစ်ခုကို စတင်ခဲ့တယ်။ အမျိုးသမီးနဲ့ပတ်သတ်တဲ့အသုံးအဆောင်တွေဆိုတော့ ပြောရမယ်ဆိုရင် Branded Item တွေပေါ့၊နောက်ပိုင်း Hair Wigs တွေက International မှာ အရမ်းခေတ်စားလာတာကို ကျွန်တော် တွေ့ခဲ့ရတယ် ဆိုတော့ ကျွန်တော် Hair Wig ကို စရောင်းကြည့်လိုက်တယ်။ အချိန်ကြာလာတာနဲ့အမျှ ဒီ Market က ဘယ်လောက်ကျယ်ပြန့်လဲဆိုတာ ကျွန်တော်သိသွားတယ်။ အဲ့ဒီ ကနေစပြီး Hair Wig ကို သေသေချာချာ စလုပ်ဖြစ်တာပေါ့။ စလုပ်တုန်းကတော့ Branded Items တွေကိုပဲဦးစားပေးဖြစ်ပေမဲ့ နောက်ပိုင်း ဒီ Hair Wigs တွေက Fashion တစ်ခုအနေနဲ့ ဈေးကွက်တစ်ခုရှိနေတာကို သိသွားတယ်တဲ့အခါမှာ စီးပွားရေးတစ်ခုအနေနဲ့ တစိုက်မတ်မတ်လုပ်ဖြစ်ခဲ့တာပါ။ ဆံပင်နဲ့ ပတ်သက်ရင် မိန်းကလေးတွေဆိုရင် ခေါင်းခဏခဏလျှော်ကြတယ်။ ခေတ်စားတဲ့ဆံပင်အရောင်လေးတွေ ဆိုးကြတယ်ပေါ့။ ကိုယ့်ဆံပင်ကို အရောင်ဆိုးတဲ့အခါမှာဖြစ်စေ Styling လုပ်တဲ့အခါမှာ ဖြစ်စေ Damage ဖြစ်နိုင်မယ့်အချိန်မျိုးမှာ Hair Wig ကို အသုံးပြုတဲ့အခါကျတော့ အားသာချက် အနေနဲ့ Look အမျိုးမျိုး Style အမျိုးမျိုးပြောင်းလို့ရမယ် Hair Wig ကို အသုံးပြုတဲ့အတွက်ကြောင့် ဆံပင်အစစ်ကို လုပ်သလိုမျိုး ထိခိုက်မှာ မစိုးရိမ်ရတော့ဘူး " လို့ ပြောပြခဲ့ပါတယ်။
Wig ကို ချုပ်လုပ်တဲ့အချိန်မှာ အသုံးပြုရတဲ့ လူဆံသားအစစ်တွေဟာ အိန္ဒိယက အဓိက ရရှိတာဖြစ်ပြီး လူတွေရဲ့ဆံပင်အစစ်ကိုတွေကို အသုံးပြုထားတာကြောင့် စိတ်ချလက်ချအသုံးပြုနိုင်တယ်လို့လည်း ဆိုပါတယ်။ Market မှာရောင်းအားကောင်းတဲ့ Wig တွေက ကျပ် ၄သိန်းကနေ ၈ သိန်းကြားမှာ ရှိတဲ့ Hair Wig တွေဖြစ်ပြီး ဆံပင်အထူ၊ အရှည်တွေပေါ်မူတည်ပြီး ဈေးနှုန်းကွဲပြားမှုလည်းရှိသလို အသုံးပြုတဲ့ Wig Brand ပေါ် မူတည်ပြီး ဈေးနှုန်းကွဲပြားမှုလည်း ရှိပါတယ်။ Hair Wigs အသုံးပြုသူတော်တော်များများက သူတို့လိုချင်တဲ့ Style ကို လိုချင်တဲ့ပုံစံပြပြီးမှာကြတာရှိသလို WeShop မှလည်း Customer စိတ်ကြိုက် တွေ ရွေးချယ်နိုင်အောင် Research လုပ်ထားတာတွေလည်း ရှိတယ်လို့ သိရပါတယ်။
Wig တွေရဲ့ ကုန်ကြမ်း ရယူမှုနဲ့ ပတ်သက်ပြီးတော့လည်း ကိုသန့်သူရိန်က "အစ်ကို သိရသလောက် Wig တော်တော်များများမှာ အသုံးပြုတဲ့ဆံသားတွေက အိန္ဒိယက လာတာများတယ်။ မယ်သီလရှင်တွေရဲ့ တကယ့်ဆံပင်အစစ်တွေကို စက်ရုံတွေကို ပို့တယ်။ စက်ရုံမှာ Chemical တွေနဲ့ အသုံးပြုပြီးတော့ သန့်အောင်လုပ်ပြီးတော့ အဲ့ဒါကို ပြန်ချုပ်ပြီး Wigs တွေထုတ်တယ်။ အသင့် ချုပ်လုပ်ပြီးသား Wigs တွေကို ရောင်းချနေပေမဲ့ တခါတလေကျရင် Customer တွေက သူတို့လိုချင်တဲ့ပုံကို ပြပြီးမှာကြတယ်။ အဲ့ဒီ အတိုင်း Factory ကို ပြပြီး သူတို့ဘက်ကလိုချင်တဲ့ပုံစံအတိုင်း ပြန်ထုတ်ပေးတာပေါ့နော်။ နောက်တစ်ခုကတော့ Trend တွေနဲ့အညီ သူတို့ ဘာကို ကြိုက်တတ်လဲ ဘယ်လိုမျိုးကို ကြိုက်တတ်လဲဆိုတာမျိုး နောက်ပြီး Hollywood က မင်းသမီးတွေ ဘယ်လို Style တွေသုံးကြလဲ အာရှတလွှားမှာဆိုလည်း ဘယ်လို Style မျိုးခေတ်စားနေလဲ ဆိုတာကို Customer တွေ ရွေးချယ်လို့ရအောင် Research လုပ်ထားတာရှိတယ်။" လို့ ပြောပါတယ်။
ကုန်ကြမ်းအမျိုးအစားပေါ်မူတည်ပြီး ကွဲပြားတတ်တဲ့ ဈေးနှုန်းနဲ့ ပတ်သက်ပြီးတော့လည်း "ဈေးကြီးမှလည်းမဟုတ်ပါဘူး။ ဈေးကတော့ အမျိုးမျိုးရှိတယ်။ အဓိကကတော့ ဆံပင်အနေအထားတစ်ခုပေါ်မူတည်သွားတယ်။ ဆံပင်က ဘယ်လောက်ရှည်လဲ။ ဆံပင်အရှည်ဆိုတာက ၁၂ လက်မကနေ ၃၀ အထိရှိတယ် ဆံပင်အထူ(Volume)ဆိုရင်လည်း 100% ကနေ 200% ထိ ရှိတော့ ပိုထူလေ ပိုဈေးများလေ။ ပိုရှည်လေ ပိုဈေးများလေ။ နောက်တစ်ခုထပ်ကွဲသွားတာကအသုံးပြုတဲ့ ဆံပင်သားပေါ်မှာ မူတည်ပြီး ကွဲသွားတာရှိတယ်။ဆံပင်တုမှာသုံးတဲ့ထဲမှာ Virgin Hair ရှိမယ် နောက်ပြီး Remy Hair ဆိုတာရှိတယ်။ Remy Hair ဆိုတာကတော့ လူတွေအားလုံးဆီကသာမာန် ဆံပင်ကို Wigs ချုပ်ထားတာပေါ့။ Virgin Hair ကျတော့ တစ်ဦးတစ်ယောက်စီက အရည်အသွေးကောင်းတဲ့ဆံပင်ကိုမှ ရွေးချယ်စုဆောင်းပြီးချုပ်ထားတာမျိုးကိုပြောချင်တာ။ ဆံပင်သုံးတဲ့နေရာမှာ ဘယ်လောက်အထိ Human Hair စစ်လည်း ဆိုတာကို ကြည့်ကြတယ်။ အစ်ကိုတို့ WeShop မှာတော့ ရှေ့မှာပြောထားခဲ့တဲ့ ဆံပင်အမျိုးအစားနှစ်ခုကိုပဲသုံးထားတယ် တချို့ကျတော့ 60 % Human Hair ပေါ့ ဒါကို အကိုတို့က Synthetic Hair လို့ခေါ်တယ် လူဆံပင်နည်းနည်းနဲ့ Synthetic တွေနဲ့ရောချုပ်ထားတာမျိုး ဆိုရင် ဈေးက ၇ သောင်း၊ ၈သောင်း၊ ၁သိန်းလောက်နဲ့ရနိုင်တယ်။ ဒါပေမယ့် ကြည့်လိုက်တာနဲ့ ဆံပင်အတုမှန်းသိသာတယ် ဖွာနေတာမျိုး ဖောင်းဖောင်းကြီးဖြစ်နေတာမျိုးပေါ့နော်။ အဲ့လိုမျိုးတွေကွာတယ်။" လို့ ဆိုပါတယ်။
အရင်တုန်းက မြန်မာနိုင်ငံမှာ Hair Wig တွေကို Celebrity တွေ ၊ Beauty Blogger တွေသာ သုံးခဲ့ကြပေမယ့်လည်း နောက်ပိုင်းမှာတော့ Fashion ကို စိတ်ဝင်စားတဲ့ လူငယ်တွေလည်း အသုံးပြုလာကြပါတယ်။ ဖက်ရှင်တစ်ခုအနေနဲ့ ကျယ်ကျယ်ပြန့်ပြန့်အသုံးပြုလာကြတဲ့ Hair Wigs ကို မြန်မာနိုင်ငံမှာ သင့်တော်တဲ့ဈေးနဲ့ရောင်းချနိုင်ဖို့အတွက် နိုင်ငံခြား စက်ရုံကို တိုက်ရိုက်သွားကာ Research လုပ်ခဲ့ပြီး ရလာတဲ့ Feedback တွေကို ပြင်ဆင်ရင်း လုပ်ငန်း စတင်ခဲ့ရပါတယ်။ ဒါ့အပြင် အမြဲ Update ဖြစ်နေအောင်လည်း နိုင်ငံတကာမှာ ခေတ်စားနေတဲ့ Hair Wigs ဒီဇိုင်းအမျိုးမျိုး တွေကို မျက်ခြေမပျက်စောင့်ကြည့်ပြီး Research လုပ်ထားခြင်းမျိုးလည်း ရှိပါတယ်။ သူရောင်းချနေတဲ့ Wig တွေနဲ့ ပတ်သက်ပြီးတော့လည်း "ကျွန်တော် Hair Wigs လောကထဲရောက်လာတဲ့အချိန်မှာ နာမည်ကြီးနေတဲ့ Beauty Blogger တွေက Wig တွေအရမ်းသုံးတယ်။တပ်နည်းတွေကိုလည်း Sharing တွေလုပ်နေကြတယ်ပေါ့ အဲ့ဒါကြောင့် Hair Wig တွေကို ကျွန်တော်စရောင်းဖို့ အကြံတစ်ခုရခဲ့တာ။ US က ထုတ်တဲ့ Wig တွေကို ရောင်းချတဲ့အခါကျတော့ ဒီဈေးကွက်နဲ့ ဆိုဈေးက နည်းနည်းကွာနေတာ ကျွန်တော်တွေ့ရတယ်၊အဲ့တော့ ကျွန်တော်က Factory ကို တိုက်ရိုက်သွားတယ်။ သွားရင်းနဲ့ Human Hair Wig တွေကို Research လုပ်ရင်းနဲ့ တဖြည်းဖြည်းနဲ့ ဝင်လာတာပေါ့။ တင်ရောင်းကြည့်တယ်။ လူတွေကို ပေးသုံးကြည့်တယ်။ အဲ့လိုလုပ်ရင်းနဲ့ Feedback ကလည်း ရလာတယ်။ ဈေးကွက်တစ်ခုလည်းခိုင်ခိုင်မာမာရလာခဲ့တယ် ရလာတဲ့Feedback တွေထဲမှာ လိုအပ်ချက်ရှိနေတာမျိုးဆိုရင် Factory ကို ပြန်ပြောတာမျိုးနဲ့ Customer Service ကို အကောင်းဆုံးပေးခဲ့တာမျိုး နဲ့ စခဲ့တာပေါ့။" လို့ ပြောပြခဲ့ပါတယ်။
လူငယ်လုပ်ငန်းရှင်ဖြစ်တဲ့ ကိုသန့်သူရိန်က Fashion ပိုင်းနဲ့ ပတ်သက်ပြီး စိတ်ဝင်စားသူတစ်ဦးဖြစ်တာကြောင့် ကိုယ်တိုင်လည်း စတိုင်လ်ကျကျ ဝတ်စားနေထိုင်တတ်သလို Fashion ပိုင်းကိုလည်း Supporting ပေးဖို့အမြဲ အားထုတ်နေတတ်သူတစ်ဦးလည်း ဖြစ်ပါတယ်။ သူရောင်းချတဲ့ Hair Wigs ကို Fashion Sense နဲ့ပါ တွဲမြင်စေဖို့အထိ ရည်ရွယ်ထားတယ်လို့ သိရပါတယ်။နောက်ပိုင်းမှာ အားပေးတဲ့ Customer တွေအတွက်ကိုလည်း မိမိတို့မျက်နှာအနေအထားနဲ့ လိုက်ဖက်မယ့် ဆံပင်ပုံစံမျိုးကို WeShop DivaWigs Page ကနေတဆင့် အကြံဉာဏ်ပေးသွားဖို့အထိ စီစဉ်ထားတယ်လို့ ဆိုပါတယ်။
Customer တွေ စိတ်တိုင်းကျ ဖန်တီးပေးနိုင်မယ့် အစီအစဉ်နဲ့ ပတ်သက်ပြီး
" ကျွန်တော့်ရဲ့ Vision က ကျွန်တော့်ရဲ့ WeShop ကို Wig သီးသန့်ပဲ ရောင်းတာမျိုး မဟုတ်ဘဲ Fashion Platform လိုမျိုးမြင်စေချင်တယ်။ Wigs သီးသန့်ရောင်းချတာမျိုးမဟုတ်ပဲ ခေတ်စားနေတဲ့ Fashion Trend တွေနဲ့ပတ်သတ်ပြီးလည်း အကြုံပြုတာ Sharing လုပ်ပေးလေ့ရှိတယ်။ မိန်းကလေးအတွက်ရော၊ ယောက်ျားလေးအတွက်ရော ဆံပင်က အရေးကြီးဆုံးပဲ။ ဘယ်လိုပဲ အဝတ်အစားတွေဝတ်ဝတ် ဆံပင်ပုံစံပြောင်းသွားရင် Fashion က ပြောင်းသွားတယ် ဆိုတာကို သိစေချင်တယ်၊အဲ့တော့ ကျွန်တော်တို့အနေနဲ့ Customer မျက်နှာအနေအထားပေါ် မူတည်ပြီး ဘယ်လိုဆံပင်ပုံစံမျိုးနဲ့ လိုက်ဖက်မလဲဆိုတာကို Research လုပ်ပြီး လိုက်ဖက်တဲ့ Hair Wig တွေကို အကောင်အထည်ဖော် ရောင်းချသွားမယ်။ Evening မှာ Night Out ထွက်ချင်တယ်ဆိုရင် ဘယ်လိုမျက်နှာအနေအထား မျက်နှာကျနဲ့ ဘယ်လိုဆံပင်ပုံစံမျိုးနဲ့ လိုက်လဲဆိုတာကို ကျွန်တော်တို့ Page မှာ ဝင်ကြည့်လို့ရတယ်။ Styling တော့ မပါဘူး။ ဒါပေမဲ့ Advice တော့ ပေးလို့ရတယ်။ လိုချင်တဲ့ပုံစံကို ဖန်တီးပေးလို့ရတယ်။" လို့ ကိုသန့်သူရိန်က MODA ကို ပြောပြခဲ့ပါတယ်။
လူတစ်ယောက်အတွက် First Impression ဖြစ်တဲ့ Fashion နဲ့ ပတ်သက်ပြီး ဒီနေ့ခေတ်မှာ မိန်းကလေးတွေသာမက ယောကျာ်းလေးတွေပါ ဦးစားပေးပြီး ဝတ်ဆင်လာတာနဲ့ ပတ်သက်ပြီး ကိုသန့်သူရိန်က အခုလို သူ့ရဲ့ အမြင်ကို ပြောပြခဲ့ပါသေးတယ်။
"ကျွန်တော်က Fashion ကို ဦးစားပေးပါတယ်။ စီးပွားရေးလုပ်ငန်းရှင်ပဲ ဖြစ်ဖြစ်၊ သာမန်လူပဲ ဖြစ်ဖြစ် လူတစ်ယောက်ကို ကြည့်လိုက်တာနဲ့ First Impression က ပိုအရေးကြီးတယ်။
ဖြစ်သလိုဝတ်လာတယ်ဆိုရင် လုပ်ငန်းတူတူလုပ်ဖြစ်ချင်မှ လုပ်ဖြစ်မယ်။ ကိုယ်ပိုင် ဒီဇိုင်းတစ်ခုကို ဖန်တီးဖို့ဆိုရင်တော့ ကိုယ်တိုင်ကလည်း Fashion အမြင်ရှိမှဖြစ်မှာပေါ့
ဒီနေရာမှာ ဒါကိုပဲ ဝတ်ရမယ်ဆိုပြီး ပုံသေသတ်မှတ်တာမျိုးမရှိဘူးပေါ့။ ဒါပေမယ့် အခုကလည်း Fashion ခေတ်ဆိုတော့ ဘယ်ပဲ ကြည့်လိုက်ကြည့်လိုက် လူတွေက အကုန်လုံးလှချင်ကြတယ်။မြန်မာနိုင်ငံမှာက အခုနောက်ပိုင်းမှာ Fashion နဲ့ ပတ်သက်ရင် Beauty Blogger ၊ Stylist တွေအရမ်းများလာတယ်။" လို့ ဆိုပါတယ်။
လူငယ်စီးပွားရေးလုပ်ငန်းရှင်တစ်ဦးအနေနဲ့ စီးပွားရေးလုပ်ငန်းတွေနဲ့ ပတ်သက်ပြီးတော့ ကြုံတွေ့ရတဲ့ အခက်အခဲတွေကို ယုံကြည်မှုရှိရှိနဲ့ ဖြတ်သန်းပြီး ကိုယ်လိုချင်တဲ့ Vision ကို ရောက်အောင် သွားနိုင်ဖို့အတွက် ကိုသန့်သူရိန်က အခုလိုပဲပြောပြခဲ့ပါတယ်။
"စီးပွားရေးတစ်ခုလုပ်မယ်ဆိုရင် အဓိကက အခက်အခဲတွေလည်း ကြုံရမယ်။ အခက်အခဲတွေကြုံတဲ့ အချိန်ကျရင် စိတ်ညစ်တာတွေလည်းရှိမယ်။ ပင်ပန်းတာတွေလည်းရှိမယ်။ အခက်အခဲကြုံတဲ့ အခါကျရင် ဘာပဲဖြစ်လာလာ စိတ်ဓာတ်မကျပဲ ကိုယ်သွားချင်တဲ့ Vision ကို ရောက်အောင်သွားဖို့ပဲ လိုအပ်တယ်။ အဲ့ဒါတွေကို ကျော်ဖြတ်ဖို့က ကိုယ့်ကိုယ်ကိုယ်ယုံကြည်မှုရှိဖို့ပဲလိုအပ်တယ်" လို့ သူ့ရဲ့ ခံယူချက်ကို ပြောပြခဲ့ပါသေးတယ်။
#MODA Man April
#Wig & Fashion
ချစ်ခြင်းရနံ့တွေကြားက တွဲလက်များ Thu Rayn Kyaw Moe နဲ့ Christina Lim
တစ်ယောက်နဲ့ တစ်ယောက် ပထမဆုံးတွေ့ခဲ့တဲ့အချိန်ကတည်းက မှတ်မှတ်ထင်ထင်ဖြစ်ခဲ့တဲ့ ရနံ့လေးတွေနဲ့ ပျော်ရွှင်စရာ Memory လေးတွေအကြောင်းကို ကြည်ကြည်နူးနူးလေး ပြောပြခဲ့တဲ့ Thu Rayn Kyaw Moe နဲ့ Christina Lim တို့က သူတို့နှစ်ဦးရဲ့ ချစ်ခြင်းကို ယုံကြည်မှုပိုစေတဲ့ အချက်လေးတွေအကြောင်းကိုလည်း ဖွင့်ဟခဲ့ပါတယ်။
နားလည်မှု ပျော်ရွှင်မှုတွေနဲ့ တည်ဆောက်ထားတဲ့ သူတို့နှစ်ဦးကို MODA Team က ဒီတစ်လရဲ့ Cover Star အဖြစ် ရွေးချယ်ခဲ့ပါတယ်။ တစ်ယောက်နဲ့ တစ်ယောက် ပထမဆုံးတွေ့ခဲ့တဲ့အချိန်ကတည်းက မှတ်မှတ်ထင်ထင်ဖြစ်ခဲ့တဲ့ ရနံ့လေးတွေနဲ့ ပျော်ရွှင်စရာ Memory လေးတွေအကြောင်းကို ကြည်ကြည်နူးနူးလေး ပြောပြခဲ့တဲ့ Thu Rayn Kyaw Moe နဲ့ Christina Lim တို့က သူတို့နှစ်ဦးရဲ့ ချစ်ခြင်းကို ယုံကြည်မှုပိုစေတဲ့ အချက်လေးတွေအကြောင်းကိုလည်း ဖွင့်ဟခဲ့ပါတယ်။
နှစ်ယောက်ရဲ့ Relationship သက်တမ်းက ၁၅နှစ်ရှိပြီလို့သိရတယ်။ ဒီလိုအချိန်အကြာကြီးမှာ ဘယ်လို နားလည်မှုတွေနဲ့တည်ဆောက်ခဲ့ကြလဲ။
တစ်ယောက်နဲ့ တစ်ယောက်နားလည်မှုနဲ့ အပြန်အလှန်လေးစားမှုပေါ့။ အဲ့ဒါတွေနဲ့ တည်ဆောက်ထားတာပါ။ မတ်လ ၂၅ ဆိုရင် ၁၅ နှစ်ပြည့်ပြီ။
ဒီကာလအရှည်ကြီးမှာတယောက်နဲ့တယောက် အမြဲ Romantic ဖြစ်နေအောင် ဘယ်လိုမျိုးလေးတွေလုပ်ပေးဖြစ်လဲ။
Romantic ဖြစ်တယ်လို့လည်း မဟုတ်ပါဘူး။ ကျွန်တော်တို့လည်း ပုံမှန်ပါပဲ။ ပုံမှန်လူတွေသွားသလိုပဲ။ ပုံမှန်ဖြတ်သန်းကြတာပါ။ အရမ်းကြီး Romantic ဖြစ်တယ်လို့လည်း မဟုတ်ပါဘူး။ အမြဲတမ်း Romantic ဖြစ်နေတာတော့ မဟုတ်ပါဘူး။ ဖြစ်သင့်တဲ့အချိန်လေးတွေဆို ဖြစ်လိုက်တယ်။ အဲ့လိုမျိုးလောက်ပါပဲ။
ကတောက်ကဆ ဖြစ်တဲ့အချိန်တွေရော ရှိလား ။ ဒီလိုအချိန်တွေကို ဘယ်လိုကျော်ဖြတ်ခဲ့လဲ။
ကတောက်ကဆဖြစ်တဲ့အချိန်တွေရှိတယ်။ အဲ့လိုအချိန်မျိုးဆို သိပ်စကားမပြောဖြစ်တာများတယ်။ အေးအေးဆေးဆေးဖြစ်တဲ့အချိန်လောက်မှ အဲ့အကြောင်းကို ပြန်ပြောတာ။ နားလည်မှုယူဖို့အတွက်ကတော့ စကားများများပြောဖြစ်တယ်။ ဒီပြသနာဘယ်ကနေစဖြစ်တယ်ဆိုတာမျိုး အစကို ပြန်သွားပြီးတော့ အေးအေးဆေးဆေးပဲ ဖြေရှင်းတယ်။
ယောကျာ်းလေးတစ်ယောက်အနေနဲ့ နှစ်ပတ်လည်နေ့တွေ ၊ အမျိုးသမီးရဲ့မွေးနေ့လိုမျိုးတွေကို မေ့တဲ့အခါမျိုးတွေရှိခဲ့လား။
ကျွန်တော်က မမေ့ဘူး။ သူပဲမေ့တာ (Christina Lim ကိုကြည့်ပြီး ရယ်လျှက်)
နှစ်ဦးသား ချစ်ခြင်းမေတ္တာကို ဘယ်လိုပုံဖော်ထားလဲ။
အဓိက ပျော်ရွှင်မှုပါပဲ။ ကျွန်တော်တို့ ခံယူထားတာ အောင်မြင်မှုတို့၊ ကျော်ကြားမှုတို့ထက်စာရင် ပျော်ပျော်ရွှင်ရွှင်လေးပဲ ဖြတ်သန်းချင်တာပေါ့။ အဓိကကတော့ ပျော်ရွှင်မှုကို အခြေခံထားပြီးတော့ ဆက်သွားနေတာပေါ့။
အစ်ကို့အနေနဲ့ လူတစ်ယောက်ရဲ့ ကိုယ်သင်းရနံ့က သူ့ရဲ့ First Impression အတွက်ဘယ်လောက်ထိ အရေးပါတယ်ထင်ပါသလဲ။
တော်တော်များများကို အရေးပါတယ်လို့ ထင်ပါတယ်။
အစ်ကိုအစ်မနဲ့ စတွေ့တုန်းက သူ့ရဲ့ကိုယ်သင်းရနံ့က အစ်ကို့အတွက် First Impression ကိုဘယ်လို ပေးဆောင်ခဲ့လဲ။ အခုထိ‌ရော စိတ်ထဲမှာ စွဲထင်နေတုန်းပဲလား။
စွဲနေတုန်းပဲ။ သူအရင်တုန်းက ဆွတ်တဲ့ ရေမွှေးလေးတစ်ခုရှိတယ်။ အရင်တုန်းက သူပစ္စည်းလေးတွေပေးရင် အဲ့ရေမွှေးလေးကို ဆွတ် ဆွတ်ပြီးပေးတာ။ အဲ့အနံ့ပျောက်မှာစိုးလို့ အရင်တုန်းက ကျွတ်ကျွတ်အိတ်လေးနဲ့ ချည်ပြီးတော့ ပစ္စည်းလေးတွေကို သိမ်းဖြစ်တယ်။
ဟိုတလောက Comfort ပွဲလေးမှာ အစ်ကိုတို့တက်ခဲ့တဲ့ဓာတ်ပုံတွေကို တွေ့ခဲ့ပါတယ်။ အဲ့ဒါ အစ်ကိုတို့လည်း Comfort သုံးဖြစ်တယ်ပေါ့။
သုံးဖြစ်တယ်။ သုံးဖြစ်တာက သူက အင်္ကျီတွေသာမကဘဲ စောင်တွေပါ မွှေးလို့ဆိုပြီးလျှော်တယ်။ စောင်တွေရော ခေါင်းအုံးတွေရောထည့်လျှော်တယ်။
ဘာကြောင့် Comfort ကိုသုံးဖြစ်ခဲ့တာလဲ။
တခြားတံဆိပ်တွေထက် မွှေးပြီးတော့ ပိုကြာကြာခံတယ်။ ပုံမှန်ဆိုလျှော်ပြီးလို့ အင်္ကျီကိုထုတ်လိုက်ရင် အနံ့တွေက ပျံ့သွားတယ်။ လျှော်ပြီး ဗီရိုထဲထည့်လိုက်တာနဲ့ ဗီရိုတစ်ခုလုံးက သူ့အနံ့ကိုထွက်နေတာ။ ခရီးသွားတဲ့အခါကျရင်လည်း တခြားနေရာရောက်တဲ့အထိ အဲ့အနံ့လေးက ပါနေတာ။
Comfort ရဲ့ ရနံ့တွေထဲမှာ‌ရော ကိုယ့်ကို Confidence ရှိစေတဲ့ ရနံ့မျိုးပါလား။
၂ခုလုံးတော့ ကြိုက်တယ်။ တစ်မျိုးစီပေါ့။ တစ်ခုရိုးသွားရင် တစ်ခုသုံး အပြောင်းအလဲလေးသုံးတာပေါ့။
ချစ်သူဘဝမှာသာမက အိမ်ထောင်သည်ဘဝမှာပါ အမြဲ Romantic ဖြစ်စေတဲ့ လျို့ဝှက်ချက်က ဘာဖြစ်မလဲ။
အဓိကကတော့ ပျော်အောင်နေမယ်ဆိုတဲ့ ပင်ကိုယ်စိတ်ကပဲ ဖြစ်ပါလိမ့်မယ်။
ခရီးတစ်ခုသွားတော့မယ်ဆိုရင် အရင်ဆုံးစဉ်းစားမိတာက ဘာဖြစ်မလဲ။
အဝတ်အစား စဉ်းစားတယ်။ သွားရင်လည်း ပျော်ပျော်ရွှင်ရွှင်သွားဖို့ပဲ စဉ်းစားတယ်။
ခရီးစဉ်တစ်ခုမှာ သက်သောင့်သက်သာနဲ့ အဆင်ပြေပြေဖြစ်စေဖို့ ဘာတွေအရင်ဆုံးပြင်ဆင်လဲ။
နှစ်ယောက်တိုင်ပင်တယ်။ ဟိုတယ်ဆိုလည်း ရွေးချယ်ထားတဲ့ ဟိုတယ်ကို စောစောစီးစီးကတည်းက Booking လုပ်တယ်။ အနားကပ်ပြီးမှဆိုရင် Rush ဖြစ်တယ်။ တည်းမယ့်ဟိုတယ်လောက်ပဲရွေးတယ်။ ကျန်တာတွေက ရောက်ရင် ရောက်တဲ့အတိုင်း Go with the flow ပဲသွားတယ်။
Relationship တစ်ခုမှာ ခရီးသွားခြင်းက ဘယ်လောက်အထိ ရင်းနှီးမှုပိုစေတယ်လို့ထင်လဲ။
လူတစ်ယောက်အကြောင်းသိချင်ရင် ခရီးအတူတူသွားကြည့်ဆိုတဲ့အတိုင်းပေါ့။ ခရီးသွားရင် တစ်ယောက်နဲ့တစ်ယောက်ပိုသိတယ်။ စကားများများပိုပြောဖြစ်တယ်။ မြို့ပြမှာထက်စာရင် ခရီးသွားတဲ့အခါ တစ်ယောက်နဲ့တစ်ယောက် ရင်းရင်းနှီးနှီးနဲ့ Future Plan လေးတွေပြောဖြစ်တာပေါ့။ များများပြောသင့်တယ်။ များများသွားသင့်တယ်လို့လည်းထင်တယ်။
ချစ်ခြင်းမေတ္တာအပြည့်အဝ ရရှိတဲ့ အမျိုးသမီးတွေဟာ ဘက်စုံမှာ အောင်မြင်ကြတယ်ဆိုတာနဲ့ပတ်သက်ပြီး အစ်မရဲ့ အမြင်လေးပြောပြပေးပါဦး။
အောင်မြင်တယ်ဆိုတာလည်း ကိုယ့်ဘက်ကလည်း အချစ်တွေ အပြည့်အဝပေးနိုင်ရမယ်။ ချစ်တယ်ဆိုတာလည်း အပေးအယူမျှရမယ်။ အောင်မြင်တယ်ဆိုတာလည်း ကိုယ့်ရွေးချယ်မှုပေါ့။
အစ်ကို့ကို ဘဝလက်တွဲဖော်အဖြစ်ရွေးချယ်ဖြစ်ခဲ့တဲ့ အဓိကအချက်က ဘာဖြစ်မလဲ။
အဓိကက သူက စိတ်ရှည်တယ်။ သူ့ကို စသိတည်းက ဘယ်တော့မှ အော်တာ၊ ဆဲတာတွေ မရှိဘူး။ ပြီးတော့ သူကအမြဲပျော်နေတာ။ အဓိကကတော့ အဲ့ဒါတွေပေါ့။
အများကအားကျပြီး ကိုယ်တိုင်ကလည်း သာယာတဲ့အိမ်ထောင်တစ်ခုကို တည်ဆောက်ထားတဲ့ အဓိကလျို့ဝှက်ချက်က ဘာလို့ထင်လဲ။
လျှို့ဝှက်ချက်တော့ မရှိပါဘူး။ အဓိကကတော့ ကိုယ့်ဘက်ကလည်း အကောင်းဆုံးဖြစ်အောင်နေတယ်။ ရည်းစားဘဝမှာပဲဖြစ်ဖြစ်၊ အိမ်ထောင်သည်အမျိုးသမီးဘဝမှာပဲ ဖြစ်ဖြစ် အကောင်းဆုံးဖြစ်အောင်နေတယ်။
အစ်မတို့ စုံတွဲရဲ့ အများနဲ့ မတူတဲ့ ထူးခြားနေတဲ့ Style တစ်ခုကို ပြောပါဆိုရင် ဘာလို့ထင်လဲ။
ဘာပဲရိုက်ရိုက် ဘာပဲတင်တင် ကိုယ့်ရဲ့ Reality ၊ ကိုယ်ပျော်နေတဲ့ Movement လေးတွေကို သူများကို ပေးချင်လို့ ရိုက်ပြီးတင်ဖြစ်တာများတယ်။ ကိုယ့်ရဲ့ ပျော်ရွှင်မှုလေးတွေကို Sharing လုပ်ပေးချင်လို့ ရိုက်ဖြစ်တာပေါ့။
ချစ်ခြင်းမေတ္တာတွေကိုအမြဲ လတ်ဆတ်နေစေတဲ့အကြောင်းအရင်းကရော ဘာလဲ။
ပျော်ပျော်ပါးပါး ပေါ့ပေါ့ပါးပါးပဲ နေဖြစ်တယ်။ ကိုယ့်ရဲ့ ပျော်တာကို အနှောင့်အယှက်ဖြစ်တဲ့အရာမျိုးဆို မလုပ်ဖြစ်တာများတယ်။ ကိုယ့်ပျော်ရွှင်မှုကို ထိခိုက်လာမယ်။ ကိုယ့် Relationship ကို ထိခိုက်လာမယ်ဆိုရင် ရှောင်တယ်။
ချစ်ခြင်းမေတ္တာနဲ့ ရနံ့လေးတွေနဲ့ ဆက်နွယ်မှုအကြောင်းကို ပုံဖော်ပေးပါဦး။ ဘယ်လို ရနံ့လေးတွေက အစ်မတို့ရဲ့ချစ်ခြင်းကို အမှတ်ရစေပါသလဲ။
Chris က မွှေးရနံ့တစ်ခုကို Memory တစ်ခုအနေနဲ့ မှတ်တယ်။ ခရီးသွားရင် တစ်နေရာသွားရင် ရေမွှေးတစ်မျိုးသုံးတယ်။ ရေမွှေးနံ့တစ်ခုရရင် အဲ့တစ်နေရာကို တန်းပြီးမြင်အောင်ပေါ့။ နောက်ပိုင်းကျတော့ သွားတာတွေများလာတော့ ရေမွှေးနံ့လည်း သိပ်မလုပ်နိုင်တော့ဘူး။ (ရယ်လျှက်) Chris က တစ်ချို့လူနာမည်တွေကို မမှတ်မိရင်သာနေမယ်။ အမွှေးနံ့တော့ မှတ်မိတယ်။ အမွှေးကြိုက်လို့။
ချစ်ခြင်းမေတ္တာနဲ့ ရနံ့လေးတွေရဲ့ ဆက်နွယ်မှုအကြောင်းလည်း ပြောပြပေးပါဦး။
Chris ကတော့ အမွှေးနံ့က အရမ်းအရေးကြီးတယ်လို့ထင်တယ်။ အမွှေးနံ့က Mood ပေးတယ်လို့ထင်တယ်။ ဒါကြောင့်အရေးကြီးတယ်လို့ ထင်တယ်။
ကိုယ်ရွေးချယ်လိုက်တဲ့ ရနံ့ကြောင့် ဘယ်လောက်အထိ ယုံကြည်မှုပိုစေခဲ့လဲ။
A . တစ်ယောက်နဲ့ တစ်ယောက် ကြိုက်တဲ့အနံ့ချင်းမတူဘူး။ Chris ဆိုရင် ပန်းနံ့သင်းသင်းလေးတွေကြိုက်တယ်။ ချိုချိုအီအီကြီးတွေ မကြိုက်ဘူး။ ချိုချိုသင်းသင်းလေးတွေဆို ကြိုက်တယ်။ ကိုယ်ကြိုက်တဲ့အနံ့ဆွတ်ထားရင် နေလို့ကောင်းနေတယ်။ ခေါင်းလည်းကြည်တယ်။ ကိုယ်မကြိုက်တဲ့အနံ့ကို ဆွတ်ထားမိရင် နေလို့မကောင်းဘူး။ ခေါင်းလည်းမကြည်တော့ဘူး။
အစ်ကိုနဲ့အစ်မတို့ စတွေ့တွေ့ချင်း First Impression တွေကိုပြန်အမှတ်ရစေမယ့် ရနံ့လေးတစ်ခုဆိုရင် ဘာဖြစ်မလဲ။
သူ့ဆီက အမြဲရတတ်တဲ့အနံ့က ရေမွှေးမဟုတ်ဘူး။ ဆပ်ပြာမှုန့်နံ့။ ဘယ်လိုသတိထားမိလည်းဆိုတော့ သူနဲ့ အိမ်ထောင်စကျတော့ အိမ်ပြောင်းတဲ့အချိန်မှာ သူ့အိမ်ကအနံ့က အဲ့အနံ့ဆိုတာကို မှတ်မိနေတယ်။ သူ့အခန်းထဲပြန်ဝင်သွားလိုက်ရင် အဝတ်လျှော်မှုန့်အနံ့ပေါ့နော်။
ဟိုတလောက Comfort ပွဲလေးမှာ အစ်မတို့တက်ခဲ့တဲ့ဓာတ်ပုံတွေကို တွေ့ခဲ့ပါတယ်။ အဲ့ဒါ Comfort ရဲ့ ရနံ့တွေထဲမှာ memory တွေကို ပြန်သတိရစေတဲ့ ရနံ့မျိုးလေးတွေပါလား။ ပါတယ်ဆိုရင် ဘယ်လိုမျိုးလေးတွေလဲ။
Comfort က မွှေးတယ်။ ဒါပေမယ့် Chris တို့ သုံးဖူးတဲ့ အနံ့တွေနဲ့လည်း မတူပြန်ဘူး။ တစ်မျိုးလေးမွှေးနေတယ်။ အမှတ်ရစရာဆိုတာကတော့ Comfort သုံးပြီးကတည်းက တက်တက်ကြွကြွသွားလာဖြစ်တယ်။ လန်းလန်းလေးပေါ့။ ဒီအနံ့ရှုလိုက်တိုင်း ခေါင်းကြည်တယ်။ အဝတ်အစားလေးတွေ အသုံးအဆောင်လေးတွေက မွှေးနေတဲ့အခါကျတော့ စိတ်ကြည်တယ်။
ချစ်ခြင်းမေတ္တာရဲ့ နားလည်မှုဆိုတာကို အစ်မအနေနဲ့ ဘယ်လိုအဓိပ္ပါယ်ဖွင့်ချင်လဲ။
ချစ်တဲ့အခါကျတော့ တချို့အရာနားလည်မပေးနိုင်တဲ့အရာတွေကိုတောင် နားလည်ပေးနိုင်တယ်။ ကိုယ်တကယ်ချစ်တယ်ဆိုရင်ပေါ့။ အင်္ဂလိပ်လိုပြောရရင် Unconditional Love ပေါ့။ Condition ပေါ်မူတည်ပြီး နားလည်ပေးတာမျိုးမဟုတ်ဘဲ အလိုလိုနေရင်းနားလည်ပေးနိုင်တယ်။
အိမ်ထောင်တစ်ခုတည်ဆောက်တဲ့အခါ လက်တွဲဖော်တစ်ယောက်အနေနဲ့ သိထားသင့်တဲ့ အချက်လေးတွေကို ပြောပြပေးပါလား။
Chris တို့ နှစ်ယောက်စလုံးမှာက အမျိုးသမီးမို့လို့ ဒီအလုပ်လုပ်ရမယ်။ အမျိုးသားမို့လို့ ဒီအလုပ်လုပ်ရမယ်ဆိုတာမျိုး မရှိဘူး။ နှစ်ယောက်စလုံးက အကုန်တူတူလုပ်တယ်။
အစ်မတို့ အတူတူသွားခဲ့ကြတဲ့ ခရီးတွေထဲမှာ အမှတ်တရအဖြစ်ဆုံးခရီးစဉ်က ဘာဖြစ်မလဲ။ ဘာကြောင့်လဲ။
အမှတ်ရစရာတွေကတော့ အများကြီး။ Chris က ခရီးစသွားတာဆိုရင် သူနဲ့အိမ်ထောင်ကျပြီးမှ စသွားဖြစ်တာ။ ပထမဆုံး သူနဲ့ လွတ်လွတ်လပ်လပ် စသွားဖြစ်တာဆို ဟန်းနီးမွန်းခရီးပေါ့။ ဟန်းနီးမွန်းကတော့ ဘယ်တော့မှ မမေ့ဘူး။ ဟန်နီးမွန်းသွားခဲ့တဲ့ နေရာကိုပဲ ပြီးခဲ့တဲ့နှစ် Anniversary တုန်းက Surprise လုပ်ပြီးတော့ ပြန်ပို့ပေးတယ်။ အကုန်လုံးက အမှတ်ရစရာဖြစ်ပေမယ့် အဲ့ဒါလေးကတော့ မှတ်မှတ်ရရပဲပေါ့။
အိပ်မက်ထဲက ခရီးစဉ်လေးရှိခဲ့ရင်ရော အကောင်အထည်ဖော်ခဲ့ပြီးပြီလား။ အဲ့ဒါက ဘယ်လိုခရီးစဉ်မျိုးဖြစ်မလဲ။
Chris ကတော့ Beach တွေသွားရတာကြိုက်တယ်။ တော်တော်များများလည်း ရောက်ပြီးပြီ။ သွားချင်တဲ့ Beach တွေလည်း ရှိတယ်။ သွားလည်း သွားမှာပါ။ ရာသီဥတုကောင်းပြီး အလုပ်လည်း ပါးတဲ့အချိန်ဆိုရင်တော့ သွားဖြစ်မှာပါ။
အသက်ရှင်မှုတိုင်းမှာ အကောင်းဆုံးတွေကိုသာ ဆန်းသစ်ဖန်တီးလိုသူ ရွှေသဲဝါ
အမျိုးသမီးတို့ရဲ့ စိတ်ခံစားမှုပုံရိပ်တွေကို ဖော်ပြချင်တာကြောင့် အမျိုးသမီးပုံ ပန်းချီကားတွေကိုသာ အများဆုံး ရေးဆွဲတတ်သူ၊ ကျောက်မျက်ရတနာတွေကို ချစ်မြတ်နိုးပြီး သဘာဝကျောက်တွေနဲ့ ကိုယ်ပိုင် Design ဖန်တီးပုံဖော်သူ Fairy Jewel ရဲ့ Founder မရွှေသဲဝါကို ယခုလ MODA Woman ကဏ္ဍအတွက် ရွေးချယ်ဖြစ်ခဲ့ပါတယ်။
သဘာဝကျောက်တွေကို ကိုယ်ပိုင် Design ဖော်ဖို့ ဘယ်လိုစိတ်ကူးရခဲ့တာလဲ။
မွေးရာပါဝါသနာကိုက ပန်းချီဆွဲတာနဲ့ အများနဲ့မတူတဲ့ အရာတွေကို ဖန်တီးချင်တဲ့ ဝါသနာလေ။ ဒါကြောင့်ပဲ သဘာဝကျောက်တွေကို ကိုယ်ပိုင် Design ဖော်ဖို့ စိတ်ကူးခဲ့တာပါ။
ဘာကြောင့် ဒီလုပ်ငန်းကို ရွေးချယ်ဖြစ်ခဲ့တာလဲ။
ဝါသနာပါတဲ့အလုပ်မှပဲ အဆိုးအကောင်းတွေကို ရင်ဆိုင်ဖြေရှင်းနိုင်မှာလေ။ ကျောက်မျက်ရတနာတွေကို ကျွန်မ မြတ်နိုးတာကြောင့်လည်း ပါတယ်။ မြတ်နိုးတဲ့အရာတွေကို ဝါသနာနဲ့ ပေါင်းစပ်တဲ့ လုပ်ငန်းကိုပဲ ကျွန်မလုပ်ချင်လို့ ရွေးချယ်ခဲ့တာပါ။
Online မှာ ဈေးကွက်ထိုးဖောက်နိုင်ဖို့ ဘယ်လိုပြင်ဆင်ခဲ့ရလဲ။
ကျွန်မ Online မှာ ၂၀၁၃ - ၂၀၁၄ ကတည်းကစလုပ်ခဲ့ပေမယ့် မှန်ကန်တဲ့လုပ်ဆောင်မှု၊ ကောင်းမွန်တဲ့နည်းပညာတွေနဲ့ တိကျပြီး ဖြစ်နိုင်မယ့် Business Model တစ်ခုကို တည်ဆောက်ခဲ့တယ်။ အထူးသဖြင့် Customer ရဲ့ တကယ့်လိုအပ်ချက်ကိုပဲ ဖြည့်ဆည်းတယ်။ သူ့အတွက်ပျော်ရွှင်မှုကို အဓိကထားပြီး ယုံကြည်မှုတစ်ခုနဲ့ ကျွန်မရပ်တည်ခဲ့တာ။
ဈေးကွက်ထဲမှာ ပြိုင်ဆိုင်မှုတွေရော ကြုံရလား။
ကျွန်မစလုပ်တုန်းက ဆိုင်ကြီးတွေကလွဲလို့ Online မှာလည်း မရှိသလောက်နည်းတယ်။ နောက်ပိုင်းကိုယ်ထိုးဖောက်လာနိုင်မှုမြင့်မားလာတာနဲ့အမျှ အများသူဌာလုပ်ချင်တဲ့ Business တစ်ခုလည်း ဖြစ်လာတယ်။ ပြိုင်ဆိုင်မှုဆိုတာကို ကျွန်မကိုယ်တိုင်မနှစ်သက်ဘူး။ ပြိုင်ဆိုင်မှုထက် ကိုယ့်ကိုကိုယ်အကောင်းဆုံးဖြစ်ဖို့အမြဲဆုံးမပြီး ပြုပြင်ပြောင်းလဲမှုတွေကို လုပ်တယ်။ ကိုယ့် Idea နဲ့ ကိုယ့်လမ်းကိုယ်လျှောက်တယ်။ ကိုယ်ဖောက်တဲ့လမ်း လျှောက်ကြရင် ကုသိုလ်ရတယ်လို့ပဲ တွေးတယ်။
ကိုယ်ပုံဖော်ဖန်တီးလိုက်တဲ့ ပစ္စည်းတွေ ရုပ်လုံးပေါ်လာတဲ့အခါ ခံစားရတဲ့ ခံစားချက်။
Design လေးတစ်ခုထွက်လာရင်လေ သိပ်လှတဲ့ ပန်းကလေးတွေ နံနက်ခင်းမှာပွင့်နေတာကို မြင်လိုက်ရတဲ့ ကြည်နူးမှုမျိုးပါပဲ။ မထိရက် မကိုင်ရက် တစိမ့်စိမ့်ကြည့်ရင်း ကျေနပ်နေတာ။
အနုစိတ်ပုံဖော်ရတဲ့ ကျောက်မျက်ရတနာ Design တစ်ခုအတွက် ပေးရတဲ့အချိန်က ဘယ်လောက်ရှိလဲ။
Design ဆိုတာ အနုစိတ်ရင် စိတ်သလိုအချိန်ပေးရတာ။ ကျွန်မကတော့ Collection အလိုက် Design ရေး၊ Production ပိုင်း အစရှိသဖြင့် တစ်လကနေ ၄၅ ရက်လောက်အချိန်ယူရတယ်။
Fairy Jewel က Design တွေက ဆန်းသစ်ပြီး ထူးခြားနေတယ်။ ဒီလို Design တွေအတွက် ဘယ်လိုလေ့လာလဲ။
Fairy လေးက ရွှေသဲဝါရဲ့ Soul ပါ။ ကျွန်မအသက်ရှင်မှုတိုင်းမှာ ဘယ်လိုအကောင်းဆုံးဆန်းသစ်တီထွင်နိုင်မလဲဆိုတာကိုပဲ တွေးနေတာလေ။ ကျွန်မဘဝကြီးကို နှစ်မြှုပ်ထားတယ်။ ရောက်ရှိတဲ့နေရာတိုင်း လေ့လာမှုတွေလုပ်တယ်။ သင်ကြားခြင်းဆိုတာ ဆုံးခန်းတိုင်မှ မရှိတာ။ အလုပ်တွေလုပ်ရင်း သင်ကြားနေရမှာပဲ။
Design တွေရဲ့ Concept ကရော ဘာကိုပြောချင်တာလဲ။
Design တွေရဲ့ Concept ကတော့ ရှေးခေတ် Design တွေကို အရမ်းသဘောကျတဲ့သူဖြစ်လို့ ရှေး Design တွေ လုပ်ဖြစ်တာများတယ်။
အရည်အသွေးပိုင်းနဲ့ ပတ်သက်ပြီးတော့ရော ဘယ်လိုအာမခံချက်ပေးထားလဲ။
Fairy Design တွေမှာ သဘာဝကျောက်တွေကိုပဲ သုံးတယ်။ တန်ဖိုးမြင့်အထည်တွေကို Gem Certificate ထုတ်ပေးတယ်။
သူများမတူတဲ့ Jewel Art Studio လေးဖွင့်ချင်တာ။ အကောင်အထည်ဖော်ဖို့ စိတ်ကူးထားပါတယ်။
ကျောက်မျက် Design သင်တန်းအကြောင်းလည်း ပြောပြပေးပါဦး။
အရည်အချင်း၊ Idea ၊ ကောင်းမွန်သောစိတ်နဲ့အတူ ငွေပမာဏတစ်ခုကို ရင်းနှီးပြီး ကျွန်မလိုလုပ်နိုင်စွမ်းရှိအောင် Future Generation တစ်ခုကို လက်ဆင့်ကမ်းခဲ့ချင်လို့ ကျွန်မသင်တန်းတွေဖွင့်ခဲ့တာ။ မှန်ကန်သော နည်းလမ်းနဲ့ တိုးတက်အောင်မြင်စေချင်လို့ပါ။ ကိုယ်သိတာတွေ အကုန်ပေးခဲ့ချင်တာ။
အလုပ်တွေကြားထဲကမှ အစ်မအနေနဲ့ ပရဟိတအလုပ်တွေလုပ်တာလည်းတွေ့ရတယ်။ ဒီအလုပ်တွေအတွက်ကိုရော ဘယ်လိုအချိန်ပေးဖြစ်လဲ။
ကျွန်မ သာသနာကို စောင့်ရှောက်နိုင်သောသူဖြစ်ချင်တယ်။ ကျွန်မရဲ့ လုပ်အားနဲ့ လိုအပ်တဲ့ နေရာကို ဖြည့်ဆည်းပေးရတာ ချမ်းသာခြင်းလို့ ခံစားရတယ်။ အဲ့အတွက် အလုပ်လုပ်ရင်းအချိန်ပေးဖြစ်တယ်။
အိမ်ထောင်ရှင် အမျိုးသမီးတစ်ယောက်လည်း ဖြစ်တယ်။ လုပ်ငန်းရှင်အမျိုးသမီးတစ်ယောက်လည်း ဖြစ်တယ်ဆိုတော့ အချိန် Manange လုပ်မှုအပိုင်းကိုလည်း ပြောပြပေးပါဦး။
အလုပ်စလုပ်ကတည်းက အိပ်ချိန်တွေလျော့ချခဲ့တာ။ နှစ်လ တစ်ခါတော့ ကျွန်မခရီးထွက်တယ်။
လုပ်ငန်းခွင်နဲ့ ပတ်သက်ပြီး ကိုယ့်အိမ်ထောင်ဖက်ရဲ့ ပံ့ပိုးပေးမှုကရော ဘယ်လိုရှိလဲ။
အမျိုးသားက ဆရာဝန်တစ်ဦးပါ။ သနားကြင်နာတတ်ခြင်းက ကျွန်မတို့အတွက် တူညီခြင်းပါပဲ။ တခါတလေ ကျွန်မမစဉ်းစားမိတဲ့ Risk တွေ သူက အမြဲသတိပေးလေ့ရှိတယ်။ အမြဲတိုင်ပင်ဖော်တစ်ယောက်အဖြစ် အဖော်ကောင်းတစ်ဦးပါပဲ။
အစ်မဆွဲလေ့ရှိတဲ့ ပန်းချီတွေကို ဘာကြောင့်အကျီၤတွေပေါ်မှာပဲ ဆွဲဖြစ်တာလဲ။
Fashion အနေနဲ့ ပန်းချီတွေကို ပြချင်တာ။ အကျီပြဲသွားသည့်တိုင်အောင် ဘောင်ပြန်သွင်းပြီး ပန်းချီကားလိုလည်း သုံးလို့ရတယ်။
ဆွဲတဲ့ ပန်းချီတွေ တော်တော်များများက အမျိုးသမီးပုံတွေပဲ တွေ့ရတယ်။ ဒါကရော အမျိုးသမီးတစ်ယောက်ရဲ့ ဖြစ်တည်မှုကို ဖော်ပြချင်တာလား။
အမျိုးသမီးတွေရဲ့ ခံစားချက်တွေကို ဖော်ပြတဲ့ Emotional နဲ့ ပတ်သက်တာတွေ အများဆုံးဆွဲဖြစ်တယ်။ အမျိုးသမီးတစ်ယောက်ရဲ့ ဖြစ်တည်မှုတွေပေါ့။
အစ်မဖန်တီးထားတဲ့ Design တွေကို Celebrity တော်တော်များများ ဝတ်ဆင်ကြတယ်။ ဘယ် Celebrity တွေ ဝတ်ဆင်ကြလဲ။
အဓိက ဝတ်တာကတော့ Treasa ၊ ဖွေးဖွေး ၊ မြတ်နိုးဝေ ၊ လှယဉ်ကျေး တို့ပေါ့။
တချို့ Silver Handcraft တွေကို ကိုယ်တိုင်လုပ်တယ်။
အမျိုးသားတွေပဲ လုပ်လေ့ရှိတဲ့ ပန်းထိမ်ကို အမျိုးသမီးတစ်ယောက်အနေနဲ့ လုပ်ဖြစ်တဲ့အပေါ်အစ်မရဲ့ ခံစားချက်။
ခံစားချက်ကတော့ ဘယ်အရာမဆို အမျိုးသားမှ လုပ်နိုင်တာမဟုတ်ဘူးလေနော်။ ပြင်းပြတဲ့စိတ်ရယ်၊ ကြိုးစားအားထုတ်မှုရယ်ရှိရင် လူတိုင်းလုပ်နိုင်တယ်ဆိုတာ ပြောပြချင်တာ။ ယုံကြည်မှုတွေပိုရှိလာပါတယ်။
Memory တွေနဲ့ ပုံဖော်ထားတဲ့ MADAME EM'S ရဲ့ ပဲ့ကိုင်ရှင် ပြည့်ဖြိုး
မြန်မာတွေအကြိုက် မြန်မာ့အစားအစာတွေကို ကော့တေးတစ်ခွက်ကိုကိုယ့်အိမ်မှာ သောက်နေရသလိုမျိုးခံစားချက်ကို ပေးနိုင်အောင် ဖန်တီးပေးထားတဲ့ Madame Em's မှာ ရရှိနိုင်မယ့် ကော့တေးတွေရဲ့ Story တွေအကြောင်း၊
မြန်မာတွေအကြိုက် မြန်မာ့အစားအစာတွေကို ကော့တေးတစ်ခွက်ကိုကိုယ့်အိမ်မှာ သောက်နေရသလိုမျိုးခံစားချက်ကို ပေးနိုင်အောင် ဖန်တီးပေးထားတဲ့ Madame Em's မှာ ရရှိနိုင်မယ့် ကော့တေးတွေရဲ့ Story တွေအကြောင်း၊ Madame Em's ဆိုတဲ့ အမည်ဆန်းဆန်းကို ဘာကြောင့်ပေးဖြစ်ခဲ့တာလည်း ဆိုတဲ့အကြောင်းနဲ့ Madame Em's နဲ့ သူရဲ့ ချစ်ဇနီးလေးတို့ရဲ့ ဆက်နွယ်မှုအကြောင်းတွေကို သိနိုင်ဖို့ ဒီတစ်လ MODA Man ကဏ္ဍမှာ ရွေးချယ်ထားတဲ့ ကိုပြည့်ဖြိုးနဲ့ တွေ့ဆုံမှုကို ဖော်ပြပေးလိုက်ပါတယ်နော်။
Bar Industry ကိုဘာကြောင့်စလုပ်ဖြစ်ခဲ့တာလဲ။
Bar ရယ်လို့သီးသီးသန့်သန့် စလုပ်ဖြစ်ခဲ့တာတော့မဟုတ်ဘူးပေါ့။ ငယ်ငယ်ကတည်းက သူငယ်ချင်းတွေအိမ်ကိုလာတာသဘောကျတယ်။ သူငယ်ချင်းတွေကို host လုပ်ရတာသဘောကျတယ်။ စင်ကာပူကနေပြန်လာပြီး ကတည်းက ဒီမှာ bar တစ်ခုခု ဒါမှမဟုတ် စားသောက်ဆိုင်တစ်ခုခုဖွင့်မယ်လို့ စဉ်းစားထားတယ်။ စဉ်းစားထားတာရယ် အကြောင်းအမျိုးမျိုးကြောင့်ရယ်နဲ့ ဒီ industry ထဲမှာလည်း လိုအပ်နေတဲ့အရာလေးတွေကိုလည်း တွေ့ရှိပြီးနောက် ကော့တေး bar လေးတစ်ခုလုပ်မယ်လို့ စဉ်းစားရင်းနဲ့ စပြီးလုပ်ဖြစ်သွားတာပါ။
ဆိုင်ရဲ့ အပြင်အဆင်ကလည်း မြန်မာနိုင်ငံမှာ မတွေ့ဖူးတဲ့ အပြင်အဆင်မျိုးဖြစ်နေတယ်။ ဆိုင်ရဲ့ Decoration idea အကြောင်းရှင်းပြပေးပါဦး။
Decoration idea ကတော့ ကျွန်တော်စဖွင့်မယ်ဆိုကတည်းက ခုချိန်ထိ ဒီနေရာရောက်လာအောင် သူငယ်ချင်းတွေအများကြီးနဲ့ စကားပြောကြည့်တယ်။ အကြံဉာဏ်တွေလည်း ယူတယ်။ သူငယ်ချင်းတွေအပြင် မိတ်ဆွေတွေ အဖေအမေ အစရှိသဖြင့် အကြံဉာဏ်ယူတယ်။ ဒါကျွန်တော်တစ်ယောက်တည်းဆွဲထားတဲ့ ဒီဇိုင်းလုံးဝမဟုတ်ပါဘူး။ ကျွန်တော့်ရဲ့ အသိုင်းအဝိုင်း၊ မိသားစု၊ သူငယ်ချင်းတွေအကုန်လုံးက ပေးကြတဲ့ အကြံဉာဏ်တွေနဲ့ ဖန်တီးဖြစ်သွားတာပေါ့။ နောက်တစ်ခုကလည်း ဆိုင်ရဲ့ အနေအထားကိုက ဆိုင်နေရာကကျဉ်းတော့ ကျဉ်းတာလေးနဲ့ အဆင်ပြေအောင် ဘယ်လိုလုပ်လို့ရလဲဆိုပြီး စဉ်းစားပြီးတော့ ဒီလိုလေးဖြစ်သွားတာပေါ့။ ရှိနေပြီးသားတိုင်တွေဆိုရင် ဖြတ်ချလို့လည်း မရဘူး။ မရတော့ ဒါကိုဘယ်လို Decoration လုပ်ရမလဲပေါ့။ အဲ့လိုမျိုးလေးတွေ ဘယ်လိုလုပ်ရင်ကောင်းမလဲ စဉ်းစားရင်းနဲ့ ဒီလိုမျိုးလေးတွေ လုပ်ဖြစ်တာပေါ့။
အပြင်ကနေ ဆိုင်ကို ကြည့်လိုက်တဲ့အခါ bar တစ်ခုလိုမထင်ရဘဲ အတွင်းထဲဝင်လိုက်တဲ့အခါမှသာ bar mood ကို တွေ့ရတယ်ဆိုတော့ ဒီလိုပုံစံမျိုးကို ဈေးကွက်ထဲမှာ လူသိအောင် ဘယ်လိုထိုးဖောက်သွားမလဲ။
ကျွန်တော်စလုပ်မယ်ဆိုကတည်းက ကျွန်တော်သွားချင်တဲ့ concept ကိုက Community base ပေါ့။ ကျွန်တော်ဆီလာမယ့်လူတွေကို ဘယ်လိုလူမျိုးတွေလာလဲ။ ဘယ်လိုလူမျိုးတွေသဘောကျလဲ အတိအကျကို ကျွန်တော်သိတယ်။ Service ကောင်းကောင်းပေးတာထက်စာရင် ကျွန်တော်တို့ဆီလာရင် ထူးခြားတာတစ်ခုက bar counter မှာထိုင်ပြီး bar tender နဲ့ ကိုယ်ဘာကြိုက်လဲ ပြောပြလို့ရမယ်။ ဆွေးနွေးလို့ရမယ်။ ဒီမှာ bar ဆိုတဲ့ သဘောသဘာဝအရ လူတွေက bar counter မှာ မထိုင်ချင်ကြဘူး။ bar counter မှာထိုင်ရင် မြင့်တယ်။ Bar Counter မှာ လူတွေမထိုင်ချင်ကြဘူး။ ကျွန်တော်ထိုးဖောက်သွားမယ့် ရည်ရွယ်ချက်ကတော့ ကျွန်တော့ဆိုင်ကိုလာရင် ကျွန်တော့အိမ်ကို လာလည်သလိုပဲ။ ကျွန်တော့်အိမ်ရဲ့ ပါတီလာသလိုပဲ။ အေးအေးဆေးဆေးနဲ့ စကားပြောလို့ရမယ်။ အိမ်ကိုတစ်အိမ်ကို ဧည့်သည်လာသလိုပဲ ကျွန်တော်တို့ဆက်ဆံပေးသွားမယ်။ တခြားဆိုင်တွေနဲ့ မတူတဲ့ vibes မျိုးရရှိအောင် ကျွန်တော်ကြိုးစားသွားမယ်။
Madame Em's ရဲ့ သူများနဲ့ မတူတဲ့ ထူးခြားမှုကို ပြောပါဆိုရင် ဘာဖြစ်မလဲ။
ထူးခြားမှုဆိုရင်တော့ ကျွန်တော်ပြောသလိုပဲ ကျွန်တော့်အတွက်ဆိုရင် Decoration တွေ Location တွေကအရေးကြီးတာ မှန်တယ်။ ဒါပေမယ့်လည်း ပိုအရေးကြီးတာက ကျွန်တော့်ဆိုင်လာမယ်ဆိုရင် ကျွန်တော် ကော့တေးရောင်းမယ်ဆိုရင် ကျွန်တော့်ကော့တေးက ကောင်းရမယ်။ ကောင်းရမယ်ဆိုတာက ကော့တေးတစ်ခုအတွက် recipe ရှိတယ်။ ဒါလုပ်မယ်ဆိုရင် ဒီတိုင်းပဲ လုပ်မယ်ပေါ့။ ကျွန်တော့်ဆီလာမယ်ဆိုရင် homely ဖြစ်မယ်။ ဆူဆူညံညံလည်း မဖြစ်ဘူးလို့ ကျွန်တော်အာမခံတယ်။ အာမခံတယ်ဆိုတာ ကျွန်တော့်ဆိုင်က club တော့မဟုတ်ဘူး။ ခုနောက်ပိုင်း bar တွေနဲ့ club တွေနဲ့ ရောနေတယ်။ ကျွန်တော့်ဆိုင်မှာက အေးအေးဆေးဆေးစကားပြောလို့ရမယ်။ ရောင်းတဲ့ Product ကိုလည်း မှန်မှန်ကန်ကန်နဲ့ ရောင်းချင်တယ်။ ၁၀၀၀ ပေးရရင် ၁၀၀၀ နဲ့ တန်တာကို ပြန်ပြီးပေးချင်တယ်။ နောက်တစ်ခုက music ပေါ့။ ကျွန်တော်ငယ်ငယ်ကတည်းက music ကို ဝါသနာပါတယ်။ Hip Hop ပဲ နားထောင်တယ်။ Rock ပဲ နားထောင်တယ်ဆိုတာမရှိဘူး။ ကျွန်တော်က အစုံအလင်ကို နားထောင်တယ်။ Music ကိုလည်း တစ်မူထူးပြီးတော့ Focus လေးပေးပြီးတော့ အလေးထားပြီးတော့ စီစဉ်သွားဖို့တော့ ရှိပါတယ်။
Madame Em's မှာရှိတဲ့ ကော့တေး menu တွေအကြောင်းကိုလည်း ရှင်းပြပေးပါဦး။
ဆိုင်ရဲ့ menu ရယ်လို့တော့ မဟုတ်ဘူးပေါ့။ ဒီတစ်ခုလုံးကို concept စပြီး create လုပ်တုန်းကတော့ နာမည်ကလည်း နည်းနည်းလေးတော့ ဆန်းတယ်။ တချို့လူတွေကလည်း နာမည်က ခေါ်ရခက်တယ်လို့ ပြောတယ်။ ကျွန်တော် ဒီ concept ကို လုပ်ဖြစ်သွားတာက ကျွန်တော့ အမျိုးသမီးကြောင့်ပါ။ ကျွန်တော့်အမျိုးသမီးကြောင့် ဆိုတာက ယောကျားက မိန်းမကို အရမ်းချစ်လို့ အရမ်း romantic ဖြစ်လို့ထက်စာရင် ကျွန်တော်ဒီလိုနေရာမျိုးရောက်လာတာ မိန်းမရှိလို့လည်း ရောက်လာတာပါ။ မိန်းမက တောက်လျှောက်ကို ပြန်လာကတည်းက ကျွန်တော် ဒါလုပ်ချင်တယ်လုပ်။ ပြသနာမရှိဘူး။ Day job သူလုပ်မယ်ပေါ့။ အဲ့ဒါနဲ့ပဲ လုပ်မယ်ဆိုတော့ သူ့နာမည်နဲ့ပဲ လုပ်ဖြစ်တာ။ သူ့ကိုလည်း tribute လည်း ပေးချင်တယ်။ Tribute ပေးချင်တာထက် Delicate လုပ်ချင်တာနဲ့စာရင် မိန်းမရယ်လို့မဟုတ်ဘဲပဲ တခြား woman တွေပေါ့။ အဲ့လိုလူမျိုးတွေအတွက် ကျွန်တော် celebrate လုပ်ချင်တာပေါ့။ တခြား ယောကျားတွေ ကျွန်တော့သူငယ်ချင်းတွေ သူတို့ရဲ့ life ထဲမှာရှိတဲ့ အမျိုးသမီးတွေကို Tribute လုပ်ချင်လို့ ဒီ bar လေးကို ဖွင့်ဖြစ်တာပါ။ နာမည်က Madame Em's လို့ခေါ်တယ်။ Madame ဆိုတာက မြန်မာလိုဆိုရင်တော့ “ ဒေါ်” ပေါ့လေ။ ကျွန်တော့်အမျိုးသမီးနာမည်က Emma ဆိုတော့ အတိုကောက်ဆိုရင် Em's ဆိုပြီး Madame Em's ဆိုပြီး ကျွန်တော် create လုပ်ဖြစ်သွားတာပါ။ ဒါကတော့ concept ပေါ့လေ။ ကျွန်တော်တို့က concept တစ်ခု create လုပ်ပြီဆိုရင် ညီတူညီမျှရှိနေမှပေါ့။ အဲ့ဒါလေးကတော့ ကျွန်တော့် bar မှာ thing တစ်ခုရှိမယ်။ Concept တစ်ခုရှိမယ်ဆိုရင် ထိထိမိမိ အစားအသောက်၊ music ၊ decoration အစုံအလင်ပေါ့လေ။ Menu ကို Memory လို့ အမည်ပေးထားတယ်။ Menu ကို ဖန်တီးတဲ့အခါမှာလည်း concept ရှိပြီးသား သဘောသဘာဝကြောင့် menu plan က အရမ်းလွယ်ကူတယ်။ လွယ်ကူတယ်ဆိုတာက ကျွန်တော့်အမျိုးသမီးရဲ့ ဘာကြိုက်လဲ၊ ဘာမကြိုက်ဘူးလဲ၊ စိတ်နေစိတ်ထား၊ သူ့ရဲ့အကျင့်တွေပေါ်မှာ မူတည်ပြီးတော့ ဆွဲထားတာပေါ့။ Menu ကို plan လုပ်တဲ့အခါမှာ Signature ၁၂မျိုး လုပ်ဖြစ်တယ်။ ၁၂ မျိုးကို Chapter တစ်ခုမှာ ၃ drink စီနဲ့ Chapter ၄ ခုရှိပါတယ်။ Menu ကို သေချာခွဲထားတယ်။ ကော့တေးရဲ့ သဘောသဘာဝလည်း ဒီမှာ တွင်တွင်ကျယ်ကျယ်မဖြစ်သေးဘူး။ အခုဆိုရင် ကောင်မလေးတွေ bar သွားလာတာ ပိုတွေ့လာရတယ်။ အဲ့လိုမျိုးတွေ့လာရတဲ့အချိန်မှာ စဉ်းစားမိတာ ကော့တေးစပ်တဲ့အခါ ကောင်မလေးတွေကို ပိုပြီးတော့ focus ထားချင်တယ်။ ထားချင်တဲ့သဘောကတော့ နာမည်က ကျွန်တော့်အမျိုးသမီးကို နာမည်နဲ့ လုပ်ထားတယ်။ အမျိုးသမီးတွေကို Delicate လုပ်ထားတဲ့ concept တစ်ခုဖြစ်တဲ့အတွက်ကြောင့် အမျိုးသမီးတွေကို ပိုပြီးတော့ Target ထားတယ်။ Menu မှာ တစ်ခုဆိုရင် သူကြိက်တဲ့ အစားအသောက်ဆိုရင်လည်း ဟုတ်တယ်။ တခြားမိန်းကလေးတွေလည်း ဘယ်လိုအစားအသောက်တွေကြိုက်တတ်လဲ စဉ်းစားမိတော့ မြန်မာဇီးထုပ်ပေါ့။ ဒါကတော့ ကျွန်တော်အရမ်းလည်း Highlight လုပ်ချင်တာပေါ့။ ဇီးထုပ်ကို မိန်းကလေးတော်တော်များများလည်း စားကြတယ်။ ဇီးထုပ်ကို ပေါ့ပေါ့ပါးပါးစားကြပေမယ့် တကယ်တမ်းလုပ်တဲ့အခါ ခက်ခဲတဲ့အရာတစ်ခုပါ။ ဇီးသီးကောင်းကောင်း၊ ထန်းလျှက်ရည်ကောင်းကောင်း၊ ငြုတ်သီးကောင်းကောင်းနဲ့ အဲ့ထဲမှာပါဝင်တဲ့ပစ္စည်းတွေလည်း ကောင်းကောင်းပါမှ ဇီးထုပ်တစ်ခုဖြစ်တာပေါ့။ အဲ့တော့ ဒီမှာ ပြန်ပြီးတော့ ဇီးသီး flavor နဲ့ ကော့ Create ဖန်တီးထားတာရှိတယ်။ တစ်ခုထူးခြားတာရှိတာက ကော့တေးတစ်ခုတိုင်းမှာ Story ရှိတယ်။ ဘာကြောင့်ဒီလိုလုပ်ထားတယ်ဆိုတာလေးလည်း Menu ထဲမှာ သေချာလေးရေးပေးမယ်။ ပစ္စည်းတစ်ခုရောင်းတာမဟုတ်ဘဲနဲ့ ဒီတခုဆိုရင် ဒါကြောင့်ဒီလိုလုပ်ထားပါလားဆိုတဲ့ Story လေး သိရတာပေါ့။
ဆိုင်မှာရှိတဲ့ menu တွေက အမျိုးသမီးရဲ့ အကြိုက်တွေပေါ်မှာ အခြေခံထားတယ်လို့လည်း သိရတယ်။ ဒီလိုဖန်တီးမှုတွေနဲ့ ပတ်သက်ပြီး အမျိုးသမီးနဲ့ အစ်ကို့ရဲ့ Relationship အကြောင်းလေး ပြောပြပါဦး။
ကျွန်တော်တို့ကို သိတဲ့သူငယ်ချင်းတွေတိုင်းက ပြောတယ်။ ကျွန်တော်နဲ့ သူနဲ့က မိန်းမယောကျာ်းပြောင်းပြန်တဲ့။ ကျွန်တော်က နည်းနည်းနုတယ်။ အားနာတယ်။ သူက ငယ်ငယ်လေးတည်းက ကျားကျားလျားလျားနေတတ်တာ။ ကျွန်တော်တို့ တစ်ယောက်နဲ့ တစ်ယောက် အရမ်း dependent ဖြစ်တယ်။ ကျွန်တော်သူ့ကိုလည်းအရမ်းအားကိုးတယ်။ သူလည်းကျွန်တော့်ကို အားကိုးတယ်။ ဒီအပေါ်မှာပဲ မူတည်ပြီးတော့ ကျွန်တော်တို့ရဲ့ Relationship က တည်ဆောက်ထားတာပေါ့နော်။ အခု သူကကိုယ်ဝန် ၇ လရှိနေပြီ။ ဒီအလုပ်လုပ်တဲ့အခါမှာလည်း Operation ပိုင်းအားလုံးက သူ Set up လုပ်ပေးထားတာပေါ့။ သူသာမပါရင် ဒါတွေအကုန်လုံးက ပြီးမှာမဟုတ်ဘူး။ ဘယ်လို Relationship ကို Define လုပ်ရမလဲဆိုရင်တော့ ကျွန်တော်က သူ့အပေါ်အရမ်း dependent ဖြစ်တယ်။ အလားတူပဲ သူလည်း ကျွန်တော့်အပေါ် dependent ဖြစ်တယ်လို့ ထင်တယ်။
ဘာကြောင့် အမျိုးသမီးကြိုက်နှစ်သက်တဲ့ food တွေကို inspiration ယူပြီး Menu တွေ ဖန်တီးဖြစ်ခဲ့တာလဲ။
အမျိုးသမီးအကြိုက်ရယ်လို့တော့ မဟုတ်ဘူးပေါ့။ ကျွန်တော့် Concept ကို ကျွန်တော်မှားမှာလည်း ကြောက်တယ်။ Title က ကျွန်တော့်အမျိုးသမီးနဲ့ ပတ်သက်တဲ့ memory ဆိုတော့ ဒါလေးတွေနဲ့ တခြား အမျိုးသမီးတွေကို Relate လုပ်တာပေါ့။
နောက်ပိုင်းမှာ ကော့တေး menu တွေကို ဘယ်လို update လုပ်သွားဖို့ရှိလဲ။
ကျွန်တော့် menu တွေအကုန်လုံးက ပုံမှန်ပြောင်းနေမှာပါ။ အခုလောလောဆယ်ဆိုရင် ကျွန်တော့်ရဲ့ main menu က လုံးဝ Launch မလုပ်ရသေးဘူး။ အခုဖွင့်ထားတာ တစ်ပတ်လောက်ရှိပြီ။ ဒီတစ်ပတ်အတွင်းမှာ ရမယ့် ကော့တေး ၇ မျိုးက ဒီတစ်ပတ်ထဲမှာပဲ ရမှာ။ နောက်ပိုင်းကျရင်လည်း ဒီ chapter နဲ့ memory ကို စလုပ်တဲ့အခါကျရင်လည်း ၆ လတန်သည်။ တစ်နှစ်တန်သည်။ အမြဲပြောင်းနေမှာ။ ပြောင်းလိုက်ရင်လည်း အရင်ကဟာတွေလုံးဝမရှိတော့ဘူး။ လုံးဝအသစ် အဲ့လိုမျိုးပေါ့။ အဲ့ဒါတွေအပြင်ကိုလည်း ကြားထဲမှာ title လေးတွေနဲ့ ပြောင်းပေးသွားဖို့ရှိပါတယ်။
ဆိုင်ရဲ့ Bar Tender နဲ့ Customer တွေရဲ့ Relation ကိုရော ဘယ်လိုပုံစံမျိုးနဲ့ တည်ဆောက်သွားဖို့ရှိလဲ။
Bar လာတယ်ဆိုတာ bar tender နဲ့ စကားပြောလို့ရရမယ်။ ကိုယ်ဘာကြိုက်တာလဲ ဆွေးနွေးလို့ရမယ်။ အဲ့ service က Restaurant တွေမှာတော့ ရှိတယ်။ Bar မှာဆိုရင် ပိုပြီးတော့ရှိရမှာပေါ့။ အဲ့ Relationship က ကျွန်တော်ကတော့ အတိအကျတည်ဆောက်ပေးထားမှာပါ။ ပြီးတော့ လာတဲ့ ဧည့်သည်ကိုလည်း မကြောက်တတ်အောင်၊ customer ကို စကားမပြောရဘူးဆိုတာမျိုး၊ kitchen ပိုင်းကမို့လို့ kitchen မှာပဲ နေရမယ်ဆိုတာမျိုး မရှိဘူး။ ကျွန်တော့်ဆီမှာရှိတဲ့သူတွေအကုန်လုံးကို ကွယ်ဝှက်ထားတာတွေမရှိဘဲ ကျွန်တော် Train ပေးမယ်။ Bar မှာ လုပ်တိုင်းလည်း အားမငယ်ရပါဘူးဆိုတာမျိုးဖြစ်အောင် ကျွန်တော် train ပေးမယ်။
လူတိုင်းကို ပျော်ရွှင်အောင်လုပ်ပေးချင်လို့ Bar Tender Life ကို ရွေးချယ်ခဲ့တဲ့ Joey Keen
ကော့တေးတစ်ခွက်ကို ဖျော်စပ်တဲ့အခါ Customer ရဲ့ Feedback ကိုနားထောင်ပြီး ဖျော်စပ်ပေးတတ်သူ၊ လူတွေနဲ့ ထိတွေ့ဆက်ဆံခွင့်ကတစ်ဆင့် သင်ယူလေ့လာတတ်သူ၊ Bar Tender ကောင်း တစ်ယောက်ဖြစ်ဖို့ဆိုတာ Drink ကောင်းကောင်းဖျော်စပ်တတ်ရုံသာ မဟုတ်ဘဲ Customer ပေါ်အခြေခံတယ်လို့ ခံယူထားသူ……..။ သူကတော့ Madame Em's ရဲ့ Bar Tender Joey Keen ပါ။ Joey Keen ပြောပြတဲ့ ကော့တေးဖျော်စပ်မှုတွေအကြောင်း၊ ဘာကြောင့် Bar Tender Life ကို ရွေးချယ်ခဲ့တယ်ဆိုတဲ့ အကြောင်းတွေကို ဒီလအတွက် MODA Man ကဏ္ဍမှာ ဖော်ပြပေးလိုက်ပါတယ်နော်။
Bar Tender အဖြစ်ရပ်တည်ဖြစ်ခဲ့တဲ့အကြောင်း အရင်ဆုံးပြောပြပေးပါဦး။
'ကျွန်တော်က လူတစ်ယောက်ကို ပျော်ရွှင်အောင် လုပ်ပေးရတာ ဝါသနာပါတယ်။ နောက်ပြီးတော့ ဒီ Bar Tender Life မှာကျတော့ လူတိုင်းနဲ့ ထိတွေ့ဆက်ဆံခွင့်ပိုများတယ်။ အများကြီးသင်ယူလို့ရတယ်။ အဲ့ဒါကြောင့် ကျွန်တော် ဒီ life ကို ရွေးချယ်ဖြစ်ခဲ့တယ်။
ဆိုင်ရဲ့ ကော့တေး menu တွေက ထူးခြားနေတယ်။ ဒီလိုမျိုး သူများနဲ့ မတူတဲ့ ထူးထူးခြားခြားကော့တေး ဖျော်စပ်မှုတွေအကြောင်းကို ပြောပြပါဦး။
ကျွန်တော်တို့ Bar ရဲ့ Concept ကိုက သူများနဲ့ မတူတဲ့ Concept ကို လုပ်တာဆိုတော့ Drink တွေကလည်း သူများနဲ့မတူတဲ့ Drink တွေကို လုပ်တာဖြစ်လို့ ကျွန်တော်တို့က မြန်မာတွေအနေနဲ့ ရင်းနှီးပြီးသားအရသာတွေကို လုပ်ထားပါတယ်။
ထူးခြားတဲ့ ကော့တေး menu တွေကို ဘယ်လို idea မျိုးနဲ့ဖန်တီးဖြစ်လဲ။
Idea စရတာကတော့ ကျွန်တော့် Boss ရဲ့ မိန်းမက သူကြိုက်တဲ့အရသာတွေကို သူ့ယောကျာ်းကို အမြဲတမ်းပြောပြတယ်။ တစ်နေ့ကျတော့ ကျွန်တော့် Boss ကလည်း Bar ဖွင့်မယ်ဆိုတော့ သူ့မိန်းမရဲ့ အကြိုက်တွေနဲ့ ကော့တေးကို စီစဉ်ရင်ကောင်းမလားလို့ ကျွန်တော့်ကို အကြံဉာဏ်တောင်းတယ်။ အဲ့ကနေစပြီး မြန်မာ Flavor ပါတဲ့ ကော့တေးတွေကို စီစဉ်ဖြစ်တာပါ။
ကျွန်တော့်အတွက် ကော့တေးဖျော်စပ်မှုတွေက Customer ရဲ့ Feedback နဲ့ သွားတာများတာပေါ့။ ကော့တေးတစ်ခွက်ကိုဖျော်မယ်ဆိုရင် ကိုယ်ကြိုက်တာကို ၈၀% လောက်ထည့်တယ်။ နောက်ပြီးတော့ ၂၀ % ကတော့ Customer အတွက်ထားပေးတယ်။ Customer ကိုမေးတယ်။ ဘာကြိုက်တတ်လဲ။ ဘယ်လိုသောက်လဲ။ သူတို့ရဲ့ စိတ်ကြိုက် ၂၀ % ကို ဖျော်ပေးတယ်။ အဲ့လိုလုပ်ပေးတဲ့အတွက် Customer ကျေနပ်လောက်တဲ့ ကော့တေးတစ်ခွက်ရနိုင်မယ်လို့ ထင်ပါတယ်။
ကျွန်တော်က အမြဲတမ်း Light ဖြစ်တဲ့ ကော့တေးကိုသောက်တယ်။ မိန်းကလေးစတိုင်လ်လိုမျိုး ကော့တေးတွေသောက်တယ်။
ဘန်ကောက်က bar life မှာလည်း အတွေ့အကြုံရှိခဲ့တယ်ဆိုတော့ မြန်မာနိုင်ငံနဲ့ ဘန်ကောက်ရဲ့ bar industry က ဘယ်လိုကွဲပြားမှုရှိလဲ။
ဘန်ကောက်မှာက Communication အရမ်းကောင်းတယ်။ တစ်ယောက်နဲ့ တစ်ယောက် Supporting အရမ်းကောင်းတယ်။ ဒီမှာတော့ Support လုပ်ကြတာ ၂၀ % လောက်ပဲရှိသေးတယ်။ Communication ရှိမှ ဒီ Business တစ်ခုက growing ဖြစ်မှာပေါ့။ ဟိုမှာကျတော့ bar life က မိသားစုပုံစံမျိုးပဲ run ကြတယ်။ လူမျိုးလည်းမခွဲဘူး။ နိုင်ငံလည်းမခွဲဘူး။ Bar Tender ဆို ဘယ်ဆိုင်က Bar Tender ဖြစ်ဖြစ်တူတူပဲ။ အားလုံးက အချင်းချင်း Respect ပေးကြတယ်။
Madame Em's ရဲ့ တခြား bar တွေနဲ့ မတူတဲ့ ထူးခြားတဲ့ ကော့တေးအရသာက ဘာဖြစ်မလဲ။
ထူးခြားတဲ့ကော့တေးဆိုရင် လက်ဖက် Martini ပေါ့။ လက်ဖက်ဆိုတာ မြန်မာတွေရဲ့ Traditional Food တစ်ခုပေါ့။ အဲ့ Food ကို ကော့တေးအနေနဲ့ ဖန်တီးပေးထားတယ်။
ကော့တေးတစ်ခုနဲ့ တစ်ခု ထူးခြားတဲ့အရသာနဲ့ ပြင်ဆင်မှုအတွက်ကိုရော ဘယ်လိုအားစိုက်ထုတ် ပြင်ဆင်ခဲ့လဲ။
ကျွန်တော်က အလုပ်တစ်ခုလုပ်မယ်ဆိုရင် စေတနာထည့်တယ်။ စေတနာထည့်ရင် အောင်မြင်မယ်လို့ ယုံကြည်ထားတယ်။ အဲ့ဒါကြောင့် ကိုယ့်စိတ်ကြိုက်ဖြစ်အောင် ကိုယ်လုပ်တယ်။ ကိုယ်မကြိုက်ရင်လည်း ကိုယ်မလုပ်ဘူး။ ကိုယ်တောင်သောက်လို့မရတဲ့အရသာကို Customer ကို မပေးဘူး။ အဓိက ကိုယ်ကြိုက်ပြီလား။ ကိုယ်စိတ်ကြိုက်ကျေနပ်မှ Customer ကို ပေးတယ်။ အဲ့ဒါမှ ဒီကော့တေးက ကောင်းတယ်လို့ထင်တယ်။
ဘယ်လို ထူးထူးခြားခြား menu တွေကို အသစ်ထပ်ဖန်တီးဖို့ရှိလဲ။
အများကြီးရှိပါတယ်။ မြန်မာအစားအစာကိုပဲ Inspiration ယူပြီးသွားမှာပါ။ မြန်မာပစ္စည်းထဲက တစ်ခုခု ဒါမှမဟုတ်ရင် မြန်မာတွေရဲ့ အဓိက Art Work တစ်ခုခု History ပါတဲ့ တစ်ခုခုကို Represent လုပ်ပြီး drink တွေ လုပ်သွားဖို့ ရှိပါတယ်။
Bar Tender က Bar တစ်ခုရဲ့ King ဖြစ်နေတဲ့အတွက်ကြောင့် ကိုယ်တာဝန်ယူထားတဲ့အပိုင်းကို ဘယ်လောက်အဓိ ကျေနပ်မှုရှိလဲ။
ကျွန်တော် Bar Tender တစ်ယောက်အနေနဲ့ တာဝန်ယူထားတဲ့အပိုင်းကို ကျေနပ်မှုရှိပါတယ်။ ဘာဖြစ်လို့လဲဆိုတော့ ဒီ Life ကို ရွေးချယ်လိုက်ကတည်းက Customer နဲ့ ထိတွေ့ချင်တာ စကားပြောချင်တာ သူတို့ဆီက ကိုယ်မသိတာ မတတ်တာတွေ မေးလို့ရတယ်။ အဲ့ဒါကြောင့်မို့ ကျေနပ်ပါတယ်။
Bar Tender တစ်ယောက်အနေနဲ့ အစ်ကို့ရဲ့ အားသာချက်တွေက ဘာဖြစ်မလဲ။
အားသာချက်ဆိုရင်တော့ ကျွန်တော်က Customer နဲ့ အရမ်းစကားပြောတာ Customer အလိုလိုက်တာပေါ့ဗျာ။ စိတ်ကျေနပ်အောင်ထားပေးတယ်။
Bar Tender တစ်ယောက်ရဲ့ဆိုင်ကိုလာတဲ့ Customer တွေကို ဆွဲဆောင်စည်းရုံးမှုအပိုင်းကိုလည်း ပြောပေးပါဦး။
Bar Tender ကောင်းတစ်ယောက်ဆိုတာ Drink ကောင်းကောင်းလုပ်တတ်ရုံနဲ့ Bar Tender ကောင်းတစ်ယောက်လို့ ခေါ်လို့မရဘူး။ Bar Tender ရဲ့ အောင်မြင်မှုက Customer ပေါ်အခြေခံပါတယ်။ Customer ကို ဆွဲဆောင်တယ်ဆိုတာကလည်း Customer ပြောတာကို နားထောင်မယ်။ သူတို့ကို ဘယ်လို Represent ပြန်လုပ်ပေးမလဲ။ သူတို့ဘာတွေလိုအပ်နေလဲဆိုတာကို ကြည့်ပြီးတော့ ကျွန်တော်တို့က ကော့တေးပြန်စပ်ပေးတယ်။ Customer တွေက ဒီ Bar လာရင် စိတ်ကျေနပ်မှုပိုရမယ်။ တစ်ယောက်နဲ့တစ်ယောက် ပွင့်ပွင့်လင်းလင်းပိုဖြစ်တာပေါ့ဗျာ။ ဒီ Life မှာတော့ လာတဲ့သူတွေအကုန်လုံးအတွက် warm ဖြစ်ရမယ်။ ကိုယ့်အိမ်ကိုယ်ပြန်လာသလိုဖြစ်ရမယ်။ Relax ဖြစ်တဲ့ နေရာလေးဖြစ်အောင် လုပ်ထားတယ်။ အဲ့ဒါကြောင့် Customer တွေက ဒီကိုပြန်လာမယ်လို့ ယုံကြည်တာပေါ့။
ယုံကြည်မှုရှိခြင်းရဲ့ အလှတရား M Seng Lu
Update အမြဲဖြစ်နေတဲ့ အမိုက်စားဖက်ရှင်တွေအကြောင်း၊ NIVEA Floral Whitening Roll-on ကြောင့် သူမရဲ့ လျှို့ဝှက်တဲ့ အလှတရားတွေအပေါ် ယုံကြည်မှုှရှိစေခဲ့တဲ့အကြောင်းတွေနဲ့ NIVEA Whitening Roll-on က ပျက်စီးနေတဲ့ ချိုင်းကြားအသားအရေကိုလည်း ပြုပြင်ပေးတာကြောင့် မိန်းကလေးတို့အတွက်လည်း ကိုယ့်ကိုကိုယ်ယုံကြည်မှုပိုစေတဲ့အကြောင်းတွေကို ဒီလ MODA ရဲ့ Cover Star ဖြစ်တဲ့ M Seng Lu က ပြောပြခဲ့ပါတယ်။
Update အမြဲဖြစ်နေတဲ့ အမိုက်စားဖက်ရှင်တွေအကြောင်း၊ NIVEA Floral Whitening Roll-on ကြောင့် သူမရဲ့ လျှို့ဝှက်တဲ့ အလှတရားတွေအပေါ် ယုံကြည်မှုှရှိစေခဲ့တဲ့အကြောင်းတွေနဲ့ NIVEA Whitening Roll-on က ပျက်စီးနေတဲ့ ချိုင်းကြားအသားအရေကိုလည်း ပြုပြင်ပေးတာကြောင့် မိန်းကလေးတို့အတွက်လည်း ကိုယ့်ကိုကိုယ်ယုံကြည်မှုပိုစေတဲ့အကြောင်းတွေကို ဒီလ MODA ရဲ့ Cover Star ဖြစ်တဲ့ M Seng Lu က ပြောပြခဲ့ပါတယ်။ M Seng Lu က သူမရဲ့ အလှအပလျှို့ဝှက်ချက်တွေသာမကဘဲ သူမခံယူထားတဲ့ ချစ်ခြင်းမေတ္တာအကြောင်းတွေကိုပါ ဖွင့်ဟခဲ့ပါသေးတယ်။
M Seng Lu အတွက်အချစ်ဆိုတာကို ဘယ်လိုအဓိပ္ပါယ်ဖွင့်ချင်လဲ။
အချစ်လို့ ပြောလိုက်ပြီဆိုတာနဲ့ အရမ်းလည်းနက်ရှိုင်းတယ်။ ဆန်းလည်းဆန်းကြယ်တာပေါ့။ ဒါပေမယ့်အချစ်ဆိုတာက သူ့ဘက်ကချစ်သည်ဖြစ်စေ၊ မချစ်သည်ဖြစ်စေ ကိုယ့်ဘက်က အမြဲတမ်းချစ်နေဖို့ပဲ လိုတာပေါ့။
Valentine Day မှာ Boyfriend ဆီက လိုချင်တဲ့ထူးထူးခြားခြားလက်ဆောင်ဆိုရင် ဘာဖြစ်မလဲ။
အမြဲတမ်းက Valentine Day ဖြစ်နေတဲ့အတွက်ကြောင့် Valentine Day မှာ လိုချင်တဲ့ ထူးထူးခြားခြားလက်ဆောင်ကတော့ မရှိပါဘူး။
ဆယ်ကျော်သက် အရွယ် Valentine Day အတွေ့အကြုံအကြောင်း ပြောပြပါဦး။
စိတ်လှုပ်ရှားတဲ့အရွယ်ပေါ့။ အဲ့တုန်းက အချစ်ဆိုတာလည်း ဘာမှန်းမသိဘူး။ အဓိကက ရင်ခုန်ပြီးစိတ်လှုပ်ရှားတာနဲ့တင် ပျော်နေတာပေါ့။ မုန့်သွားစားမယ်။ ရုပ်ရှင်ကြည့်မယ်။ ဒါလေးကတော့ Teenager Love ပေါ့။
Valentine Day မှာ အသဲကွဲတာနဲ့ကြုံဖူးလား။
ကြုံဖူးတယ်။ အဲ့နေ့မှာ အသဲကွဲတာလောက် ဆိုးဝါးတာမရှိဘူး။ အဲ့တုန်းက အရမ်းခံစားလိုက်ရတယ်။
မိန်းကလေးတွေက ကိုယ့်ချစ်သူကိုအရာရာတိုင်းမှာ Perfect ဖြစ်စေချင်ကြတယ်။ Seng Lu အနေနဲ့ရော ကိုယ့် Boyfriend နဲ့ ပတ်သက်ပြီး စံ သတ်မှတ်ချက်ရှိလား။
Seng Lu ကတော့လေ ကိုယ့် Boyfriend နဲ့ ပတ်သက်ပြီးတော့ စံနှုန်းသတ်မှတ်ထားတာမရှိဘူး။ လူတိုင်းကတော့ အားနည်းချက်ကိုယ်စီရှိတယ်။ ကိုယ့်မှာလည်း အားနည်းချက်ရှိတယ်။ သူ့ဆီမှာလည်း အားနည်းချက်ရှိတယ်။ ဒါပေမယ့် အားနည်းချက်ကို မကြည့်ဘဲနဲ့ သူ့ရဲ့ အားသာချက်တွေကို မြင်ပြီးတော့ပဲ အကောင်းဆုံးတွေနဲ့ အတူတူလျှောက်လှမ်းတာပေါ့။ စံသတ်မှတ်ထားရင်လည်း ပြီးရင်လည်း အလကားပါပဲ။ အဲ့လောက်အထိလည်း မလိုအပ်ဘူးလို့ ထင်တာပါပဲ။
ကိုယ့်ကိုကို ဆွဲဆောင်မှုရှိတဲ့ မိန်းကလေးလို့ ထင်လား။ ဘာကြောင့်လဲ။
ဆွဲဆောင်မှုအပြည့်ရှိတဲ့ မိန်းကလေးလို့ ကိုယ့်ကိုကိုယ်ထင်တယ်။ ဘာလို့လဲ ဆိုတော့ Confidence ပေါ့။ အရင်တုန်းကတော့ ကိုယ့်ကိုကိုယ်အမြဲ ဆိုက်ကိုဖြစ်တယ်။ အဆင်ပြေပါ့မလားဆိုတဲ့ အတွေးအမြဲဝင်တယ်။ အခုနောက်ပိုင်းတော့ သိပ်မရှိတော့ဘူး။ ငါ Seng Lu ပဲ။ ဘာလို့ အဲ့လောက်အထိ အာရုံစိုက်ထားစရာလိုလဲဆိုတဲံ အတွေးဝင်တယ်။ ကိုယ့်ကိုကိုယ် Confidence ရှိတယ်။
Seng Lu က Fashion ပိုင်းမှာလည်း အမြဲ Update ဖြစ်နေတဲ့သူတစ်ယောက်ဖြစ်တယ်။ ဒီလိုမျိုး Fashion တွေအမြဲ Update ဖြစ်အောင် ဘယ်လိုပြင်ဆင်လေ့လာလဲ။
Seng Lu က International Magazine တွေအမြဲကြည့်တယ်။ Fashion Editorial ၊ Model တွေ ၊ ဒီဇိုင်နာ သူတို့တွေရဲ့ Collection တွေကို အမြဲကြည့်တယ်။ အဲ့တော့ Seng Lu ရဲ့ ဖက်ရှင်လည်း အမြဲ Update ဖြစ်အောင် လုပ်တာပေါ့။ ဒါမယ့် Seng Lu က ကိုယ်နဲ့ လိုက်ဖက်မှုရှိတဲ့ Trend နောက်ကိုပဲ လိုက်တယ်။ အမြဲတမ်းမိုက်နေမယ့်အထာမျိုးကို ရွေးချယ်ဖြစ်တယ်။
Fashion ပိုင်းမှာ Seng Lu ရဲ့ Idol က ဘယ်သူတွေဖြစ်မလဲ။
Rihanna အရမ်းကြိုက်တယ်။ Rihanna က မော်ဒယ်မဟုတ်ပေမယ့် ဖက်ရှင်တော်တော်များများကို Rihanna ကိုကြည့်ပြီးတော့ အတုယူဖြစ်တယ်။ ပြီးတော့ မော်ဒယ်ထဲမှာဆို Bella Hadid ။ သူတို့နှစ်ယောက်ကို အရမ်းကြိုက်တယ်။
အသားအရေနဲ့ ပတ်သက်ပြီးတော့ရော ဘယ်လိုထိန်းသိမ်းလဲ။
အသားအရေနဲ့ ပတ်သက်ပြီးတော့ Seng Lu အရမ်း Take Care လုပ်တယ်။ ဘာလို့လဲဆိုတော့ Seng Lu ရဲ့ မျက်နှာကဝက်ခြံထွက်တာအရမ်းလွယ်တယ်။ တစ်လမှာ ၁၅ ရက် ၂၀ ရက်လောက်ကတော့ အမြဲ ဝက်ခြံထွက်တယ်။ ထိန်းသိမ်းတာကတော့ Seng Lu ရေများများသောက်တယ်။ ပြီးရင် ခန္ဓာကိုယ်မှာ Detox များများလုပ်တယ်။
Nivea ရဲ့ ဘယ် Product တွေကို အကြိုက်ဆုံးလဲ။
Nivea Product ထဲမှာဆိုရင် Roll-on ၊ Lip balm ၊ Body Lotion အကုန်လုံးသုံးဖြစ်တယ်။ အကြိုက်ဆုံးထဲမှာဆိုရင်တော့ Deodorant ပေါ့။ Deodorant က မွှေးရနံ့နဲ့ Whitening Feature က တခြား Brand တွေနဲ့ မတူဘဲ သိသာတဲ့ပြောင်းလဲမှုရှိတယ်။ တစ်နေကုန် ချွေးဘယ်လောက်ထွက်ထွက် မွှေးရနံ့က ပျောက်မသွားဘူး။ စိတ်ကိုလန်းဆန်းစေတယ်။
အချိန်အကြာကြီး ရပ်တည်နေတဲ့ Brand တစ်ခုကို အသုံးပြုမှုအပေါ် Seng Lu ရဲ့ ယုံကြည်မှုအကြောင်းပြောပြပါဦး။
Brand တစ်ခုက အချိန်အကြာကြီး ရပ်တည်နေနိုင်ဖို့ဆိုတာ ခက်ခဲပါတယ်။ အခုအချိန်ဆိုရင် ရွေးချယ်စရာတွေကလည်း အများကြီးရှိနေပြီ။ ဒါပေမယ့် Nivea ဆိုရင် Quality ကို ထိန်းထားနိုင်တာရယ်။ သုံးတဲ့သူတွေစိတ်ကြိုက်ကို Nivea က သိတဲ့အတွက်ကြောင့် ကိုယ့်ကိုကိုယ်လည်း ပိုပြီးတော့ Confident လည်း ဖြစ်စေတယ်။ တစ်နေ့တာ ဖြတ်သန်းသွားလာရတဲ့အချိန်တွေမှာ Nivea က Seng Lu အတွက် မရှိမဖြစ်ပါပဲ။
Nivea က အသစ်မိတ်ဆက်လိုက်တဲ့ NIVEA Floral Whitening Roll-on Range ကိုရော စမ်းသုံးကြည့်ပြီးပြီလား။
Nivea က လက်ဆောင်ပို့ထားတော့ စမ်းသုံးကြည့်တာ တော်တော်ကောင်းတယ်။ ပန်းအနံ့တစ်ခုချင်းစီက ကိုယ့်အကြိုက်အနံ့သေးသေးလေးတွေနဲ့ ဆိုတော့ စိတ်ကိုလန်းဆန်းစေလို့ သုံးလို့အရမ်းကောင်းပါတယ်။
အမျိုးသမီးတွေရဲ့ ကိုယ့်ကိုကိုယ်ယုံကြည်မှုနဲ့ ချိုင်းကြားအသားအရေလှပမှုက ဆက်စပ်နေတဲ့ အကြောင်းနဲ့ ပတ်သက်ပြီး Seng Lu ရဲ့ အမြင်ကို ပြောပေးပါဦး။
ဒီမှာက မိန်းကလေးတွေအနေနဲ့ ချိုင်းမဲတာက ရှက်စရာတစ်ခုလိုမျိုးဖြစ်နေတယ်။ မိန်းကလေးတွေအတွက် ချိုင်းကြားအသားအရေဆိုတာ အလှတရားတစ်ခုပဲ။ ပြီးတော့ Nivea ကနေလည်း Whitening အတွက် အဓိက ထုတ်ထားတဲ့ Roll-on တွေလည်း ရှိနေတော့ နောက်ဆိုရင် ဒါနဲ့ ပတ်သက်ပြီး ရှက်ရွံနေဖို့မလိုတော့ဘူး။ ကြိုက်တဲ့ အကျီၤကို ဝတ်လို့ရမှာဆိုတော့ တကယ်ကိုအကျိူးရှိပါတယ်။
ဖေဖော်ဝါရီလက အချစ်လလေးဆိုတော့ အချစ်အကြောင်းကို ပြန်သွားကြရအောင်။ အကယ်၍ အသက်ရှင်ဖို့တစ်ရက်သာ အချိန်ရှိတော့မယ်ဆိုရင် ဘယ်သူနဲ့ Date ချင်လဲ။ ဘာကြောင့်လဲ။
အသက်ရှင်ဖို့တစ်ရက်ပဲ အချိန်ရှိတော့မယ်ဆိုရင်တော့ ဘယ်သူနဲ့မှ မ Date ချင်တော့ဘူး။ တစ်ယောက်တည်းပဲ နေတော့မယ်။ ဘာကြောင့်လည်းဆိုတော့ ရွေးချယ်စရာ အရမ်းများသွားပြီ။ ( ရယ်လျှက် )
Seng Lu ရဲ့ အချစ်ဦးအကြောင်းကို ပြောပြပါဦး။
အချစ်ဦးကတော့ အခုချိန်ထိတော့ ချစ်ဆဲပါပဲ။
Seng Lu က အချစ်ရေးမှာ ကံကောင်းသူတစ်ယောက်လား။
ကိုယ့်ကိုကိုယ် ကံကောင်းတယ်လို့တော့ ထင်တယ်။
Seng Lu ကို ဆွဲဆောင်နိုင်မယ့် ကောင်လေးက ဘယ်လိုပုံစံမျိုးဖြစ်မလဲ။
ပထမဦးဆုံးဆိုရင်တော့ သူ့ရဲ့အပြင်ပုံစံ Fashion ပေါ့။ ဖက်ရှင်ဆိုတာ အရမ်း Fashion ဆန်တဲ့ ပုံစံမျိုးတော့ မဟုတ်ပါဘူး။ အဲ့လိုမျိုးအပြင်ပုံသဏ္ဍန်ကို ကြည့်တယ်။ ပြီးတော့ တခြားလူတစ်ဖက်သားတွေအပေါ်မှာ သူ Respect ဘယ်လောက်ရှိလဲ။ လူတွေပေါ်မှာ ဘယ်လိုဆက်ဆံလဲ။ ဘယ်လောက်အထိ အများအပေါ်နှိမ့်ချပြီးတော့ ဆက်ဆံလဲ။ Seng Lu အဲ့ဒါတွေကြည့်ဖြစ်တယ်။